ရင်ခုန်သံပန်းနုနု ချစ်ပါရစေလားရှင် – Grab Love Story
လင်း သူ့ကိုချစ်တယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်♥ မိန်းကလေးမို့လို့ ဖွင့်ပြောလို့မရတာ♥ လင်း ချစ်တာကို ဖုံးကွယ်လို့ မရပါဘူး♥ နေ့တိုင်း ညတိုင်း အချိန်တိုင်း သူ့အနားမှာနေချင်တယ်♥ သူ့အသံလေးကို နားထောင်ချင်တယ်♥ သူပေးတဲ့ အကြင်နာလေးတွေကို ခံယူကြည့်ချင်တယ်♥ သူ့ရင်ခုန်သံကို နားထောင်ချင်တယ်♥ တဖက်သတ်အချစ်ဟာ ရင်ပူတယ်ဆိုပေမယ့် လင်း သူ့ကို အရမ်းချစ်တယ်♥ တနေ့ သူ လင်းကို ချစ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်လေးက လင်းအတွက် အားဆေးပါပဲ♥ နေ့တိုင်းအသက်ရှူနေတယ်♥ နေ့တိုင်း ကြိုးစားနေတယ်♥ သူ့အတွက်♥ သူဆိုးပါတယ်♥ ရီးစားတွေ အများကြီးပဲ♥ တလကို တယောက်လောက် တွဲနေတယ်♥ လင်း သိတယ်♥ ခွင့်လွှတ်ပေးနိုင်တယ်♥ သူ့ရင်ထဲမှာ လင်းကို အချစ်ဆုံးဆိုတာ လင်းယုံတယ်♥ လင်းရင်ထဲမှာလဲ သူပဲရှိတယ်♥ သူ နေ့တိုင်း ကလပ်တက်တယ်♥ ကောင်မလေးတွေ သူ့ကို လာခေါ်ကြတယ်♥ လင်း ဝရန်တာကနေ ချောင်းချောင်းကြည့်တယ်♥ စိတ်မကောင်းပါဘူး♥ ဒါပေယ့် သူ့အခွင့်အရေးကို မပိတ်ချင်ဘူး♥ မတားဆီးချင်ဘူး♥ သူ့ရဲ့ စိတ်ကို လင်းနားလည်တယ်♥ သူစိတ်ညစ်သွားမှာစိုးတယ်♥ တခြားကောင်လေးတွေ ဘယ်လောက်ချောချော လင်းသူ့ကိုပဲ ချစ်တယ်♥ သူ့ထက်သာတာတွေ အများကြီးပဲ♥ ဒါပေမယ့် သူ့ကိုပဲ လင်း ချစ်တယ်♥ ဘုရားပေးတဲ့ အချစ်လား♥ ရင်ထဲက အနှစ်လား လင်းပြောတတ်ဖူး♥ လင်းရင်ထဲမှာ သူတယောက်ပဲ ရှိတယ်♥ သူ မနက် ၄ နာရီ ၅ နာရီမှ ပြန်လာတယ်♥ လင်း စိတ်မကောင်းဖူး♥ လင်း ငိုမိတယ်♥ တိတ်တိတ်လေးပေါ့♥
လင်းက သူ့ကောင်မလေးတွေလောက် မလှပါဘူး♥ ဆက်ဆီ မကျဘူး♥ ယောက်ျားလေးကြိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးတော့ မဟုတ်ဘူး♥ ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်♥ sweet ဖြစ်တယ်♥ လင်း တခါတလေ စကဒ်တိုတိုလေးတွေ ဝတ်တယ်♥ သူ အရမ်းပြောတယ်♥ စကဒ်ဝတ်ပြီး ဘယ်ကောင့်ကို ကြူမလို့လဲတဲ့♥ လင်း မျက်ရည်ကျမိတယ်♥ အိမ်ထဲက အိမ်အပြင်မထွက်တဲ့ လင်းက ဘယ်သူ့ကို ကြူရမှာလဲ♥ မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး သူ့ကို ပြောမိတယ်♥ သူ့ကို ကြူမလို့လို့♥ ဒေါက်ကနဲ ခေါင်းခေါက်ခံရတယ်♥ ကလေးက ကလေးလိုနေတဲ့♥ လင်းက ကလေးလား ၁၈ နှစ်ပြည့်ပြီ♥ ဒင်ပြည့်တင်းပြည်းလို့ ပြောလို့မရသေးပေမယ့် ကျောင်းမှာတော့ ကောင်လေးတွေ အလေးပေးခံရပါတယ်♥ ချစ်စရာကောင်းလို့တဲ့♥ လင်းနဲ့သူက အိမ်ချင်းကပ်ရပ်ပါပဲ♥ လင်းအခန်းထဲ သူခဏခဏလာပေမယ့် သူ့အခန်းထဲ လင်းကို ပေးမဝင်ဘူး♥ ကလေး မဝင်ရဘူးတဲ့♥ လင်းကလဲ လင်းပဲ♥ တခါတလေ သူ့ Laptop ကို ဖွင့်ကြည့်မိတယ်♥ သူ တအားစိတ်ဆိုးတယ်♥ မဆိုင်တာ မကိုင်နဲ့တဲ့♥ အဲဒီနေ့က လင်း ငိုမိတယ်♥ သူဘာလို့ မဆိုင်ဘူးလို့ ပြောချင်တာလဲ♥ လင်းက သူ့ရဲ့ ဘာလဲဟင်♥ တိတ်တခိုးချစ်နေတာကို သူမသိတာလဲမဟုတ်♥ လင်း သူ့ကို တပတ်လောက် ခပ်တန်းတန်းပဲနေတယ်♥ အဲဒီလိုကျတော့လဲ လင်းကို အတင်းလာခေါ်တယ်♥ မိုးလင်းကတည်းက တနေ့လုံး အိမ်မှာလာနေတယ်♥ လင်းအခန်းထဲမှာ♥ ဒီလိုကျတော့လဲ လင်း ပျော်တယ်♥ စိတ်ထဲမှာ ကျေနပ်တယ်♥ ကြည်နူးတယ်♥ လင်းတို့ နှစ်အိမ်က အရမ်းခင်ပါတယ်♥ မေမေက တခြားကောင်လေးတွေ ဖုန်းဆက်ရင်သာ မကြိုက်တာ♥ သူ လင်းအခန်းထဲ လာအိပ်တာ ဘာမှမပြောဖူး♥ လင်းထင်တာတော့ သဘောတူတယ်ထင်တာပဲ♥ အချိန်တခုရောက်လာရင် ပေးစားဖို့များ စိတ်ကူးထားလားမသိပါဘူး♥ သူ့အမေကလဲ လင်းကို တအားချစ်ပါတယ်♥ နေ့တိုင်း စားဖို့ ဟင်းပို့ပေးတယ်♥ လင်းမှာ အကိုတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ်♥ ဒါပေမယ့် အဖတ်မတင်ဘူး♥ လင်းကို မွေးပြီး မေမေက ထပ်မမွေးနိုင်တော့ဘူး♥ သူကတော့ တဦးတည်းသော သား♥ အရမ်းခေါင်းမာတယ်♥ ဒါဆိုမှ ဒါ♥ မဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်♥ လင်းနဲ့သူ စိတ်ထားတူတယ်♥ လင်း ဖြစ်ချင်တာလဲ ဘယ်တော့မှနောက်မဆုတ်ဘူး♥ ရအောင်လုပ်တယ်♥ လင်းက ဉာဏ်မကောင်းဘူး♥ ဆယ်တန်းဖြေတော့ သူ စာလာလာသင်ပေးတယ်♥ တအားခေါက်ခံရတာပဲ♥ လင်းမှ နားမလည်တာ♥ စာမကျက်တတ်ဘူး♥ သူ ရှင်းပြတယ်♥ လင်းနားလည်သွားတယ်♥ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်♥ လင်း ဆယ်တန်းအောင်တယ်♥ သူ့ကြောင့်♥ ဒါပေမယ့် သူ အထင်ကြီးမှုတော့ မခံရဘူး♥ လင်းက စာမတော်လို့♥ သူများမေးရင် ငါသင်ပေးတယ်မပြောနဲ့တဲ့♥ သူ လှောင်ပေမယ့် လင်းပျော်တယ်♥ ညတိုင်းစာလာသင်ပေးတဲ့အချိန်လေးကို တန်ဖိုးထားမိတယ်♥ လင်း သူ့ကို ချစ်တယ်♥
လင်းစာကျက်ရင် ညဝတ်ဂါဝန်လေးဝတ်တယ်♥ တခါတလေ ဘရာ မဝတ်ဖူး♥ လင်း မြှူဆွယ်တာမဟုတ်ပေမယ့် သူ့ကို မြင်စေချင်တယ်♥ ဒီဆန္ဒလေးက တဖြေးဖြေးနဲ့ ပိုပြီးခိုင်မာလာမိတယ်♥ လင်းအတွင်းပစ္စည်းလေးက မကြီးပေမယ့် သိပ်တော့မသေးပါဘူး♥ ပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ အတ္တစိတ်ခေါ်မလား♥ လင်း ဒီလိုလေး ဝတ်မိတယ်♥ ကြိုးတချောင်းဂါဝန်တိုလေးနဲ့ လင်း စာကျက်တယ်♥ သူ လင်းကို မြင်တော့ မျက်လုံးလေး လက်သွားတယ်♥ ဖျပ်ကနဲပဲ♥ လင်း မြင်လိုက်တယ်♥ သူ ဟန်ဆောင်တယ်♥ ဟန်ဆောင်တတ်တယ်♥ လင်းကို စိတ်မဝင်းစားဖူးပေါ့♥ လင်းရဲ့အလှအပက သူ့ကောင်မလေးတွေကို မမှီပါဘူး♥ ဒါပေမယ့် လင်း သန့်ရှင်းတယ်♥ ကိုယ့်ကိုကိုယ် တန်ဖိုးထားတယ်♥ ဒါတွေက သူ့အတွက်ပါ♥ လင်း ရေချိုးပြီးတိုင်း လိုးရှင်းလိမ်းတယ်♥ အသားအရေကိုထိန်းသိမ်းတယ်♥ ငယ်ဂုဏ်ကြောင့် အသားလေးက ဝင်းမွတ်နေတာပဲ♥ ကြွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူး♥ ကောင်လေးတွေက ကြိုက်ကြတယ်♥ လင်းကတော့ ပြန်မကြိုက်ပါဘူး♥ ရင်ထဲမှာ သူပဲရှိတာမို့လို့ပါ♥ စာမေးပွဲ ဖြေခါနီး တပတ်အလိုထိ လင်းစာတွေ အကုန်မရသေးဘူး♥ သူ ဒေါသတွေထွက်နေတယ်♥ လင်းကြောက်တယ်♥ အတင်းစာကို ဖိကျက်ပေမယ့် မရဘူး♥ ခေါင်းတွေဟုန်နေတယ်♥ စိတ်ညစ်တယ်♥ ည ၁၂ နာရီကျော်တဲ့အထိ စာဖတ်ရတယ်♥ သူက ဘေးကစောင့်ပေးတယ်♥ သနားပါတယ်♥ သူ ပိန်သွားတယ်♥
သူ ဒေါသထွက်နေတယ်♥ လင်းကြောက်တယ်♥ ခြေဖျားလက်ဖျားတွေ အေးစက်နေတယ်♥ အခန်းထဲမှာ အပ်ကျသံ မကြားရအောင် တိတ်ဆိတ်နေတယ်♥ သူ စာပြန်မေးတယ်♥ မြန်မာစာ♥ ရေသည်ပြဇာတ်♥ ထစ်နေတယ်♥ မေ့နေတယ်♥ စိတ်ညစ်ပါတယ်♥ သူ ဘာမှမပြောဘူး♥ လာတဲ့♥ အပြင်မှာ သွားဖတ်မယ်တဲ့♥ လင်းတို့ ဝရန်တာမှာ သွားထိုင်ကြတယ်♥ သူပြောတာလိုက်ရွတ်တဲ့♥ လင်းကြောင်သွားတယ်♥ ဘာကြောင်တာလဲ♥ လိုက်ဆိုတဲ့♥ လင်း ဆယ်တန်းကျပါက ဝရန်တာမှ ခုန်ချပါမည်♥ အင်♥ လင်း ဆယ်တန်းကျရင် သေခိုင်းတာပေါ့♥ လင်း လိုက်ဆိုမိတယ်♥ ဟုတ်ပြီ♥ ကျရင်သေလိုက်တော့တဲ့♥ လင်း စိတ်ထဲ ဟုန်းကနဲ သဘောပေါက်သွားတယ်♥ ဒီအချိန်မှာ စာမေးပွဲမှတပါး ဘာမှမရှိဘူးလို့♥ လင်း စိတ်တွေငြိမ်သွားတယ်♥ စာတွေ ပြန်ဆိုကြည့်တယ်♥ မရတဲ့စာတွေကို မဖတ်ခိုင်းတော့ဘူး♥ ချန်ခဲ့လိုက်တဲ့♥ မပါရင် သိတာသာဖြေတဲ့♥ လင်းဘဝရဲ့ အပင်ပန်းဆုံးအချိန်ပါပဲ♥ ဒါပေမယ့် ကျေနပ်တယ်♥ လင်း သူ့ဆီကနေ သင်ယူခွင့်ရလိုက်တာက စိတ်ဓါတ်ပြတ်သားဖို့♥ မရရင် သေလိုက်တော့တဲ့♥ လူတိုင်းအောင်နိုင်တဲ့ စာမေးပွဲကို လင်းမအောင်ရင် သေသင့်တယ်ပေါ့♥ ဟုတ်တယ်♥ လင်းသေသင့်တယ်♥ လင်း ဆယ်တန်းအောင်ခဲ့တယ်♥ ဂုဏ်ထူးတော့ မပါဘူးပေါ့နော်♥ သူ့လောက်မှ စာမတော်တာ♥ အောင်စာရင်းထွက်တော့ သူလဲ ပျော်ပါတယ်♥ ဒါပေမယ့် ပြောသေးတယ် ငါသင်ပေးတာလို့ ဘယ်တော့မှ မပြောနဲ့တဲ့♥ ဘာလို့လဲဟင် မေးတော့♥ ငါသိက္ခာကျတယ်တဲ့♥ တိန်♥
စာမေးပွဲ အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့က သူနဲ့ လင်း သွားကြည့်ကြတယ်♥ လင်းပျော်တယ်♥ သူ တော်တော်ကားမောင်းကြမ်းတယ်♥ ဝှီးကနဲ ဝှီးကနဲမောင်းတယ်♥ ဝုန်းဆို ကျော်တက်တယ်♥ အသဲတအေးအေးနဲ့ ကျောင်းရောက်သွားတယ်♥ လင်း အောင်တယ်♥ မှတ်မှတ်ရရ ပျော်လွန်းလို့ သူ့ကို ဖက်နမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ လင်းသူငယ်ချင်းတွေ အကုန်အောင်တယ်♥ ကောင်မလေးတွေ သူ့ကို ဝိုင်းကြည့်တယ်♥ လင်းကို ကြိုက်နေတဲ့ ကောင်လေးတွေက ဘုကြည့်ကြည့်တယ်♥ လင်း သူ့လက်ကို တအားဖက်ထားပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်♥ ပျော်တယ်♥ အရမ်းပျော်တယ်♥ မနက်စောစော အင်းယားကန်ဘောင်သွားကြသေးတယ်♥ လင်း သူ့လက်ကို မလွှတ်ဘူး♥ သူကလဲ လင်းကို မတွန်းထုတ်ပါဘူး♥ ကန်ဘောင်က ခုံတန်းလေးမှာ အတူတူထိုင်ဖြစ်တယ်♥ လင်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီတဲ့♥ ဘာဖြစ်ချင်လဲတဲ့♥ ဆုချမယ်တဲ့♥ လင်း သူ့ကို စိုက်ကြည့်မိတယ်♥ လင်းသိပါတယ်♥ လင်း ရင်ထဲက အချစ်တွေ သူသိအောင် သူ မြင်အောင် ပြလိုက်မိတယ်♥ သူ ဘာမှမပြောဘူး♥ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို သူနမ်းတယ်♥ လင်း သူ့အနမ်းမှာ မျောသွားတယ်♥ လင်း မျက်စိလေးမှိတ်ထားမိတယ်♥ ရင်တွေက တအားခုန်တယ်♥ လင်းကြောက်တယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်♥ သူ ပေးတဲ့ဆုကို လင်း ရလိုက်တယ်♥ လင်းပျော်တယ်♥
အင်းယားကန်က တိုက်တဲ့လေက အေးပါတယ်♥ ဒါပေမယ့် လင်းရင်ထဲမှာ ပူလာတယ်♥ တကိုယ်လုံး ကတုန်ကယင်နဲ့ သူ့ကို ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားမိတယ်♥ အားမရှိတော့ဘူး♥ သူ လင်းကိုယ်လုံးထဲက အားတွေ စုပ်ယူသွားသလိုပဲ♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို သကြားလုံးလေးလို စုပ်တယ်♥ လင်း မျက်စိလေးမှိတ်ထားမိတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်ကွယ်♥ ၁၀ စက္ကန့် အနမ်းလေးကြောင့် လင်း နှလုံးသားလေး အရည်ပျော်သွားတယ်♥ အနမ်းဆုံးသွားတော့ လင်းသူ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ခေါင်းလေးတိုးပြီး မှေးနေလိုက်တယ်♥ သူ လင်းကို ဖက်ထားတယ်♥ ကျောလေးကို သပ်ပေးတယ်♥ လင်း သူ့ရင်ခုန်သံကို နားထောင်မိတယ်♥ ဒိန်းကနဲ ဒိန်းကနဲ အကျယ်ကြီးပဲ♥ ပျော်လွန်းလို့ တနေ့လုံးပြုံးနေမိတယ်♥ မေမေ့ကို ဖုန်းဆက်♥ ပြီးတော့ ကစားကွင်းသွားကြသေးတယ်♥ သရဲရထား စီးကြတယ်♥ ကြောက်တယ်♥ သူ့ကို တအားဖက်ထားမိတယ်♥ သူ့လက်မောင်းကြီးက လင်းရင်သားလေးကို ဖိထားတယ်♥ လင်း ကြောက်ကြောက်နဲ့ ပိုပြီးဖက်ထားမိတယ်♥ ရှက်သလိုလိုပါပဲ♥ ဒါပေမယ့် ပျော်တယ်♥ မှတ်မိသေးတယ်♥ လင်း တနေ့လုံး သူ့လက်ကို ဆွဲထားတယ်♥ တိုက်ကားလဲ မောင်းကြသေးတယ်♥ တယောက်တစီး♥ လင်းကို ကောင်လေး သုံးယောက်က အတင်းလိုက်တိုက်တယ်♥ သူ ဒေါသတွေ ထွက်နေတာလား♥ မျက်နှာကြီးက နီရဲတွတ်လာတယ်♥ တကြိမ်မောင်းပြီးတော့ သူ့ကားမှာပဲ သွားထိုင်လိုက်တယ်♥ ဟိုကောင်လေးတွေ နဲနဲတော့ စိတ်ပျက်သွားတယ်♥ သူလဲ စိတ်ကျေနပ်သွားတယ်♥ သူ ပြန်ပြုံးလာတယ်♥ ကွေ့ပတ်ပြီးမောင်းတယ်♥ သူတို့ကို နောက်ကနေ လိုက်တိုက်တယ်♥ ကန့်လန့်ဖြတ်တိုက်တယ်♥ ဒုန်းကနဲ ဒုန်းကနဲ လွင့်လွင့်သွားအောင် တိုက်ပစ်တယ်♥ ပျော်တယ်♥ သူ အရမ်းတော်တယ်♥ လင်းချစ်တယ်♥ နေ့ခင်းနေက တအားပူတယ်♥ လင်း ခေါင်းတွေကိုက်လာတယ်♥ သူ အိမ်ပြန်ပို့ပေးတယ်♥ တအိမ်လုံးပျော်ကြတယ်♥ ဝမ်းသာကြတယ်♥ လင်း ဆယ်တန်းအောင်ပြီ♥ လင်း ခဏလေး အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ သူလဲ ပြန်သွားတယ်♥ ညနေစောင်းတော့ လင်းနိုးလာတယ်♥
သူ့ရဲ့ အချစ်ကို လင်းသိတယ်♥
ဒိုင်ယာရီစာအုပ်ထဲမှာ သွက်သွက်လေး ချရေးမိတယ်♥ လင်း ခစ်ကနဲ ရီမိတယ်♥ ညနေ ဘယ်သွားရင်ကောင်းမလဲ မသိဘူး♥ လင်း ရေချိုးလိုက်တယ်♥ ဟောတော့♥ လင်း ပိပိလေးက စိုစိုလေး ရွှဲနေတယ်♥ အိး♥ အရည်တွေ♥ လင်း ဆပ်ပြာရည်နဲ့ အပြင်ပိုင်းကို ဆေးလိုက်တယ်♥ လင်းပန်းလေးက နီနီလေးပွင့်အာနေတယ်♥ လင်း စိတ်ညစ်သွားတယ်♥ ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး♥ လင်း ရင်သားတွေတင်းနေတယ်♥ စိတ်ထဲမှာ တမျိုးချည်းပဲ♥ နေရထိုင်ရခက်လိုက်တာ♥ တခုခုလိုနေသလိုလို♥ ဘာမှန်းတော့ မပြောတတ်♥ ရေချိုးပြီး လိုးရှင်းတကိုယ်လုံး လိမ်းလိုက်တယ်♥ သူ နမ်းရင် မွှေးအောင်လို့ပေါ့♥ သူက အသန့်ကြိုက်တယ်♥ လင်းသိပါတယ်♥
လင်း အကြောတွေတင်းနေတယ်♥ လိုးရှင်းလိမ်းတော့ ခြေဖျားကနေ စလိမ်းတယ်♥ ခြေသလုံးသားလေးတွေ♥ ပြီးတော့ ပေါင်တံ♥ ဟင့်♥ လင်း တချက်ငြီးမိတယ်♥ တကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားတယ်♥ ကြက်သီးလေးတွေ ထလာတယ်♥ လင်း ပိပိလေးနား ကပ်လာလေ ပိုဆိုးလေပဲ♥ အရင်နေ့တွေက ဒီလိုလိမ်းတာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး♥ အခု လင်းပိပိလေးက တမျိုးဖြစ်နေတယ်♥ ဖောင်းလာတယ်♥ လင်းမှာ အမွှေးမရှိဘူး♥ ပိပိလေးပေါ်မှာ မပေါက်သေးဘူး♥ ရေးရေးလေးပဲ ရှိတယ်♥ လင်း စိတ်တွေ ပိပိလေးကို ဖိချလိုက်ချင်တယ်♥ နယ်ဖတ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်♥ လင်း အားတင်းပြီး ပိပိလေးကို အုပ်ကိုင်လိုက်တယ်♥ ဟင့်♥ အာ♥ အာ♥ လင်း မပြောတတ်ဘူး♥ ဘယ်လိုဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာ တကိုယ်လုံးတုန်တက်သွားတယ်♥ လက်က ခွာမရဘူး♥ ဖိပြီးပွတ်တယ်♥ အရေးကြောင်းလေးပေါ်က ပွတ်ပေးရင် လင်းမခံနိုင်ဘူး♥ ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ်♥ လင်း ကုတင်ပေါ် ပစ်လှဲမိတယ်♥ ပေါင်လေးကားရမလို စုရမလိုနဲ့ လင်း မွေ့ယာခင်းကို လက်တဖက်က ဆုပ်ထားမိတယ်♥ လင်း ရင်သားတွေကိုတော့ မကိုင်ရဲဘူး♥ ပုံစံပျက်သွားမှာစိုးလို့♥ ပန်းနုရောင်ထိပ်ဖျားလေးက ထောင်နေတာပဲ♥ လင်း မကိုင်ရဲဘူး♥♥ အောက်က ပိပိလေးကို ဖိထားရင်း လင်းကော့တက်လာမိတယ်♥ လင်း ရင်ထဲမှာ တအားပူတယ်♥ မျက်စိကိုမှိတ် ခေါင်းလေးစောင်းလိုက်မိတယ်♥ အိကနဲ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတယ်♥ ကောင်းတယ်♥ ပြောမပြတတ်အောင် ကောင်းလွန်းတဲ့ခံစားချက်ပါလား♥ ငြိမ့်ကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ ရင်တွေက တလှပ်လှပ်နဲ့♥ အရမ်းချစ်တယ် သူရယ်♥ မှေးနေရာကနေ ပြန်နိုးလာတော့ စိတ်တွေက တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့♥ လှိုင်းစီးနေရသလိုပဲ♥ လင်း ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး♥ ဟွန့် သူ အရမ်းဆိုးတယ်♥ အနားက teddy ကို ဗိုက်ခေါက်လိမ်ဆွဲမိတယ်♥ အို သူနာသွားမှာပေါ့♥ အုံဖွ အုံဖွ♥ အံမယ် သူ စိတ်ကောက်တယ်♥ လင်း teddy ကို ဖက်ထားမိတယ်♥ အို♥ သူ့ရဲ့ အမွှေးတွေက ယားတယ်♥ အဟိ♥ သိမ့်ကနဲ ကြက်သီးလေးတွေ ထလာတယ်♥ လင်း teddy ခြေထောက်ကြီးကို ပေါင်ကြားထဲ ညှပ်ထားမိတယ်♥ လင်းလေ လင်း ဘာမှမသိတော့ဘူး♥ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ပိပိလေးက တအားယားလာတယ်♥ လင်း အောက်ကနေ လှုပ်ပေးမိတယ်♥ သူလေ သိပ်ဆိုးတယ်♥ သူ့ခြေထောက်ကြီးက လင်းရဲ့ပိပိလေးကို ပွတ်တယ်♥ အမွှေးတွေနဲ့ ယားပါတယ်ဆိုမှ♥ သူ ဆိုးတယ်♥ လင်း ဟင့်ကနဲ ကော့ပေးတယ်♥ လှုပ်ပေးတယ်♥ အာ♥ ဟာ♥ သိမ့်ကနဲ အရည်လေးတွေ ထွက်သွားတယ်♥ လင်း မောလိုက်တာ♥ လူကလဲ နုန်းချိသွားတယ်♥ လင်း သူ့ကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင် ဖက်ထားရင်း teddy ကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ လင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ အိမ်မက်ထဲမှာ သူ လင်းကို လာနမ်းတယ်♥ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ လင်း အရသာကို ခံစားတတ်သွားတယ်♥ မှတ်မှတ်ရရ လင်းရဲ့ ပထမဆုံး အတွေ့အကြုံပေါ့♥
လင်း မွေ့ယာပေါ်မှာ teddy ကို ဖက်ထားတယ် ♥ သူ လာခေါ်ရင်ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ် ♥ တံခါးလာခေါက်တယ် ♥ လင်း အဝတ်တွေ မြန်မြန်ဝတ်ပြီး ဖွင့်ကြည့်တော့ သူ ♥ လင်းဆုတောင်းတာ ပြည့်တယ် ♥ သွားမယ်လေတဲ့ ♥ မြန်မြန်အဝတ်လဲတဲ့ ♥ အင်းလို့ ♥ အဖြူရောင် ဂါဝန်တိုတိုလေး ဝတ်ရင်ကောင်းမလား ♥ ငွေရောင်ဟုတ်ပြီ ♥ မေမေဟိုနေ့က ဝယ်ပေးထားတဲ့ ဂါဝန် ♥ အပေါ်က ကြိုးတချောင်းနဲ့ ♥ ဘီဒိုထဲကထုတ် ♥ မျက်နှာသစ် ♥ တကိုယ်လုံး လိုးရှင်းမြန်မြန်လိမ်း ♥ လင်း ဘရာလှလှလေးဝတ်တယ် ♥ ဂါဝန် စွတ်တယ် ♥ ပင်တီလေးကို လှတာလေးဝတ်တယ် ♥ ငွေရောင် ♥
လင်း နှုတ်ခမ်းနီလိမ်းအုံးမလို့ ♥ အော် သူမကြိုက်ဘူး ♥ သဘာဝအတိုင်းပဲ ပန်းရောင်ကို သူကြိုက်တယ် ♥ အားလုံးပြီးတော့ သူနှုတ်ခမ်းစူနေတယ် ♥ ကြာလိုက်တာတဲ့ ♥ ဟွန့် ♥ လင်း လှအောင်လဲ ပြင်ရသေးတယ် ♥ သူ့အတွက်ကို ♥ သူက တမျိုး ♥ စိတ်မရှည်ဘူး ♥ လင်းရီပြတယ် ♥ သူ့လက်မောင်းကို ချိတ်ပြီး ကားဆီကို လျှောက်လာခဲ့တယ် ♥ မေမေတို့ကတော့ ဘာမှ မပြောပါဘူး ♥ သူနဲ့ လင်းက ငယ်ငယ်တည်းက ဒီလိုပဲ ♥ လင်းမှာက အကိုတယောက်ရှိခဲ့ပါတယ် ♥ သူနဲ့ ရွယ်တူပေါ့ ♥ သုံးရက်လားပဲ အသက်ရှည်တယ် ♥ သေသွားတယ် ♥ လင်းမေမေ ရူးတော့တာပဲ ♥ တော်သေးတယ် ♥ ရက်ပိုင်းပဲ သူ့ကို သူ့မေမေက မွေးတယ် ♥ သူ့မေမေက တအားသဘောထားကောင်းတယ် ♥ မိန်းမချင်းကိုယ်ချင်းစာလို့ ♥ မေမေ့ကို သူ့သားကို ပေးထားတယ် ♥ မေမေက နို့တိုက်တယ် ♥ သား ♥ သား ♥ သား ♥ နဲ့ မေမေက သူ့ကို တအားချစ်တယ် ♥ သူ့သားလို့ ထင်နေတယ် ♥ တနေ့ တနေ့ သူက မေမေ့ကို လာတွေ့ရတယ် ♥ နှုတ်ဆက်ရတယ် ♥ မတွေ့ရင် မေမေ့စိတ်တွေ မငြိမ်တော့ဘူး ♥ လင်းတို့မိသားစုတွေရဲ့ ရင်းနှီးမှုပေါ့ ♥ ထားပါတော့ ♥ ကားပေါ်ရောက်တော့ ♥ ဘယ်သွားချင်လဲတဲ့ ♥ မသိဘူးလို့ ♥ အိုကေတဲ့ ♥ ကားလျှောက်မောင်းမယ် ♥ ဗိုက်ဆာမှ တခုခုစားမယ်တဲ့ ♥ ဟုတ် ♥ သူ ကားမောင်းတာ ကြမ်းတယ် ♥ ဝေါကနဲ မောင်းတယ် ♥ ကျော်တယ် ♥ တခါတလေ အေးကနဲဖြစ်သွားတာပဲ ♥ လင်း ကြောက်မိတယ် ♥ မြို့ပြင်ကို မောင်းနေတာ ♥ လင်းပျော်တယ် ♥ ကားရပ်ပြီး သူနဲ့ စကားတွေ ပြောဖြစ်တယ် ♥ သူ တအားကြင်နာတတ်တယ် ♥ လေသံလေးက နူးညံ့နေတယ် ♥ လင်း သူ့ပခုံးပေါ်မှာ မှီလိုက်မိတယ် ♥ သူ လင်းခါးလေးကို လာဖက်တယ် ♥ ဒီဘက်လှည့်ပါအုံးတဲ့ ♥ လင်း ခေါင်းလေးမော့လိုက်တယ် ♥ သူ လင်းကို နမ်းတယ် ♥ လင်း မျက်စိလေး မှိတ်ထားမိတယ် ♥ နှုတ်ခမ်းလေး နှစ်ခု ဂဟေဆက်သွားတယ် ♥ လင်း ချစ်တယ် ♥ တုန်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် ♥ သူ့အနမ်းတွေ ပိုပြီး မြန်လာတယ် ♥ လင်း ဘာမှ မသိချင်တော့ဘူး ♥ သူ့ကို ဖက်ထားမိတယ် ♥ သူ လင်းကိ ပြန်ဖက်တယ် ♥ ကားပေါ်မှာ နမ်းကြတယ် ♥ လင်းလေလင်း ♥ တအားရင်တွေခုန်တာပဲ ♥
လင်း ဘာမှမသိတော့ဘူး♥ သူပေးတဲ့ အနမ်းအောက်မှာ လင်းမျောနေတယ်♥ ဖြေးဖြေးလေး လင်းခါးကို ပွတ်ပေးတယ်♥ တရွေ့ရွေ့နဲ့ လင်းပေါင်လေးကို သူ ကိုင်တယ်♥ ပွတ်တယ်♥ အစုန်အဆန်ပေါ့♥ လင်လေး လင်း တအားကြောက်တာပဲ♥ ကြက်သီးတွေ တဖြန်ဖြန်းထသွားတယ်♥ ဟင့်♥ လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေစိုစပြုလာတယ်♥ လင်းသိတယ်♥ တင်းနေပြီ♥ ဖောင်းနေပြီ♥ သူက teddy မဟုတ်ဘူး♥ ဘယ်လိုပွတ်ရမလဲမသိဘူး♥ လင်း အထဲက ယားစိစိ ဖြစ်လာတယ်♥ မနေတတ်တော့ဘူး♥ ရင်သားတွေက တင်းလာတယ်♥ ဘရာကြပ်ကြပ်ဝတ်လာတော့ အသက်ရှူလို့မဝဘူး♥ သူ့အနမ်းကလဲ မဆုံးနိုင်သေးဘူး♥ ဟွန့်♥ လင်း ခေါင်းလေး ဖယ်လိုက်မိတယ်♥ လင်းတို့အနမ်းတွေ ရပ်သွားတယ်♥ သူ လင်းကို ပြုံးပြီး ကြည့်နေတယ်♥ လင်း သူ့နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်နမ်းလိုက်တယ်♥ ချစ်လို့♥ သူ လင်းအောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံလိုက်တယ်♥ လျှာလေးနဲ့ ကလိတယ်♥ အိ♥ လင်း အသဲတွေယားသွားတယ်♥ တကိုယ်လုံး နေရထိုင်ရခက်သွားတာပဲ♥ သူလေ သူ♥ လင်း ပေါင်ရင်းကို လာကိုင်တယ်♥ စကဒ်အောက်နားကို လက်တိုးလာတယ်♥ အို♥ ဟင့်♥ လင်းအသက်အော့င်ထားမိတယ်♥ သူ တဖြေးဖြေးနဲ့ လင်းပိပိလေးကို ထိသွားတယ်♥ သိမ့်ကနဲ လင်းကျင်တက်သွားတယ်♥ လင်း အတင်းဖက်ထားမိတယ်♥ လင်း ဘာမှမသိဘူး♥ လင်း ရင်တွေခုန်နေတယ်♥ မောလဲမောတယ်♥ သူလေ သူ♥ လင်း ပိပိလေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးတယ်♥ လင်း လန့်သွားတယ်♥ ပေါင်လေးစုသွားမိတယ်♥ သူ ကိုင်ရခက်သွားတယ်♥ လင်း ရှက်မိတယ်♥ ဒါပေမယ့် မသိမသာလေး ပေါင်လေးကားပေးလိုက်တယ်♥ သူ့ကိုချစ်လို့♥ သူ သိတယ်♥ လင်းပေါင်ကားပေးလိုက်တော့ သူ့လက်ညှိုးက လင်းပိပိလေးကို လာထိတယ်♥ တော်သေးတယ်♥ ပင်တီလေးခံနေလို့♥ သူ လင်းပိပိလေးကို ထိတယ်♥ ခြစ်တယ်♥ ကြောင်လေးလိုပဲ လက်သည်းနဲ့ ခြစ်တယ်♥ လင်း အသက်ရှူသံတွေမြန်လာတယ်♥ အို♥ အရမ်းချစ်တယ်♥ သူရယ်♥ လင်းရင်သားတွေ ကော့တက်လာတယ်♥ လင်း အသက်လေး အောင့်မိတယ်♥ သူ အရမ်းဆိုးတယ်♥ လင်း ပင်တီလေးကို ဆွဲဆွဲဖယ်ကြည့်တယ်♥ အရည်တွေလဲစိုနေပြီ♥ လင်းရှက်တယ်♥ သူလေ လင်းကို နမ်းနေရင်းက လင်း လည်တိုင်လေးကို လာနမ်းတယ်♥ လင်း ထွန့်ထွန့်လူးသွားမိတယ်♥ ယားလိုက်တာကွာ♥ သူ အောက်မှာလဲ ဘာတွေပွတ်မှန်းမသိဘူး♥ teddy ထက်ဆိုးတယ်♥ ပင်တီလေးကို မရမက ဖယ်တယ်♥ လင်း ကိုယ်လေးယို့မိတယ်♥ နာလို့♥ ပင်တီလေးက ကြပ်တော့ နာသွားတယ်♥ သူ အရမ်းမလုပ်ပါဘူး♥ လက်က အပေါ်တက်လာတယ်♥ အို♥ လင်းရင်သားလေးကို သူအုပ်ကိုင်လိုက်တယ်♥ လင်း အသက်ရှူမရဘူး♥ သူ ဖွဖွလေးကိုင်ပါတယ်♥ လင်း တိုးတိုးလေး ပြောလိုက်မိတယ်♥ အရမ်းမကိုင်နဲ့လို့♥ သူ့လက် အောက်ကို ပြန်ဆင်းသွားပြန်တယ်♥ လင်း ကိုယ်လေးကို အောက်ကို နဲနဲလျောပေးလိုက်တယ်♥ ဟာာ♥ ဟင့်♥ သူလေသူ♥ လင်းပင်တီလေးကို အတင်းဆွဲဖယ်တယ်♥ တအားဆိုးတာပဲ♥ ဖတ်ကနဲ လင်းပိပိလေး ပေါ်လာတယ်♥ ရှက်လိုက်တာ သေတော့မယ်♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး ကော့ပေးလိုက်မိတယ်♥ လုပ်ချင်တာလုပ်ပါတော့ သူရယ်♥ လင်းရင်တွေပူနေတာ တအားပဲ♥ ပိပိလေးထဲမှာလဲ ယားစိနေတယ်♥ သူ စိတ်တိုင်းကျ ပွတ်တယ်♥ လင်း မခံနိုင်ဘူး♥ တအားယားတယ်♥ ဟိုလိုပွတ်လိုက်♥ ဒီလိုပွတ်လိုက်♥ လင်း တွန့်ကနဲ ပြီးသွားတယ်♥ သူ့ကို အတင်းဖက်ထားရင်း လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေ ထွက်သွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ♥ ဟင်းးးး♥
လင်းမျက်စိလေး မှိတ်ထားရင်း မှေးနေမိတယ်♥ သူ့လက်မှာ အရည်တွေ စိုရွှဲနေတာပဲ♥ လင်းတွေ့လိုက်တယ်♥ ရှက်လိုက်တာအရမ်းပဲ♥ တစ်ရှူးမြန်မြန်ယူပြီး သုတ်ပေးလိုက်တယ်♥ သူ စတယ်♥ လင်း မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး အော်မိတယ်♥ ဟွန့်♥ သူ ရီတယ်♥ ကောင်းလားတဲ့♥ သိဖူးလို့♥ ဒီ့ထက်ကောင်းတာ လုပ်ပေးအုံးမယ်တဲ့♥ အင်း မလုပ်နဲ့♥ လင်း ငြင်းမိတယ်♥ လင်း ကြောက်လို့♥ ချစ်တာတော့ချစ်တာပေါ့♥ ဗိုက်ဆာနေပြီလားတဲ့♥ အင်း ဆာတယ်လို့♥ တခုခုသွားစားကြမယ်တဲ့♥ ဘာစားချင်လဲလို့♥ ဆူရှီစားချင်တယ်လို့♥ သူ ဆိုင်တခုကို ခေါ်သွားတယ်♥ လင်း Toilet ထဲသွားပြီး သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်ရသေးတယ်♥ အရည်တွေနဲ့ စိုစိနေတာ မနေတတ်ဘူး♥ သူ လင်းကို ကြင်နာပါတယ်♥ လင်း တသက်လုံး မမေ့ဘူး♥ လင်း သူ့ကို ချစ်တယ်♥ တစ်ရှူးလေး ယူပေးတယ်♥ ဆူရှီလေးကို ခွံ့ကျွေးတယ်♥ လင်း တအားပျော်တယ်♥ သူ့ဆီကရတဲ့ ကြင်နာမှုလေးတွေ လင်းအရမ်း မျှော်လင့်တာပဲ♥ လင်းတို့တွေ လျှောက်သွားကြသေးတယ်♥ ကော်ဖီလဲသွားသောက်တယ်♥ လင်း အိမ်ပြန်တော့မလားတဲ့♥ မပြန်ချင်သေးဘူးလို့♥ ဘယ်သွားချင်သေးလဲတဲ့♥ ကလပ်သွားချင်တယ်လို့♥ သူ အံ့သြသွားတယ်♥ လင်းကို ခေါင်းညှိတ်ပြတယ်♥ အိုကေ သွားမယ်တဲ့♥ အိမ်ကို ဖုန်းဆက်လိုက်တဲ့♥ လင်း မေမေ့ကို ခွင့်တိုင်လိုက်တယ်♥ သူနဲ့ ကလပ်သွားမယ့်အကြောင်း♥ မေမေကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး♥ အေးအေးပေါ့♥ သူ့ကို ဖုန်းပေးလိုက်တယ်♥ သူနဲ့ မေမေ လေးငါးခွန်းပြောဖြစ်တယ်♥ ခွင့်ပြုပါတယ် သွားကြမယ်တဲ့♥ အိုကေ♥ ကားပေါ်တက်တော့ လင်း သူ့ကို တခါနမ်းမိတယ်♥ သူက ဟင်းနော်တဲ့♥
ဒိန်း တလိန်း … ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း …
သံစဉ်တွေက မြူးကြွ … လူငယ်တွေက ထကြွ … မီးဆလိုက်အောက်မှာ ကကြ … မင်းတို့လက်တွေ လေထဲ မြှောက်ထားလိုက် … ၀ို့ …
ဒိန်း တလိန်း … ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း ဒိန်း … ၀ို့ …
ဘိထုသံက ကလပ်အပြင်ဘက်ထဲကနေတောင် ကြားရသည် … လင်း ရင်တွေခုန်နေတာလား … ပျော်နေတာလားမသိ … လင်းကို ကြည့်ပြီး … ကျွန်တော် ပြုံးမိတယ် …
“ဆင်းမယ်လေ … လင်း …”
မရောက်ဖူးသည့် နေရာမို့ အထူးအဆန်း … လင်း ဖြစ်နေသေးသည် … ဒါပေမယ့် … လင်းလဲ လူငယ်ပဲ … ကလပ်သီချင်းဘိသံတွေကြားမှာ … သူ မြူးကြွလာသည် … ကားလော့ချပြီး … လင်းလက်လေးကို … ကျွန်တော် ဆွဲလိုက်တယ် … သူ ကျွန်တော့်လက်ကို … ဖက်ပြီး ကလပ်ထဲဝင်လာခဲ့တယ် … မြင်နေကျ ၀ိတ်တာလေးက တံခါးဖွင့်ပေးတော့ … ၁၀၀၀ တန်တရွက်ထုတ်ပေးလိုက်တယ် … ကောင်တာက ကောင်မလေးက ပြုံးပြတယ် …
“အကို … နဲနဲစောသေးတယ် …”
ဘာမှ မပြောတော့ပါဘူး … ရီပဲပြလိုက်တယ်… လင်းလက်ကလေးကို ဆွဲပြီး … ကလပ်ထဲ ဝင်လာခဲ့တယ် … ဘိထုသံက နားကွဲမတတ် … ရင်တွေ တုန်လာတယ် … စိတ်တွေက မြူးကြွလာတယ် … လင်းလဲ … နားတွေ အူလို့ထင်တယ် … တုန်တုန်တက်သွားတယ် … နှာခေါင်းလေး ရှုံ့သွားတယ် … ကနေတဲ့ လူတွေကြားထဲ တိုးဝင်သွားတယ် … သူ နောက်က လိုက်တော့ အဆင်မပြေဘူး … ညပ်နေတယ် … ဒါနဲ့ ကျွန်တော် စောင့်ပြီး … လင်းကို အရှေ့ပို့လိုက်တယ် … လင်းခါးကို ဖက်ထားရင်း ဆက်လျှောက်သွားတယ် … လူနဲနဲရှင်းတဲ့ ထောင့်နေရာလေးမှာ … ကျွန်တော် … လင်းခါးလေးကို နောက်ကနေ ဖက်ထားလိုက်တယ် … ကျွန်တော် လင်းတင်သားလေးတွေကို ဖိထားမိတယ် … လင်း မနေတတ်ဘူး … တွန့်ကနဲ တွန့်ကနဲ လူးသွားတယ် … ကြက်သီးလေးတွေထလာတယ် … ချစ်လိုက်တာ … လင်းရယ် … သီချင်းဘိတွေအတိုင်း … လင်းခါးလေးကို လှုပ်ပေးတယ် … လင်း ကျွန်တော့်ရင်ခွင်ကို မှီထားရင်း … မကတတ် ကတတ်နဲ့ … ခါးလေးကို ရှိတ်လိုက်တယ် … ၀ို့ … လင်း တင်သားဆိုင်လေးတွေက … ကျွန်တော့်ဟာကို ဖွဖွလေး ပွတ်တယ် … နဲနဲလေး အရှိန်ရလာတော့ … လင်း ကတာ မြန်လာတယ် … သွက်လာတယ် … လင်း ကတတ်သွားပြီ … စည်းချက်အတိုင်း … သူ ရှိတ်တယ် … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ကြွလာတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ ကောင်မလေး … ကိုယ့်ကို ပွတ်သီးပွတ်သပ်လုပ်ပေးနေတာ … ဘယ်ယောက်ျားခံနိုင်မှာလဲ … ကျွန်တော် ကရင်းနဲ့ … သူ့လည်ဂုတ်လေးကို နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ရွှတ် … သူ တွန့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … လင်း ခါးလေးကော့ပြီး … ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲ မှီလိုက်တယ် … ကျွန်တော် သူ့ခါးလေးကိုဖက် … ဗိုက်သားလေးပေါ်မှာ လက်တင်ပြီး ဖက်ထားလိုက်မိတယ် … ချစ်တယ် လင်းရယ် … လင်းတင်သားလေးက ထွားတယ် … အိတယ် … ကျစ်တယ် … လင်းကို ကလပ်ထဲက ကောင်လေးတချို့က … ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ် … မိုက်လို့ပေါ့ … ကျွန်တော် ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ပစ်လိုက်တယ် … လင်း ဒီဘက်လှည့်လာတယ် … ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်တယ် … ကျွန်တော် … နှဖူးလေးကို ဖွဖွလေး နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ဟာက ထောင်လာတယ် … စိတ်က ကြွာလာတယ် … ကျွန်တော် လင်းကို ထောက်ထားမိတယ် … သူ ကိုယ်လုံးလေးကို ရှောင်ကြည့်သေးတယ် … မရဘူး … ကျွန်တော် ခါးကိ ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ပစ်လိုက်တယ် …
“ကိုကိုနော် … လူတွေနဲ့ကွာ …”
“ချစ်တယ်နော် … လင်း …”
အကျယ်ကြီး နားနားကပ်ပြီး အော်ပြောပေမယ့် … တိုးတိုးလေးသာ ကြားရသည် … ကျွန်တော် ပျော်သည် … ရင်တွေခုန်သည် … ချစ်တယ် လင်းရယ် … လင်း ကျွန်တော့်ကို တအားဖက်ထားသည် … ချစ်သူရဲ့ အထိအတွေ့ကြောင့် … ကျွန်တော့် သွေးတွေ ဆူပွက်လာသည် … မဖြစ်သေး … ကံကောင်းသည် … သီချင်းပြောင်းသွားသည် … တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ကလပ်တကခုလုံး … ခုန်ပေါက်ကြသည် … လင်းလဲလိုက်ခုန်သည် … ကျွန်တော့် ရင်ထဲက လွတ်သွားတယ် … ဟူး … ကတယ် … စည်းချက်အလိုက် … ကျွန်တော်လဲ ရှိတ်ပစ်လိုက်တယ် … မိုက်တယ် … လင်း တင်လှုပ်တာလေးက … သိပ်မကျွမ်းပေမယ့် … သူ့အထာနဲ့သူ မိုက်တယ် … လွှတ်ပေးထားလိုက်တယ် … မီးရောင်အောက်မှာ … လင်း မျက်နှာလေးက တော်တော် ပျော်နေတယ် … ကောင်းတယ် … ကောင်မလေး နှစ်ယောက် ကနေရင်းနဲ့ … ကျွန်တော်တို့နား ကပ်လာတယ် … အတူတူကကြတယ် … အပျော်ပေါ့ … မဆိုးပါဘူး … နှစ်ယောက်လုံးက ချစ်ဖို့ကောင်းတယ် … တယောက်က နဲနဲ ဆက်ဆီ ပိုဖြစ်တယ် … ပိုဟော့တယ် … ကနေရင်း … ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်တယ် … ကျွန်တော်သိတယ် … အီလိုက်ရင် ငြိသွားမယ် … ခက်တာပဲ … လင်း ပါနေတယ် … လင်းကတော့ သိပ်မသိဘူး … ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်လိုက် … ကလိုက်နဲ့ … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်အဖျားကောက်ထားတဲ့ ကောင်မလေးက … သူ့သူငယ်ချင်းကို တခုခုပြောတယ် … ပြီးတော့ … ဘားကို ထွက်သွားတယ် … တင်လေးက လှုပ်သွားတယ် … အိုးက မိုက်တယ် … တော်တော်တော့င်တယ် … ကျွန်တော့် အကြိုက်ပေါ့ … လင်း ကျွန်တော့်ကို နားနားကပ်ပြီး ပြောတယ် … မောတယ်တဲ့ …
“အအေးသောက်မလား … လင်း …”
“အင်း … Coke သောက်ချင်တယ် … ကိုကို …”
“ဒါဆို ခဏစောင့် … သွားဝယ်ပေးမယ် …”
လင်း … ဟိုကောင်မလေးနဲ့ ကရင်း ကျန်ခဲ့တယ် … ခဏဆိုတော့ ကျွန်တော်လဲ တယောက်ထဲ ထားခဲ့မိတယ် … ဘားမှာ ကိုလာနှစ်လုံး ဝယ်လိုက်တယ် … အော် … သူ ထိုင်နေတာပဲ … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်လေးနဲ့ … မဆိုးပါဘူး … နှုတ်ခမ်းက ဖက်နမ်းချင်စရာလေး … ရင်သားလဲထွားတယ် … အနီရောင် ဂါဝန် အပြတ်လေး အောက်မှာ ရုန်းကြွနေတယ် … သူ ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြတယ် … မထိတထိ … မခို့တရို့ … ကျွန်တော် စပြီး နှုတ်ဆက်လိုက်တယ် … မကောင်းဘူးလေ … ကိုယ့်ကို စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ မိန်းကလေးကို … မျက်နှာလွဲခဲပစ် … ကျွန်တော် မလုပ်တတ်ဘူး …
“ဟိုင်း … ယူ တယောက်ထဲလား …”
“အင်း … ဂဲဖရန့်တော့ပါတယ် …”
“အော် … အော် …”
“ယူ … ဒီကို ခဏခဏလာတာပဲလား”
“အင်း … တပတ် ၃ ခါလောက် လာတယ် …”
“တို့နာမည်က ယွန်းနဒီ … ယူရော …”
“မိုက်တယ် … ယူ့နာမည်က … တို့ကို … ယူ့ဖုန်းနံပါတ် ပေးမလား …”
ဘောပင်လေး ပေးတယ် … သူ လက်ဝါးလေး ဖြန့်ပေးတယ် … သဘောက ရေးပေးတဲ့ … ကျွန်တော် သူ့လက်ကလေး ကိုင်ပြီး ရေးပေးလိုက်တယ် … လက်ကလေးက နူးညံ့ပါတယ် … မဆိုးဘူး … 09-xxxxxxxx … ကောင်မလေး တခုခုတော့ သောက်ထားတယ် … ရီဝေဝေလေး ဖြစ်နေတယ် …
“Thanks နော် … ဒီနေ့ အိုင့် Birthday!”
“ဟုတ်လား … ဟက်ပီဘတ်ဒေး … မွေးနေ့လက်ဆောင်တော့ ပါလာဘူးကွာ …”
“အိုး ရပါတယ် … တခုခုလိုက်စားပါလား …”
“ဟင့်အင်း … မစားတော့ပါဘူး …”
“Thanks … ဖုန်းဆက်လိုက်လေ Birthday Present ပေးဖို့ …”
“အိုကေ … ဆက်လိုက်မယ် …”
ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြတယ် … ကျွန်တော် သိတယ် … အီလိုက်ရင်တော့ ငြိကုန်တော့မယ် … ကျွန်တော် အသာလေး နှုတ်ဆက်ပြီး … ထွက်လာတယ် … လင်းဆီကိုပေါ့ … ဟိုက် … ဟိုမှာ … လင်း ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေတယ် … ဘေးမှာ ဘဲနှစ်ပွေ … လင်းအနားမှာကပ်ပြီး ကနေတယ် … တခုခု မေးနေပုံရတယ် … လင်း ကြောက်နေတာတော့ မဟုတ်ဘူး … လင်းက သတ္တိရှိတယ် … စိတ်ရှုပ်နေတာ … လင်းပါးကို … ဟိုခွေးမသား နမ်းတော့မယ် … ကျွန်တော် ခပ်သွက်သွက်သွားရင်း … အဲဒီနှစ်ကောင်ကြားထဲ ဝင်ရပ်လိုက်တယ် … နမ်းချင်တဲ့ကောင်ကို ဆောင့်တွန်းပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ လင်းလက်လေးကို ကောက်ဆွဲလိုက်တယ် …
“ဟေ့ … ဘာလဲကွ …”
တကောင်က … ဘုကြည့်ကြည့်တယ် … တကောင်က ကျွန်တော့်နဲ့ မျက်နှာချင်းဆိုင်လာရပ်ပြီး စိုက်ကြည့်တယ် … ဟ … ဟ … ကလပ်ထဲမှာ လာဖြဲတာလား … ကျွန်တော် ခပပ်တည်တည်ပဲ … မေးပစ်လိုက်တယ် …
“မင်းက ဘာဖြစ်ချင်လို့လဲ …”
“အေးဆေးနေ … ပြဿနာာ လာမရှာနဲ့ … ဒါ ငါ့စော် …”
နှစ်ယောက်သား ပေစောင်း ပေစောင်းနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တယ် … လုပ်ချင်လိုက်တာ လက်ကို ယားနေတာပဲ … ဟိုဘက်နားက … Secuဆrity က အထာနပ်တယ် … ချက်ချင်း ရောက်လာတယ် …
“ညီလေးတို့ … အေးဆေး … အေးဆေး …”
“ဟေ့ကောင် …. မင်းသတ္တိရှိရင် ကြိုက်တဲ့နေရာချိန်းလိုက် …”
ဆွဲမယ့်လူရှိရင် … ဒီကောင်တွေက ဒီလိုပါပဲ … ဖြဲတယ် … သွေးကြောင်တယ်လို့ မထင်နဲ့ … လင်းပါနေလို့ … နို့မို့လို့က ဆော်ထည့်ပစ်လိုက်ပြီ … လင်း ကျွန်တော့်လက်ကို … အတင်းကိုင်ထားတယ် … ဘေးက ကောင်မလေးတွေလဲ ၀ိုင်းကြည့်ကြတယ် … ကျွန်တော် လက်ခလယ်ထောင်ပြရင်း …
ဟိုကောင် … ထိုးမလို့ ဟန်ပြင်တုန်း … Security သုံးယောက် ကြားထဲက ဝင်တားလိုက်တယ် … သွားစမ်းပါကွာ … သူများပျော်ရွှင်မှုတွေ လာမဖျက်စီးနဲ့ … အုပ်စုနဲ့မှ … ချရဲတဲ့ကောင်တွေ … ဟိုကောင်တွေ ဝူးဝူးဝါးဝါး ထလုပ်တော့ … ကလပ်ထဲကနေ ဆွဲထုတ်သွားတယ် … ကောင်းတယ် … အနေအထားက အေးဆေး ဖြစ်သွားတယ် … ဒီဂျေက ပိုမြူးလာတယ် … လူငယ်တွေ ပိုမြူးလာတယ် … ကကြတယ် … လင်း အအေးသောက်ရင်း ဆက်ကတယ် … သီချင်းတပုဒ်ပြီးတော့ တပုဒ် … ကလပ်ပိတ်ခါနီးလေ … ပိုကလို့ကောင်းလေပဲ … ဟိုကောင်မလေး နှစ်ယောက်လဲ အနားမှာလာကကြတယ် … အကုန်လုံး … သီချင်းသံကြားမှာ မျောသွားကြတယ် … ခုန်ပေါက်ကြတယ် … မိုက်တယ် … တီးလုံးတွေကြားမှာ … ကျွန်တော်တို့ ပိုပြီး ရင်းနှီးသွားတယ် … ရှိတ်ရင်းနဲ့ နှလုံးသားချင်း နီးကပ်သွားယတ် … အရမ်းချစ်တယ် … လင်းရေ … ဝှီး … မောလိုက်တာ … လင်း တအားပျော်နေတာ … ကျွန်တော် … သိတယ် … တခစ်ခစ်နဲ့ ကားပေါ်မှာ … စကားတွေ အများကြီးပြောတယ် … ကျွန်တော်လဲ တအားပျော်တယ် … မျက်စိထဲက ဖျောက်မရဘူး … လင်း တင်လေး လှုပ်ပြီး … ကျွန်တော့်ရှေ့မှာ ရှိတ်တာ … ကျွန်တော် မေ့မရဘူး … အရမ်းမိုက်တယ် … အိမ်ပြန်ရောက်တော့ … မနက် ၄ နာရီထိုးတော့မယ် … ကားရပ်လိုက်တော့ … လင်း ကျွန်တော့်ဘက်ကို လှည့်ပြီး … ရွှတ်ကနဲ နမ်းသွားတယ် … ဟင် …
“အရမ်းချစ်တယ် … ကိုကို …”
ကျွန်တော့်ကို ပြောပြီး … အိမ်ပေါ်ပြေးတက်သွားတယ် … တွေ့မယ် … တွေ့မယ် … လင်း … ကျွန်တော့်နှလုံးသားကို လှုပ်ခတ်သွားအောင် … သူ လုပ်သွားတယ် … ချစ်တယ်ကွာ … ကျွန်တော် အပြေးလိုက်သွားပေမယ့် မမှီတော့ဘူး … သူ အခန်းထဲ ဝင်သွားပြီ … ဟင်း … သိပ်လှတဲ့ ကောင်မလေးရယ် … ကိုလဲ အရမ်းချစ်ပါတယ် …
လင်းကို မေမေ တံခါးဖွင့်ပေးတယ်♥ ဘာမှတော့ မပြောပါဘူး♥ သူနဲ့ သွားတာဆိုတော့ စိတ်ချတယ်♥ ဟွန့်♥ တော်တော်ဆိုးတယ်♥ လင်း အခန်းထဲရောက်တော့ အဝတ်တွေ အကုန်ချွတ်လိုက်တယ်♥အိပ်လဲ မအိပ်ချင်တော့ဘူး♥ မျက်စိကြောင်နေတယ်♥ ရေချိုးလိုက်တယ်♥ကိုကိုလို့ သူ့ကို ခေါ်မိတယ်♥ ချစ်လို့♥ ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို ဝတ်ပြီး ကုတင်ပေါ်မှာ လှဲချလိုက်တယ်♥ ကိုကိုပေးတဲ့ အနမ်းတွေ လင်းရင်အရမ်းခုန်တာပဲ♥ အခုထိ သူနမ်းနေသလို ခံစားမိတယ်♥ လင်း ပေါင်လေးကို ပွတ်မိတယ်♥ ဒီလိုလေး သူပွတ်တယ်♥ ဟုတ်တယ်♥ ဒီလိုလေး ရွရွလေး အပေါ်ကို တက်လာတယ်♥ အို့ ကိုကိုရယ်♥ စိတ်ကူးထဲမှာ ကိုကိုနမ်းတာ♥အကြောတွေ တွန့်သွားတယ်♥ ကိုယ့်ပေါင်ကိုယ်ပြန်ကိုင်တာတောင် မတူတော့ဘူးနော်♥လင်းနဲနဲရဲလာတယ်♥ အတွေးထဲမှာ ကိုကိုလုပ်ပေးနေသလိုတွေးပြီး လင်းပိပိလေးကို ကိုင်လိုက်တယ်♥ဟာာ♥လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်မိတယ်♥ကျင်တက်သွားတာပဲ♥တမျိုးကြီး♥ကိုကိုလေ လင်းရင်သားတွေကို ကိုင်တယ်♥လင်း လက်လေးက အပေါ်တခုအောက်တခု ကိုင်မိတယ်♥ဟင့်♥ လင်းရင်တွေ သိမ့်သိမ့်တုန်သွားတယ်♥ လင်း ခါးလေးကို ကော့ပေးမိတယ်♥ ကိုကိုရယ် လင်းအရမ်းချစ်တယ်♥ဟင့်♥ တွေးနေတုန်းပဲ ရှိသေးတယ်♥ လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေထွက်လာတယ်♥ သိမ့်ကနဲ လင်းလေလင်း မိုးပေါ်ရောက်သွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ ကိုကိုပွတ်ပေးတာကို တသက်လုံးမေ့လို့ရမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး♥ အဲဒီညက လင်း teddy ကို တအားဖက်ထားရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်♥
အချိန်တွေက တနေ့ပြီး တနေ့ကုန်သွားတယ်♥ လင်း သူ့ကို တနေ့ပြီးတနေ့ ပိုချစ်လာတယ်♥ မထိတထိ သူနဲ့ လင်း ချစ်ကြတယ်♥ တခါတလေ လင်းအခန်းထဲ သူလာတယ်♥ လင်းကို တအားနမ်းတယ်♥ တခါတလေ လင်း သူ့အခန်းထဲ သွားတယ်♥ သူက တအားနမ်းတယ်♥ တွေ့တာနဲ့ နမ်းတာပဲ♥ တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်း ရင်သားတွေကို သူကိုင်တယ် ♥ လင်း ပင်တီလေးကိုလဲ ထင်သလို ဆွဲဆွဲချွတ်တယ်♥ လင်း ကြောက်တယ်♥ လင်း ချစ်တယ်♥ တအားရင်ခုန်မိတယ်♥ သူ့အနမ်းတွေအောက်မှာ လင်း မျော့မျော့လေးပဲ ကျန်ခဲ့တယ်♥ ခဏခဏပဲ♥ ဒါပေမယ့်လေ သူ လင်းကို ဘယ်တော့မှ တအားမချစ်ဖူး♥ လင်းက မိန်းကလေးပါ♥ လင်းဘဝကို သူ့ကို အကုန်ပေးလိုက်ချင်တယ်♥ သူ့ကို တတ်နိုင်သလောက် နားလည်ပေးနိုင်တယ်♥ ကောင်မလေးတွေနဲ့ သူတွဲနေတယ်♥ သွားနေတယ်♥ လင်းသိတယ်♥ နာကျင်ပေမယ့် လင်း ခွင့်လွှတ်နိုင်တယ်♥ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ လင်း သူ့ကို သိပ်ချစ်တယ်♥ သူ့ကို မချုပ်ချယ်ချင်ဘူး♥ သူ တနေ့ လင်းကို ချစ်မှာပဲ ဆိုတဲ့ မျှော်လင့်ချက်♥ အဲဒီမျှော်လင့်ချက်ပါးပါးလေးနဲ့ လင်းအသက်ရှင်နေတယ်♥ သူ့ကို လင်းမှာ ရှိတာ အားလုံးပေးလိုက်ချင်တယ်♥
တခါတလေတော့လဲ လင်း သူ့ကို နားမလည်ဘူး♥ သူ့အခန်းထဲသွားတယ်♥ သူ အင်တာနက်သုံးနေတယ်♥ လင်း သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ လာထိုင်တဲ့♥ လင်း ဂါဝန်တိုတိုလေး ဝတ်သွားတယ်♥ ထိုင်လိုက်တော့ ကွက်တိ♥ လင်းပိပိလေးကိုလေ သူ့ဟာနဲ့ ထိမိတယ်♥ လင်း တအားခံရခက်တာပဲ♥ ဒါပေမယ့် မပြောပါဘူး♥ လင်းကျေနပ်တယ်♥ သူ လင်းကို ဖက်ထားရင်း နမ်းတယ်♥ လင်း ရင်သားတွေ ကြွတက်လာတယ်♥ သူ့မျက်နှာနဲ့ တည့်တည့်ပဲ♥ သူလေ လင်းရင်သားပေါ်မှာ မျက်နှာအပ်ပြီး နမ်းတယ်♥ လင်း တအားယားတာပဲ♥ သူ့လည်ပင်းကို လင်း တအားဖက်ထားမိတယ်♥ သူ့ပေါင်ကြားထဲက မာလာတယ်♥ လင်း သိတော့သိတယ်♥ ကိုကို့ရဲ့ဟာ♥ ဘောင်းဘီတိုအောက်မှာ သူ ထလာတယ်♥ လင်းပိပိလေးကို အတင်းထိုးတယ်♥ လင်းသိတာပေါ့♥ လင်း ဒါလေး ချွတ်ပေးပါလားတဲ့♥ အင်းလို့♥ လင်း မငြင်းပါဘူး♥ လင်း ဂါဝန်လေးကို မပြီး ချွတ်ပေးလိုက်တယ်♥ သူလေသူ♥ တအားစိုက်ကြည့်တာပဲ♥ လင်း ရင်သားတွေကို ဖွဖွလေး လျှောက်ကိုင်ပြီး♥ လှလိုက်တာ လင်းရယ်♥ လှလိုက်တာ လင်းရယ်တဲ့♥ လင်း ပါးစပ်က ထွက်သွားမိတယ်♥ အဲဒါတွေက ကိုကို့အတွက်လို့♥ သူ ပြုံးတယ်♥ အရမ်းပြုံးတယ်♥ တအားချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ♥ လင်း သူ့နှဖူးလေးကို နမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ သူ လင်းရင်သားတွေကို နမ်းတယ်♥ ဒါလေးရော ချွတ်ပေးတဲ့♥ အင်းလို့♥ လင်း ဘရာလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ရှက်တော့ရှက်တာပေါ့♥ ချွတ်ပေးပြီး မျက်စိမှိတ်ထားမိတယ်♥ တအားရှက်လို့♥ လင်း ရင်သားတွေက သိပ်တော့မထွားပါဘူး♥ အနေတော်ပေါ့♥ သူက ထွားတာ ကြိုက်တယ်ဆိုလို့♥ ဆေးလိမ်းကြည့်သေးတယ်♥ အိမ်ကိုလာနေကျ ဆရာဝန်မမက လျှောက်မလိမ်းနဲ့တဲ့♥ ငယ်ငယ်လေးရှိသေးတယ်တဲ့♥ သူ့ဟာသူ ထွားလာအုံးမှာတဲ့♥ ဒါနဲ့ပဲ လင်း မလိမ်းတော့ဖူး♥ လင်း ထိပ်ဖျားလေးက သေးသေးလေး♥ ပန်းရောင်လေး♥ သူ တအားစို့တာပဲ♥ သူ့နှုတ်ခမ်းက နွေးတယ်♥ ယားလဲယားတယ်♥ စိတ်တအားကြွတာပဲ♥ အတင်းပဲ စို့တော့ လင်းတုန်တက်သွားတယ်♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး သူ နမ်းတာ လင်း ကြိတ်ခံတယ်♥ အကြာကြီးပဲ သူနမ်းတယ်♥ ဒီဘက် ဟိုဘက်♥ ဟိုဘက်ဒီဘက်♥ အို အနမ်းတွေက မဆုံးတော့ဘူး♥ လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေ အိုင်ဆင်းနေတာပဲ♥ ရှက်လိုက်တာ♥ သူ့လက်တဖက်က လင်း ပိပိလေးကို နှိုက်တယ်♥ ဖွဖွလေး အပေါ်ကနေ ပွတ်တယ်♥ တော်သေးတယ် ပင်တီလေးခံနေလို့♥ လင်း တအားစိတ်ကြွလို့ သူ့နားရွက်ကို ကိုက်မိတယ်♥ သူ ရုန်းတယ်♥ လင်းကို ဖယ်ခိုင်းတယ်♥ ပြန်တော့နော်တဲ့♥ လင်း ဝမ်းနည်းသွားတယ်♥ ဘာဖြစ်လို့လဲ♥ လင်း ဘာမှားမိလို့လဲ♥ လင်း သူ့နားရွက်လေးကို ကိုက်မိတာ ဖွဖွလေးပါ♥ နာအောင် မကိုက်ပါဘူး♥ သူ စိတ်ဆိုးသွားတာလား♥ လင်း ငိုပြီး အခန်းပြန်လာခဲ့တယ်♥ ခဏနေတော့ ဝူးကနဲ ကားသံကြားလို့ လင်း ဝရန်တာက ထွက်ကြည့်တယ်♥ သူ ထွက်သွားပြီ♥ လင်း ဘာမှားမိတာလဲ♥ လင်း မတွေးတတ်ဖူး♥ သူ အဲဒီညက ပြန်မလာဘူး♥ လင်း ငိုနေတယ်♥ အမှောင်ထဲမှာ တိတ်တိတ်လေးပေါ့♥
ကျွန်တော် လင်းကို တအားချစ်တယ် … လင်းက သိပ်လှတာပေါ့ … ကောင်မလေးက … သိပ်နုတာပေါ့ … အသားလေးတွေက … ကျွန်တော် မချစ်ရက်ဘူး … နှမြောမိတယ် … အပြင်မှာ ကောင်မလေးတွေ ထည်လဲ တွဲနေပေမယ့် … ကျွန်တော် သူ့ကို တအားချစ်တယ် … ကျွန်တော် မလုပ်ရက်ဘူး … ယောက်ျားပဲ … ချစ်ချင်တာပေါ့ … အားရပါးရ … တအားချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ ကောင်မလေးကို … ကျွန်တော်လေ … ဝေခွဲမရဘူး … ကျွန်တော် ချစ်လိုက်ပြီးမှ … ကျွန်တော့်ထက် ချစ်ရမယ့်သူ … သူ ထပ်တွေ့ခဲ့ရင် … ဟူးးး … ကျွန်တော် မခံစားနိုင်ဘူး … မခံစားချင်ဘူး … အသဲကွဲ ဝေဒနာကို … ဘဝမှာ တကြိမ်ပဲ ကြုံတွေ့ချင်တယ် … ကြုံခဲ့ပြီးပြီ … အရမ်းခါးတယ် … အတွေးက ခါးတော့ လီဗာကို တဆုံးနင်းပစ်လိုက်တယ် … ဝေါ …
ကလပ်ရှေ့မှာ … ကားရပ်လိုက်တယ် … ဒုန်းဒုန်း ဒိုင်းဒိုင်း ဘိသံတွေက … ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ … အပြင်ကို လျှံထွက်နေတယ် … ကျွန်တော် … ကားတံခါးကို ဝုန်းကနဲ ပိတ်ပစ်လိုက်ပြီး … ကလပ်ထဲ ဝင်လာခဲ့တယ် … ကောင်တာက ကောင်မလေး ရီပြတယ် … ၀ိတ်တာကောင်လေး ရီပြတယ် … ခပ်တည်တည်ပဲ … ပြန်မပြုံးမိဘူး … စိတ်ညစ်လို့ … ကလပ်ထဲဝင်တာနဲ့ … တချက်ကြည့်လိုက်တယ် … ပွဲက ကောင်းနေပြီ … ဒီဂျေက မြူးနေပြီ … ကောင်မလေးတွေ ရှိတ်နေသည် … မိုက်ပါ့ … ခေါင်းလေးလှုပ်ပြီး အလယ်လောက်ကို လျှောက်သွားကြည့်တယ် … ဖြတ်ကနဲ ကျောကို လာပုတ်တယ် … ဘယ်သူလဲ … ဇတ်ကနဲ နောက်လှည့်ကြည့်မိတယ် … ငတိဆိုလို့ကတော့ ဆွဲထိုးပစ်မယ် … မဟုတ်ဘူး … သူ … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်လေးနဲ့ … ကောင်မလေး … ဟိုနေ့က ကောင်မလေး … ကျွန်တော် ပြုံးပြလိုက်တယ် … လှပါတယ် … အမဲရောင် ဂါဝန် အတိုအကျပ်လေးက … မီနီစကဒ်သာသာ … မို့မောက်နေတယ် … တင်းပြီး စိတ်ကြွစေတယ် … ဆက်ဆီ ပေါ့ … ကျွန်တော့်နားကို ကပ်ပြီး မေးတယ် …
“ဒါဆို က … တို့နဲ့အတူ က…”
ဒီဂျေက ပိုကြမ်းလာတယ် … ဘိသံတွေက … ပိုမိုက်လာတယ် … သူ့ခါးက ပိုလှုပ်လာတယ် … ဆတ်ကနဲ ရှိတ်တဲ့ဟန်က … မိုက်တယ် … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်လေးက … ဝဲကနဲ ဝဲကနဲ … မီနီစကဒ်လေး အောက်က … တင်သားတွေက … သိမ့်ကနဲ .. လှုပ်တယ် … ခါတယ် ယမ်းတယ် … ကျွန်တော့် သွေးတွေ ဆူလာတယ် … သူ ကျွန်တော့်အရှေ့မှာ … ပွတ်သီးပွတ်သပ် ကတယ် … တင်လေးနဲ့ ကျွန်တော့်ကို နောက်ပစ်ပြီး … ရှိတ်ပြတယ် … ကျွန်တော် … သူ့ခါးကို … ဆတ်ကနဲ ဖက်လိုက်တယ် … ကျွန်တော် … အတင်းဖိကပ်ထားရင်း … ကော့ပေးလိုက်တယ် … သူ တွန့်ကနဲ တုန်ပြီး ဟန်မပျက် ဆက်ကတယ် … အိုကေ … နှစ်ယောက်သား … အထာကျသွားတယ် … ဆက်ကတယ် … မောတဲ့အထိပေါ့ … ဟူး … သီချင်းတပုဒ်ဆုံးတော့ … သူနဲ့ ကျွန်တော် … မခွာတော့ဘူး … ဖက်ထားမိတယ် … သူ့တကိုယ်လုံးက မွှေးနေတာပဲ …. အသားလေးက အိနေတာပဲ … ကျွန်တော် ဖီလင်တက်လာတယ် … သူ မော့ကြည့်တယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်တယ် … သူ ပြန်နမ်းတယ် … မဆိုးဘူးဟ … ခဏနေတော့ အနမ်းတွေ ရပ်သွားတယ် ….
“မောတယ် … ကိုရယ် …”
ကျွန်တော်တို့ နှစ်ယောက် … ဘားကို လျှောက်သွားတယ် … Coke နှစ်ဘူး ဝယ်လိုက်တယ် … ရှူး … ဖောက်ပစ်ပြီး … နှစ်ယောက် အတူသောက်ကြတယ် … အကြည့်ချင်းက ဆုံမိတယ် … ကျွန်တော် သိတယ် … သူ့ဆန္ဒတွေ … ရမက်တွေ ထန်နေတဲ့ မျက်လုံး … ဒီညတော့ သူနဲ့ ကျွန်တော် … အိပ်မယ် … ခေါ်သွားမယ် … ဟိုတယ်ကို … သူ … ကျွန်တော့်ကို မေးတယ် …
“ဘာလို့ ဖုန်းမဆက်တာလဲ …”
“ဟွန့် … မွေးနေ့လက်ဆောင် ပေးမယ်ပြောပြီး …”
“အော် … ဟုတ်ပါရဲ့ … ဒီည တခုခုလိုက်စားလေ …”
“အင်း … အကြွေးဆပ်တာပေါ့…”
“ခုနက … ဘာလို့နမ်းတာလဲ …”
“တို့နာမည် မှတ်မိလို့လား …”
“ယွန်းနဒီ … ဖုန်း 09xxxxx”
“ဟ … ဟ … တော်တော် ဉာဏ်ကောင်းတာပဲ …”
“မဟုတ်ဘူး … ဒီအထဲမှာ မှတ်ထားတာ …”
ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို … လက်ညှိုးထိုးပြီး တော်ကီပစ်လိုက်တယ် … သူ ကြွေသွားတယ် … မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး … ကျွန်တော့်ကို ရီပြတယ် … ကျေနပ်သွားတဲ့ပုံပါပဲ … ပြောစရာမလိုပါဘူး … သူ ကျွန်တော့်ကို ချစ်တယ် … ကျွန်တော် သိတယ် …
“ယွန်းနဲ့ … ကချင်သေးလား …”
“ကချင်တာပေါ့ … “
“အိုကေလေ … ဒါဆို let’s go …”
ကျွန်တော် သူ့လက်လေးကို ဆွဲပြီး … အလယ်လောက်ကို ပြန်လျှောက်လာတယ် … အတော်ပဲ … သီချင်းပြောင်းသွားတယ် … သူနဲ့ ကျွန်တော် ပိုပြီး ရင်းနှီးသွားတယ် … သူ ကျွန်တော့် ရင်ခွင်ထဲမှာပဲ … ကတယ် … ယွန်းရဲ့ ရင်သားတွေက မဆိုးပါဘူး … ထွားတယ် … ခဏခဏ ကျွန်တော့်ရင်နဲ့ ပွတ်မိတယ် … ရင်ချင်းပွတ်တော့ … နှလုံးသားမီးပွင့်တာပေါ့ … မျက်နှာတွေနီလာကြတယ် … ဘိသံတွေက … ပိုပြီး မြန်လာတယ် … ကျွန်တော် သူ့ ခါးလေးကို ဖက်ပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း ခါးလေးကော့ပြီး ကျွန်တော့်ကို မှီပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ဟာနဲ့ သူ့ဟာနဲ့ ထိမိတယ် … ပွတ်မိတယ် … အမှောင်ထဲမှာဆိုတော့ … ဘယ်သူမှလဲ ဂရုမထားမိပါဘူး … အကုန်လုံး … ကိုယ့်အရှိန်နဲ့ ကိုယ် က နေကြတယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်က … တင်းလာတယ် … ယွန်းဟာလေးက ဖောင်းလာတယ် … မသိမသာနဲ့ … တင်သားလေးကို … လက်ဝါးနဲ့ အုပ်ပစ်လိုက်တယ် … တချက်ညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … အို တဲ့ … သူ မော့ကြည့်တယ် … ကျွန်တော် နမ်းပစ်လိုက်တယ် … သူ မျက်စိလေး မှိတ်သွားတယ် … အနမ်းကလဲ မပျက်ဘူး … ရှိတ်တာလဲ မပျက်ဘူး … မိုက်တယ် … ယွန်းတော်တယ် … တမိနစ်လောက်ကြာမလား … နှုတ်ခမ်းချင်းကွာသွားတယ် … ယွန်း … ကျွန်တော့်ကို ရီဝေဝေလေး ကြည့်တယ် … သွားချင်တယ်တဲ့ … ကျွန်တော်လဲ နားချင်နေပြီ … အောက်ကကောင်က သောင်းကျန်းနေပြီ …
“ယွန်း … သွားကြမယ်ကွာ …”
“အင်း … ဗိုက်ဆာလာပြီ …”
“အိုကေ … “
ယွန်းနဲ့ … ကျွန်တော် … ကလပ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ် …
“ဟင့်အင်း မပါဘူး …”
“ဒါဆို … ကို့ကားနဲ့ လိုက်ခဲ့ …”
ကားပေါ်တက်ပြီး … စက်နှိုး … ဝူးကနဲ မောင်းထွက်လာခဲ့တယ် … ကားထဲမှာ … ဘိသံတွေက တဒုန်းဒုန်း … ယွန်း … ကျွန်တော့်ကို ခဏခဏ စိုက်ကြည့်တယ် … ကျွန်တော် သိတယ် … သူ တခုခုဆာနေပြီ … ယွန်း ပေါင်တံလေးကို … ကျွန်တော် ကိုင်လိုက်တယ် … ပွတ်လိုက်တယ် … အစုန်အဆန်ပေါ့ … ယွန်း မငြင်းပါဘူး … ကျွန်တော့်ကို နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး စိုက်စိုက်ကြည့်တယ် … လက်က … ပေါင်ရင်းနားကို ကပ်သွားတယ် … သူ တွန့်သွားတယ် … ကျွန်တော့်လက်ကို … ဖမ်းကိုင်တယ် …
“ကို … ဘယ်သွားမှာလဲ …”
“ပွင့်သစ်ဆန်းမှာ … တခုခုစားမယ် … ပြီးတော့ …”
“ပြီးတော့ … ဘယ်ကိုသွားမှာလဲ …”
“အွန် … ဘယ်သူက လိုက်မယ်ပြောလို့လဲ …”
“ယွန်းပြောတာလေ … ဟုတ်တယ်ဟုတ် …
ကျွန်တော့် ညာလက်က … မြွေလိုပဲ … ယွန်းပေါင်ကြားလေးထဲ ဝင်သွားတယ် … သူ ပေါင်လေးကို အတင်းစိတယ် … မရဘူးလေ … ဒီက လက်က … ဖောင်းဖောင်းလေးကို ဖိထားပြီးပြီ … လက်ညှိုးလေးနဲ့ ကုတ်လိုက်တယ် … ယွန်း … ကျွန်တော့်လက်ကို အတင်းလာဆုပ်ထားတယ် …
“ဟင့်အင်း … ယွန်းကြောက်တယ် …”
“မကြောက်နဲ့ … ဖြေးဖြေးလေး ချစ်မယ်လေ …”
“အင်း … သေချာတယ်နော် …”
“ယွန်းက … bf နဲ့ တခါပဲ နေဖူးတာ …”
“အခု ပြတ်သွားပြီ …”
“စိတ်ညစ်လို့ ကလပ်မှာ လာကတာ …”
“အခု စိတ်မညစ်နဲ့တော့ …”
ပွင့်သစ်ဆန်း ရောက်တော့ … မုန့်စားဖြစ်တယ် … နန်းကြီးသုတ် … နှစ်ပွဲ … ၂၄ နာရီ ဖွင့်တဲ့ဆိုင်ဆိုတော့ … လူများတယ် … လူငယ်တွေ များပါတယ် … ကလပ်အဆင်းမှာ … ၀ါးတီးဆွဲကြတာများတယ် … နဲနဲတော့ ဆူတယ် … လူများလို့ပေါ့ … စားပြီးတော့ … ဘယ်ဟိုတယ် သွားမလဲ … စဉ်းစားတယ် … အနီးဆုံးက … ရွှေဂုံဒိုင် ဟိုတယ် … ကားပျောက် … လူပျောက် … အိုကေ … ခပ်တည်တည်ပဲ … ရွှေဂုံဒိုင်ကို မောင်းပစ်လိုက်တယ် … tunnel ထဲ မောင်းဝင်လိုက်တယ် … waiter ကို ၁၀၀၀ ထုတ်ပေးလိုက်တယ် … သူ အခန်း ယူပေးတယ် … အိုကေ …
door lock ကို သေချာချပြီး … သူ့ကို လှည့်ကြည့်းလိုက်တော့ … နဲနဲ ကြောက်နေတယ် … ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ … မွေ့ယာပေါ်မှာ ထိုင်နေတယ် … လှပါတယ် … အမဲရောင် မီနီစကဒ် လေးအောက်မှာ … ပေါင်တံလှလှလေးက … တင်းနေတာပဲ … ဖွေးနေတာပဲ … ကျွန်တော် တချက်ပြုံးပြလိုက်တယ် …
“ယွန်းက ချစ်ဖို့တအားကောင်းတယ်နော် …”
“အင်း … ဆံပင်လဲလှတယ် …”
“ပြီးတော့ နှုတ်ခမ်းလေးလဲ လှတယ် …”
“ချိုလဲ ချိုတယ်နော် …”
“ကို … နမ်းမယ်ကွာ …”
ယွန်း … ငြင်းသံလေး မဆုံးခင် … ကျွန်တော် ဖက်နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ယွန်းနှုတ်ခမ်းလေးကို … ဖွဖွလေး ခဲလိုက် … လျှာလေး အထဲထည့်ပြီး ကလိလိုက် … နမ်းပစ်လိုက်တယ် … သူလဲ ပြန်နမ်းပါတယ် … လျှာချင်းကလိကြတယ် … လက်ချင်းကလိကြတယ် … ကျွန်တော်က သူ့ဟာကိုင် … သူက ကျွန်တော့်ဟာကိုင် … တဖြေးဖြေး အရှိန်က တက်လာတယ် … အကျီ င်္တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … အတွင်းခံ … တခုပြီးတော့ တခု … ခပ်သွက်သွက်ပဲ … ကုတင်အောက်မှာ … အဝတ်တွေ ပြန့်ကျဲသွားတယ် …
ယွန်း … ကုတင်ပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး … ရင်သားတွေက ထွားတယ် … အရွယ်နဲ့ မလိုက်အောင် ထွားတယ် … တင်းတယ် … နို့သီးခေါင်းလေးက ထောင်နေတယ် … စိတ်တွေ ကြွနေပြီ … စိတ်တွေ ထနေပြီ … ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက … အဖုတ်လေးက … အမွှေးရေးရေးလေး … ဒါလေးမြင်တော့ လင်းကို သတိရမိတယ် … လင်းလဲ အမွှေးရေးရေးလေး … ဘာရယ်မဟုတ် … ကျွန်တော့်ရင်ထဲ ရမက်ဗုံးတလုံး ပေါက်သွားတယ် … ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ … ယွန်းကို ယွန်းလို့ မမြင်ဘူး .. လင်း လို့ပဲ မြင်တယ် … ထင်တယ် … ပေါင်နှစ်ချောင်း ဆွဲဖြဲပြီး … အဖုတ်လေးကို အားရပါးရ ယက်ပစ်လိုက်တယ် …
ယွန်း … ရမက်သံလေး … အော်တက်လာတယ် … မွေ့ယာခင်းကို အတင်းဆုပ်ပြီး ခေါင်းထောင်ပြီး ကြည့်တယ် … မွှေးတယ် … နဲနဲလေးတော့ ငံတယ် … ပြဿနာမရှိ … ကျွန်တော် ယက်ပစ်လိုက်တယ် … အကွဲကြောင်း အတိုင်း … အောက်ကနေ ကော်ပြီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာာာ … ဟင့် … ကို … ကို …”
ခံစားချက်က အလူးလူး အလိမ့်လိမ့် … ကျွန်တော့်လျှာကလဲ … လူးလူးလိမ့်လိမ့် … ယွန်းရဲ့ မ သံလေးကို … စည်းကိုက်ဝါးကိုက် … လျှောက်ယက်ပစ်တယ် … အဖုတ်နှုတ်ခမ်းဖောင်းဖောင်းလေးက … ရဲကနဲ ဖောင်းတက်လာတယ် … ကောင်းတယ် … ဘေးကို ဆွဲဖြဲလိုက်ပြီး … လျှာကို အထဲထိ ထိုးပစ်လိုက်တယ် … အားးး …
ယွန်း … ခေါင်း တခါခါ … လည်တခါခါ နဲ့ … အတင်းကော့ပေးတယ် … ထိပ်ဖျားက အစေ့လေးက … ထောင်လာတယ် … ပဲစေ့လေး … ကဲကွာ … ပါးစပ်နဲ့ တေ့ပြီး စုပ်ပစ်လိုက်တယ် … အသားနုလေးက နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုကြားထဲ … ရွှတ်ကနဲ ဝင်လာတယ် … ဖမ်းကိုက်ပစ်လိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ … ဖိထားတယ် … လျှာလေးနဲ့ ကလိပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း … အပေါ်မှာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ … အော်တာလဲ အရမ်းပဲ … ကုတင်ကို … တဘုန်းဘုန်းနဲ့ ထုတယ် … ထု … ကြိုက်သလောက်သာ ထု … ကျွန်တော် ခဲထားတဲ့ … ပဲစေ့လေးကို … မလွှတ်နိုင်ပေါင် … အဆက်မပြတ် … အပေါ်အောက် ယက်ပစ်လိုက်တယ် … လျှာနဲ့ တို့တယ် … အားကနဲ … သူ အော်ပြီး ကော့ပစ်လိုက်တယ် … မွေ့ယာကနေ … တတောင်လောက် … မြောက်တက်လာပြီး … အရည်တွေ ထွက်ကျလာတယ် … ပြွတ် … ကျွန်တော် … လက်ညှိုးကို … အကွဲကြောင်းအတိုင်း အောက်ကနေ … ထည့်ပစ်လိုက်တယ် … အရည်တွေနဲ့ ဆိုတော့ ကြပ်ပေမယ့် … ဝင်သွားတယ် … လျှောကနဲ … သူ ဖမ်းညှစ်တယ် … အားမရှိဘူး … ယွန်းမောနေတယ် … ကျွန်တော် လက်ညှိုးနဲ့ မွှေတယ် … အပေါ်က အစေ့လေးကို ခဲတယ် … ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ … ယွန်း … အော်ပြီး တောင်းပန်တယ် …
“ကို … ကို … တော်ပါတော့ … ယွန်း မခံနိုင်ဘူး … မခံနိုင်ဘူး … အီး …”
ခုတင်ကို တဘုန်းဘုန်းထုပြီး … တောင်းပန်ရှာတယ် … ကျွန်တော် ရပ်လိုက်တယ် … ကော့တက်နေတဲ့ ယွန်း တင်သားတွေ … ဝုန်းဆို ပစ်ကျသွားတယ် … ပြီးတော့ ရင်ဘတ်ကို လက်လေးနဲ့ ဖိထားရင်း … အမောဖြေတယ် … ယွန်းရင်ဘတ်တွေ လှိုင်းထန်နေတယ် … အသက်ကို ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက် ရှူတယ် … မျက်စိလေးက စင်းနေတယ် … ဟင်း … ကျွန်တော် ဘာမှ မမေးတော့ပါဘူး … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … နှစ်ချက်သုံးချက် … လက်နဲ့ ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဖြောင်းကနဲ ထောင်ထလာတယ် … အတင်းမာဆုံး အခြေအနေမှာ … ယွန်းအဖုတ်လေးထဲ ထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် … တဆုံးပဲ … မစောင့်ဘူး … တရစ်ချင်း မထည့်ဘူး …
“ဟာ … ကို … ကို … ဟင့် … ရှီးးးးးးးးးးးး”
တစ်တော့တစ်နေတယ် … ထစ်နေတယ် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော် အဆုံးထိ ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း … ခေါင်းထောင်လာပြီး … ကျွန်တော့်ကို တအားဖက်ထားတယ် … အောက်ကလဲ တအားကော့ထားတယ် … စီးကနဲ … ဆီးခုံချင်း ကပ်သွားတယ် … ကောင်းတယ် … ယွန်း … ကျွန်တော့်ကို … ရွှတ်ကနဲ နမ်းတယ် …
“တအားဆိုးတာပဲ … ကိုနော် … ဟွန့် … “
“အို … ပြောနေတုန်း … အ …”
ဒီလိုပြောတော့ … ယွန်းကို … ဆတ်ကနဲ ခါးကဖက်ပြီး … အပေါ်ကို ဆွဲတင်ပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း … ကျွန်တော့် အပေါ်ကို ရောက်သွားတယ် … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်လေး ဝဲကနဲ ဖြစ်ပြီး … ကျွန်တော့်အပေါ်မှာ ခွထိုင်ထားတယ် … အဖုတ်လေးက ညှစ်ထားဆဲ … ရင်သားတွေက ကော့ထားတယ် … ဆတ်ကနဲ လှမ်းစို့ပစ်လိုက်တယ် … နို့သီးခေါင်းထောင်ထောင်လေးတွေကို … အားရပါးရ စို့ပစ်လိုက်တယ် … ဟင်းဟင်း … ဟင်းဟင်းနဲ့ … ယွန်း ကျွန်တော့် အပေါ်ကနေ ဆောင့်ပေးတယ် … ပထမ ဖြေးဖြေးလေး … တချက်ခြင်း … ဆောင့်တယ် … အားမရဘူး … ခါးလေးကို ကိုင်ပြီး ဆွဲမပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့် ဒုတ် ကျွတ်ခါပြီး … ပစ်ချလိုက်တယ် … ဝုတ်ဆို … ပြန်အကျ … အောက်ကနေ ဖမ်းပြီး ကော့ပေးလိုက်တယ် … အ … တဲ့ … ယွန်း … ထိသွားတယ် … ဖင်လေးကို … ယမ်းခါပစ်လိုက်တယ် … ဒီလို မွှေရင် … ကျွန်တော် ပိုကြိုက်တယ် … ယွန်းခါးလေးကို ပြန်ထိန်းပြီး …. ဖင်လေးကို ဆွဲမတယ် … ပြန် ပစ်ချတယ် … ခုနက အတိုင်းပဲ … ယွန်း နှစ်ခါလောက် ခံရတော့ … လည်သွားတယ် … ပစ်အကျမှာ … ယွန်း ထိုင်မချဘူး … ခါးလေး ခွက်ပြီး တောင့်ခံထားတယ် … ဘယ်ရမလဲ … ဒီကကောင်ကလဲ … ဖင်နှစ်လုံးကြားထဲ … လက်ညှိုးလေးနဲ့ … စအိုဝလေးကို ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဟင့် ဟင့် ဟင့် ဆို … ယွန်း ပြိုကျလာတယ် … ဒီတော့မှ … ကျွန်တော် ဆောင့်တင်ပစ်လိုက်တယ် … ရှီးးးး … အရှိန်ကတက်လာတယ် … ခါးကိုင်ပြီး တရှီးရှီးနဲ့ … ဆောင့်ပစ်လိုက်တာ … မရပ်မနားပဲ … ယွန်း အပေါ်မှာ … ခါးလေးကို လိမ်ပြီး မွှေ့မွှေ့ပေးတယ် … ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ် … ဒါပေမယ့် အားမရဘူး … အပေါ်က ယွန်းကို … အောက်ပြန်ချ … ဖင်လေးထောင်နေတုန်း … ပေါင်နှစ်ချောင်းကို … ကွေးပြီး ရင်ဘတ်မှာ စုလိုက်တယ် … ထောင်လာတဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို … ကျွန်တော့်ဒုတ် … ထည့်ပြီး ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … တအားအားပဲ … အော်တာပေါ့ … မညှာနိုင်ဘူး … တဇတ်ဇတ် ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … ခန္ဓာကိုယ်ထဲက … အားတွေကုန်ပြီး မောတဲ့ အထိ … ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း … ပထမပိုင်း အော်သေးတယ် … နောက်ပိုင်း … မအော်နိုင်တော့ဘူး … လှုပ်တောင် မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … ရင်တလှပ်လှပ်နဲ့ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး … ကျွန်တော် ဆောင့်သမျှ … သူခံတယ် … အရည်တွေကလဲ … ပွက်ကနဲ ပွက်ကနဲပဲ … ယွန်းအဖုတ်လေးထဲက … အရည်တွေ လျှံကျလာတယ် … ပြီးခါနီးလေ … တအားကောင်းလေပဲ … ဆက်တိုင်ဆောင့်ရင်း … ကျွန်တော့် တကိုယ်လုံး အကြောတွေ တင်းလာတယ် … နောက်ဆုံးတချက် … အနက်ဆုံး ဝင်အောင် အားကုန်ဆောင့်ပြီး … အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပြွတ် … အားးး … ကောင်းလိုက်တာ … ယွန်းရယ် … အရည်တွေ ထွက်သွားတော့ … ကျွန်တော်လဲ အားကုန်သွားတယ် … ယွန်းပေါ်မှာ မှောက်အိပ်ပြီး ခဏမှိန်းနေလိုက်တယ် … သူလဲ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … နှစ်ယောက်သား မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို မချွတ်မိဘူး … စိမ်ထားရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် …
တော်တော်ကြာတယ် … ဖျပ်ကနဲ နိုးလာတော့ … ကျွန်တော်က ပက်လက်ကလေး … ယွန်း မရှိဘူး … မွေ့ယာပေါ်မှာ … ယွန်းမရှိဘူး … toilet ထဲ သွားတာနေမှာပေါ့ … toilet ထဲက မီးလင်းနေတယ် … သန့်ရှင်းရေးသွားလုပ်တာနဲ့ တူတယ် … အခုမှ သတိရတယ် … ကွန်ဒွန် မသုံးမိဘူး … စိတ်က အရမ်းထန်နေတော့ … ကွန်ဒွန်မသုံးမိဘူး … စိတ်ထဲမှာတော့ … မသိုးမသန့် ဖြစ်သွားသေးတယ် … ဒါပေမယ့် … ကျွန်တော့် စိတ်ထဲ တွေးမိလိုက်ပါသေးတယ် … ယွန်းပုံစံလေးက … သန့်မယ် ထင်တာပဲ … သူ့ရီးစားနဲ့ တခါပဲ နေဖူးတယ်ဆိုတော့ … သန့်မှာပါလေ … ကောင်မလေးက … ထန်တော့ထန်တယ် … ကျွန်တော် ကြမ်းသမျှ … သူ ခံနိုင်တယ် … ကောင်းတယ် … အရမ်းကောင်းတယ် … တွေးနေရင်း … ကျွန်တော့် ဒုတ်က ပြန်ထောင်လာတယ် … မာလာတယ် … ယွန်းဘယ်မှာလဲ … တွေးနေတုန်း … ယွန်း ပြန်ထွက်လာတယ် … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးကို … ခါးမှာ စည်းထားတဲ့ ကောင်မလေးက … မိုက်တယ် … ရွှေအိုရောင် ဆံပင်လေးကြောင့် … ဆက်ဆီ ပိုကျနေသလိုပဲ … ရင်သားတွေက ကြပ်ကြပ်လေး စည်းထားတော့ … အပေါ်မှာ မို့ထွက်နေတယ် … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ကြွလာတယ် … ကျွန်တော် ဒုတ်ကို … လက်နဲ့ ညှစ်မိတယ် … ပွတ်မိတယ် … ယွန်း … မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး …
“ကိုနော် … ဘာလုပ်နေတာလဲ …”
“နောက်တခါ ချစ်မလို့ …”
“ဟာကွာ … တအားဆိုးတာပဲ …”
“ဆိုးဆိုးပဲ … ကောင်းလား”
“မကောင်းဘူး … ဒီမှာ … သေတော့မယ် … တအားပဲ …”
“အင်း … ဒီတခါ … ဖြေးဖြေးလေး …”
“တော်ပါ … မယုံဘူး …”
မယုံဘူးသာ ပြောတယ် … ယွန်း … ကုတင်ပေါ်မှာ တစောင်းလေးထိုင်ပြီး … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … မျက်စောင်းလေးထိုးကြည့်တယ် …
“တော်တော်ဆိုးတဲ့ ဟာကြီးပဲ “
ပြောလဲပြော … ဆတ်ကနဲ … ကျွန်တော့် ဒုတ်ကို … ယွန်း ဆုပ်ကိုင်လိုက်တယ် … လက်လေးနုနုနဲ့ … ခပ်တင်းတင်းလေး … ဆုပ်လိုက်တော့ … ကျွန်တော် … ရှီးကနဲ အော်မိတယ် … ယွန်း … ခေါင်းလေး ငုံ့သွားတယ် … ကျွန်တော့် ရင်ထဲ အေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … နွေးကနဲ ဖြစ်သွားတာက … ကျွန်တော့် ဒုတ် … ထိပ်ဖျားလေးကို … သူ ငုံပြီး စုပ်လိုက်တယ် … လှပ်ကနဲ … ယက်ပေးပုံက … သိမ့်ကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ကောင်းတယ် … စုပ် … ဖင်တကြွကြွနဲ့ … အောက်ကနေ … ကျွန်တော် ဖြစ်နေတယ် … ဆစ်ကနဲ ဆစ်ကနဲ … သူ စုပ်တယ် … လက်လေးကလဲ … အပေါ်အောက် လှုပ်ပေးတယ် … မိုက်တယ် … တအားကောင်းတယ် … တရှီးရှီးနဲ့ … ထိပ်ဖျားက … တအားကြီးလာတယ် … မခံနိုင်တော့ဘူး … ယားလာတယ် … တအားယားလာတယ် …လုပ်ချင်လာပြီ …
“တော်ပြီ … တော်ပြီ … ယွန်း … ကို … တအားချစ်ချင်လာပြီ …”
“ဟွန့် … ဘယ်သူက ချစ်မယ်ပြောလို့လဲ …”
ဒိုင်းကနဲ မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း နို့သီးခေါင်းလေးက ထောင်နေပြီ … ကျွန်တော် စို့မလို့ ကုန်းထလိုက်တော့ … မရဘူး … ကျွန်တော့် ရင်ဘတ်ကို … သူ တွန်းတယ် … ကျွန်တော် ဘုန်းကနဲ … ပက်လက်လှန်ပစ်လိုက်တယ် … ယွန်း … ဘာဆက်လုပ်မလဲ … ကျွန်တော် ကြည့်တယ် … သူ ကျွန်တော့်ကို … ခွထိုင်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို သူကိုင်ပြီး … အပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်တယ် … ဂလု … ကျွန်တော် တံတွေးမျိုချမိတယ် … မိုက်တယ် … ယွန်း … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်ပြီး …
“ရှက်တယ်ကွာ … မကြည့်နဲ့ဆို …”
ယွန်း ဒီလိုပြောတော့ … ကျွန်တော် ခေါင်းအုံးတလုံးယူပြီး … မျက်နှာပေါ်အုပ်တင်ပစ်လိုက်တယ် … လုပ် … အပေါ်ကနေ … သူဘယ်လိုလုပ်မလဲ … ကျွန်တော် သိချင်တယ် … ဒီလိုမျိုး မျက်စိမှိတ်ပေးလိုက်တော့ … ယွန်း လုပ်ရဲကိုင်ရဲ ဖြစ်သွားတယ် … ဆတ်ကနဲ … အပေါက်ဝမှာ တေ့ပြီးတာနဲ့ … ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ … မိုက်မိုက်ကန်းကန်းပဲ … အားးးး ကနဲ သူအော်ပြီး … ကျွန်တော့်ဒုတ် အဆုံးထိ ဝင်သွားအောင် … သူထိုင်ချပစ်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ သိမ့်ကနဲ ပြန်ကြွသွားတယ် … ပြန်ထိုင်ချတယ် … အိကနဲ … ယွန်း … ခါးလေးကို … ယိမ်းတယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … သားရေကွင်းနဲ့ စည်းပြီး … နှဲ့နေသလိုပဲ … သူနှဲ့တယ် … ဖင်လေးကို … ဘယ်ယမ်းလိုက် … ညာယမ်းလိုက် … သူ စိတ်တိုင်းကျ ယမ်းတယ် … ဆောင့်တယ် … ကောင်းလာတော့ …. သူ ဆောင့်တာ … သွက်သွက်လေး … ဆောင့်ပေးတယ် … ကောင်းလိုက်တာ … ရှီးးးးးးးး … ကျွန်တော် မနေနိုင်တော့ဘူး … လူးလဲ ထပြီး … သူ့ကို … ဖင်လေး ကုန်းခိုင်းလိုက်တယ် … သူ ကုန်းပေးတယ် … မွေ့ယာပေါ်မှာ လေးဘက်ထောက်ပြီး … ယွန်း ကုန်းပေးတယ် … ကျွန်တော် … ဆောင့်တာပေါ့ … တအားပဲ … ယွန်း … ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ … မျက်နှာအပ်ပြီး … ဖင်လေးကို ကော့ပေးတယ် … ပထမပိုင်းတော့ ကော့ပေးသေးတယ် … နောက်ပိုင်း … ကြမ်းလာတော့ … သူ မကော့ပေးတော့ဘူး … တဘုန်းဘုန်းနဲ့ ကုတင်ကို ထုတယ် … ကျွန်တော်ကလဲ မလျှော့ပေးဘူး … ဖင်နှစ်လုံးကို ဖြဲပြီး … ဆောင့်ဆောင့်ထည့်တာ … အဆက်မပြတ်ပဲ … တဆုံးဆွဲထုတ် … တဆုံး ထိုးထည့် … သူ့ အဖုတ်ထဲက … အရည်တွေဆိုတာ … စီးကျလာတယ် … တောက်ကနဲ တောက်ကနဲ … မွေ့ယာပေါ်ကျသွားတယ် … အရမ်းမိုက်တာပဲ … ကျွန်တော် အားကုန်ဆောင့်ပြီး … ပြွတ်ကနဲ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဟူးးးးးးးးးးးး … မောတယ် … တအားမောတယ် … ယွန်းလဲ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … ယွန်းကို ဖက်ပြီး … ကျွန်တော် အိပ်ပျော်သွားတယ် … ယွန်း တီတီတာတာနဲ့ … ညုသေးတယ် … ကျွန်တော် တချက်နမ်းပြီး … အိပ်ခိုင်းလိုက်တယ် … တအားအိပ်ချင်နေပြီလေ …
လင်း ♥ ကိုကို့ကို ♥ စောင့်နေတယ် ♥ သုံးနာရီ ♥ ပြန်မလာဖူး ♥ တနာရီပြီး တနာရီ မိုးလင်းတယ် ♥ သူ ပြန်မလာဘူး ♥ လင်း မွေ့ယာပေါ်မှာ ငိုရင်း အိပ်ပျော်သွားတယ် ♥ အိမ်မက်ထဲမှာ လင်း သူ့ကိုလိုက်ရှာတယ် ♥ မတွေ့ဖူး ♥ လင်း ငိုချင်တယ် တအားပဲ ♥ တယောက်ယောက်က လင်းကို စိုက်ကြည့်တယ် ♥ လင်း မျက်စိလေး ခိုးဖွင့်လိုက်တော့ ♥ သူ ♥ လင်းကို ♥ ထိုင်ကြည့်နေတယ် ♥ လင်း ပျော်သွားတယ် ♥ အရမ်းပျော်သွားမိတယ် ♥ လင်း အိပ်နေတာကနေထပြီး သူ့ကို ဖက်ထားလိုက်တယ်♥ သူ လင်းကို ပြုံးပြတယ်♥ သွားလဲတိုက်ဖူးတဲ့♥ တအားညစ်ပတ်တာပဲတဲ့♥ လင်း ရှက်ကိုးရှက်ကန်းနဲ့ ခိကနဲ ရီမိတယ်♥ သူ ရေချိုးခန်းထဲက သွားတိုက်ဆေး ထည့်ပေးတယ်♥ လင်းပျော်တယ်♥ ကြင်နာမှုပေးတော့ မေ့မရဘူးပေါ့♥ လင်းသွားတိုက်တာ သူ စောင့်ကြည့်တယ်♥ တအားချစ်တာပဲ♥ လင်း ပျော်တယ်♥ လင်း စားဖို့ ဒင်းဆမ်းတွေ ဝယ်လာတယ်♥ တအားပျော်တာပဲ♥ မိုင်လိုနဲ့ ဒင်းဆမ်း စားတာ ကြိုက်တယ်♥ ကိုကို လင်းကို ခွံ့ကျွေးတယ်♥ ဒီလိုကြင်နာတော့လဲ လင်းအသဲတွေ အရည်ပျော်သွားတာပေါ့♥ ဒီလိုမနက်တိုင်း မနက်စာ လာကျွေးတာ တလကျော်တယ်♥ တရက်မပျက်ဖူး♥ လင်း တအားချစ်တာပဲ♥ စိတ်ချမ်းသာတယ်♥ မိုးလင်းလို့ မျက်စိဖွင့်တာနဲ့ သူရောက်နေပြီ♥ အကြင်နာ ဂရုစိုက်မှုလေးတွေ များလာတော့♥ လင်းရင်ထဲက အချစ်တွေကလဲ ပိုပြီးများလာတာပေါ့♥ တီတီတာတာ မထိတထိလေးတွေလဲ ပိုများလာတာပေါ့♥
အရင်ကဆို လင်းကို ကျောင်းလိုက်မပို့ပေးဖူး♥ အခု လိုက်ပို့ပေးတယ်♥ လာကြိုတယ်♥ လင်းချစ်တယ်♥ တအားပျော်တာပဲ♥
ကျောင်းက ကောင်လေးတွေ သူ့ကို မကြည်ဖူး♥ ဘုကြည့်ကြည့်ကြတယ်♥ သူ လာကြိုတော့ လင်း သူ့လက်မောင်းကို ချိတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ဒါက လင်းရဲ့ကိုကို♥ လင်းရဲ့ တဘဝလုံး သူ့ကိုပဲ မျှော်လင့်ပါတယ်♥ လင်း မျှော်လင့်တဲ့ ညနေလေး ရောက်လာတယ်♥ ဖေဖေ ညစာစားပွဲသွားတော့ လင်း ကိုကို့အခန်းဘက်ကို သွားမိတယ်♥ ညဝတ်ဂါဝန်လေးနဲ့ပေါ့♥ မွှေးမွှေးကြိုင်ကြိုင်လေး♥ အခုအခံမပါတော့♥ ကိုကိုမျက်လုံးတွေ အရောင်ပြောင်းနေတယ်♥ လင်းကို တအားဖက်တယ်♥ တအားနမ်းတယ်♥ ဧည့်ခန်းမှာ သောင်းကျန်းတယ်♥ သူ့ပေါင်ပေါ်မှာ ထိုင်ခိုင်းတယ်♥ လင်းထိုင်ပြီး သူ့လည်ပင်းကို ဖက်ထားတယ်♥ လင်း ပေါင်လေးကို ပွတ်တယ်♥ ဖွဖွလေး♥ ယားတယ်♥ တုန်တုန်တက်သွားတယ်♥ ချစ်တယ်♥ အရမ်းပဲ♥ သူ့လက်က လင်းပေါင်ကြားလေးထဲ တိုးဝင်လာတယ်♥ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကိုလဲ သူနမ်းတယ်♥ အပေါ်ရော အောက်ရော ကလိတော့♥ လင်း တအားကြောက်တာပဲ♥ မျက်စိလေး မှိတ်ထားမိတယ်♥ ဂါဝန်ချွတ်တဲ့♥ လင်း လက်လေးမြှောက်မိတယ်♥ ဂါဝန်လေးကို ဆွဲချွတ်လိုက်တော့♥ ရှက်လိုက်တာ♥ မျက်နှာ ဘယ်ထားရမှန်မသိဖူး♥ သူကတော့ နမ်းတယ်♥ တကိုယ်လုံးကို အစုန်အဆန်ပေါ့♥ ဆိုဖာပေါ်မှာ လင်းက ပက်လက်ကလေး♥ သူ လင်းချိုချိုလေးကို ငုံပြီးစုပ်တယ်♥ ဖွဖွလေး ခဲတယ်♥ လင်း တအားကော့ပေးမိတယ်♥ သူ့ကို တအားဖက်ထားတယ်♥ မရဖူး♥ သူ တအားဆိုးတယ်♥ ဒီဘက်ဟိုဘက်♥ သူ့စိတ်တိုင်းကျ နမ်းတယ်♥ လင်းအသဲတွေ အေးကနဲဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်♥ နွေးကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်♥ ကြက်သီးတွေက တဖြန်းဖြန်းထမိတယ်♥ ပေါင်လေးကို ကားလိုက်တဲ့♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ထားမိတယ်♥ သူ့ကိုစိုက်ကြည့်မိတယ်♥ သူ လင်းကိုကြည့်တယ်♥ အချစ်တွေ♥ တောက်လောင်နေတဲ့ အချစ်တွေကို လင်းခံစားမိတယ်♥ စိတ်ညှို့ခံရသူလိုပဲ♥ လင်း အလိုလိုက်မိတယ်♥ လင်း စိတ်ကိုဒုန်းဒုန်းချပြီး သူ့စိတ်တိုင်းကျ နေပေးလိုက်တယ်♥ ချစ်လို့♥ အရမ်းချစ်လို့♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥
ကျွန်တော် … လင်းကို … တအားချစ်တယ် … မချစ်ရက်လောက်အောင် … ကျွန်တော်ချစ်တယ် … ဟုတ်တယ် … ကျွန်တော့်လက်က ညစ်ပတ်နေတယ် … ရမက်ခိုးတွေ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဝေနေတယ် … ကျွန်တော် ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရွံမိတယ် … သန့်ရှင်းတဲ့ ချစ်သူကို မချစ်ရက်ဘူး … ဒါပေမယ့်လဲ … ကျွန်တော် ပိုင်ဆိုင်ချင်တယ် … ရယူချင်တယ် … ကျွန်တော် လင်းကို ချစ်တယ် … သတ္တိရှိတဲ့ ချစ်သူလေးကို … ဘာလို့ငါက လက်မတွဲရမှာပဲ … သွားမယ် … ကိုယ်ကလဲ ချစ်တယ် … သူကလဲ ချစ်တယ် … ပြီးပြီပေါ့ … ကျန်တာတွေ အတိတ်မှာထားခဲ့မယ် … ကျွန်တော် လင်းကို … နမ်းလိုက်တယ် … သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို … ကျွန်တော် နမ်းတယ် … အစုန်အဆန်ပေါ့ … ဖွဖွလေးနမ်းတယ် … ရွရွလေး ခဲတယ် … ချစ်တယ် … အချစ်စိတ်နဲ့ မိန်းကလေး တယောက်ကို … ချစ်တော့ … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ နူးညံ့သွားတယ် … ရမက်က ပူလောင် တယ်ဆိုပေမယ့် … သိပ်ချစ်တဲ့ ချစ်သူလေးကို … မပူလောင်စေချင်ပါဘူး … လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းလိုက်တယ် … ဖိလိုက်တယ် … ချိုမြတဲ့ … ချစ်သူ့နှုတ်ခမ်းလေးက … ပျားရည်ခဲလေးလိုပဲ … ချိုမြိန်တယ် … လင်း မျက်စိမှိတ်သွားတယ် … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားတယ် … ခပ်တင်းတင်းလေး ဖက်ထားတယ် … သူကြောက်နေတာ … မကြောက်ပါနဲ့ … အသဲရယ် … အနမ်းတွေက ဖြေးဖြေးလေးနဲ့ မွတ်သိပ်လာတယ် … လင်းတကိုယ်လုံးကို … ကျွန်တော် စမ်းကြည့်တယ် … လင်း ရင်သားလေးက ထွားတယ် … အာရုံက ချစ်သူရဲ့ နို့လေးကို စို့ကြည့်ချင်လာတယ် … အနမ်းတွေ ခဏရပ်ပြီး … အောက်ဘက်ကို ဆင်းသွားတယ် … ညဝတ်ဂါဝန်လေးအောက်မှာ … ဘာမှ အခုအခံမရှိဘူး … ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ လင်းရယ် … ကျွန်တော် တချက်နမ်းပြီး …
လင်း … ရီဝေဝေလေးနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်တယ် … ဘာမှပြန်မပြောပါဘူး … လက်လေး မြှောက်ပေးတယ် … တအားချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ … ကျွန်တော် ဂါဝန်လေးကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … လည်ပင်းကနေ … ညဝတ်ဂါဝန်လေး ကျွတ်သွားတော့ … လင်းရယ် … ရင်သားတွေက ထွားလိုက်တာ … ဖြူဝင်းပြီး အိနေတဲ့ … ရင်သားတွေက … လက်တအုပ်စာ မကတော့ဘူး … နို့သီးဖျားလေးတွေက ပန်းနုရောင်လေးတွေ … သေးသေးလေးတွေ … ကျွန်တော် တအားချစ်တာပဲ … လင်းက ကျွန်တော့်ကို အမြဲ အလိုလိုက်တယ် … ဟန်ဆောင်ပန်ဆောင် အလိုလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး … တကယ် စိတ်ပါလက်ပါ အလိုလိုက်တာ … အဲဒါကို ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … ဘဝမှာ နှစ်ခါမရနိုင်တဲ့ … ချစ်သူပေါ့ … ဆိုဖာပေါ်မှာ ပုံ့ပုံ့လေး … ထိုင်နေပုံလေးကို … ချစ်တယ် … ဟန်လဲ မဆောင်တတ်ဘူး … သိပ်လှတဲ့ချစ်သူကို … ကျွန်တော် ထိုင်ကြည့်မိတယ် … ခဏပါပဲ မနေနိုင်ဘူး … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ လှိုင်းထလာတယ် … အချစ်စိတ်တွေ တဝုန်းဝုန်းနဲ့ ပေါက်ကွဲကုန်တယ် … ပန်းနုရောင် နို့သီးဖျားလေးကို … ကျွန်တော် စို့လိုက်တယ် …
အရိုင်းဆန်ဆန်လေး … သူအော်တယ် … ကျွန်တော် ကြိုက်တယ် … မနာကျင်အောင် ဂရုတစိုက်နဲ့ … လင်းရဲ့ ရင်သားလေးကို … ကျွန်တော် စို့လိုက်တယ် … တဖက်က စို့နေတုန်း … တဖက်က ဖွဖွလေး နယ်ပေးလိုက်မိတယ် … အပျိုလေးရဲ့ ရင်သားမို့ … တင်းပါတယ် … မို့နေတယ် … ကျစ်နေတယ် … ကျွန်တော် ချစ်တယ် … လင်း ရင်သားတွေ ကော့တက်လာတယ် … အသက်အောင့်ထားတော့ … ဗိုက်သားလေးက ရှပ်နေတယ် … ဟင်းကနဲ သူ ပြန်အသက်ရှူတယ် … ကျွန်တော် နမ်းတယ် … နို့သီးဖျားလေးကို … ကျွန်တော် ချစ်တယ် … သေးသေးလေးနဲ့ ထောင်နေတယ် … ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းနှစ်ခုနဲ့ ခဲလိုက်တယ် …
“အ … အ … အ … ကိုကိုရယ် … ဟင့်”
လင်း … မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး ပြန်ဖြေတယ် … တိုးတိုးလေး … တကယ်ပါ … ချစ်သူကို … မနာကျင်စေချင်တာ … ကျွန်တော့်ရဲ့ ဆန္ဒအမှန်ပါပဲ … နို့သီးဖျားလေးကို … လျှာလေးနဲ့ လှပ်ကနဲ သိမ်းပစ်လိုက်တယ် … လင်း ကော့တက်လာတယ် … ပြန်ကျသွားတယ် … ကျွန်တော်ထပ်ယက်ပေးတယ် … ဖွဖွလေးခဲတယ် … လင်း … ကျွန်တော့်ကို အတင်းဖက်တယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားတယ် … လင်းက သတ္တိရှိတယ် … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … ပါးပြင်လေးက ရှက်သွေးနီနီလေး တဖြန်းဖြန်းထနေတယ် … ဖြူနုနေတဲ့ လင်းရဲ့ တကိုယ်လုံး … ကြက်သီးဘုလေးတွေ ထနေတယ် … အပျိုလေးဆိုတော့ … ကြက်သီးထမှာပေါ့ … ကျွန်တော် … ဒီဘက်ကို ပိုနမ်းပစ်လိုက်တယ် … ဒီဘက်က နဲနဲသေးတယ် … ပိုသေးတာ ပိုချစ်ဖို့ကောင်းတယ် … ကျွန်တော် ခပ်ပြင်းပြင်းလေး … စုပ်မိတယ် … လင်း … ဆတ်ကနဲ … ကော့တက်လာတယ် … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေ ပိုပြီး တင်းကြပ်သွားတယ် … ကျွန်တော် အားရပါးရ စို့ပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာ … ကိုကို … ကိုကို့ …”
အသံလေးက … သနားစရာ … နာကျင်သွားတာကို … လင်း …. ဘာမှ မပြောဘူး … မျက်နှာလေး မဲ့သွားတယ် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … ကျွန်တော့်ကို ချစ်လွန်းလို့ … အလိုလိုက်တာ … ကျွန်တော် ဆိုးမိတယ် … တဖက်က ဖွဖွလေး နယ်ပေးရင်း … တဖက်ကို အတင်းပဲ စို့မိတယ် … နို့သီးဖျားလေးကို … လျှာလေးနဲ့ အဆက်မပြတ်ယက်ပေးတော့ … လင်း ခေါင်းတွေ ခါသွားတယ် … သူ မခံနိုင်ဘူး … ဘယ်နဲ့ညာ ဆို … ကျွန်တော် ဘယ်ဘက်ရင်သားလေးကို ပိုချစ်တယ် … နဲနဲသေးပေမယ့် ပိုမာတယ် … နို့သီးဖျားလေးက ပိုသေးတယ် … ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ခဲပြီး … လျှာလေးနဲ့ တို့တို့ပေးတော့ …
“အို … ကိုကို … ကိုကို့ … ဟာာာာာ”
သုံးလေးခါလောက် အဆက်မပြတ်လုပ်ပေးလိုက်တော့ …
“ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း …”
လင်း … နာသွားပြီလားမသိဘူး … ကျွန်တော် ရပ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားတဲ့ လက်တွေ ပြေလျော့သွားတယ် … ကျွန်တော် လင်းကိုကြည့်လိုက်တော့ … ကျွန်တော့်ကို စိုက်ကြည့်နေတယ် … မျက်ဝန်းတွေ ပြောရှာပါတယ် … ကိုကိုအရမ်းဆိုးတာပဲတဲ့ … နီရဲတွတ်နေတဲ့ လင်းရဲ့ ပါးလေးကို နမ်းလိုက်တယ် … ရွှတ် … ပေါင်လေးကို လိမ်ပြီး ထိုင်နေတဲ့ … လင်းကို ကြည့်ပြီး … ကျွန်တော့်ရင်တွေ ခုန်လာတယ် … ပေါင်နှစ်ချောင်းကြားက … ဆီးခုံလေးက မို့မို့လေး … အမွှေးလေးက ပါးပါးလေး … ရှိတယ်ဆိုရုံလေး ပေါက်နေတာ … ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ … နမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ် … လင်းရဲ့ ပေါင်တွင်းသားလေးကို … ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးလိုက်တယ် … ပေါင်လေးက မသိမသာလေး ကားချင်သလိုလိုဖြစ်လိုက် … ပြန်စုသွားလိုက်နဲ့ … လင်း ရှက်နေတယ် … ကျွန်တော် သိပါတယ် … လင်းနားကိုကပ်ပြီး … တိုးတိုးလေး တောင်းဆိုလိုက်တယ် …
“ပေါင်လေး … ကားလိုက်ကွာ”
လင်း … တုန်တက်သွားတယ် … သနားပါတယ် … လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်တယ် … ခုနကလိုပဲ … ရှက်သွေးလေးဖြာပြီး … ပေါင်လေးကို ကားပေးတယ် … တကယ်ပါ … လင်းကြည့်တဲ့အကြည့်ကို မေ့မရဘူး … တသက်လုံး စွဲသွားတော့တာပဲ … ကျွန်တော့်အလိုဆန္ဒကို ဘယ်တော့မှ မငြင်းတဲ့ … ချစ်သူလေးကို … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … လှလိုက်တာ … ပေါင်တွင်းသားနုနုလေးကြားမှာ … ဖြူဖြူဝင်းဝင်း ခုံးထနေတဲ့ … လင်းရဲ့ပိပိလေးက … အရမ်းလှတယ် … အမွှေးရေးရေးလေးပေါက်နေပေမယ့် … ပြောင်ရှင်းနေတာပဲ … ဖြူဝင်းပြီး ကြက်သီးဘုလေးတွေ ထနေတဲ့ ပိပိလေးရဲ့ နှုတ်ခမ်းသားလေးက … နဲနဲတော့ထူတယ် … ဒါပေမယ့် လှတယ် … သိပ်လှတယ် … အပျိုလေးမို့ … နှုတ်ခမ်းသားနှစ်ခုက ညီညီညာညာလေး … အကွဲကြောင်းလေးက … ဟတယ်ဆိုရုံလေး … ဖွဖွလေး … ကျွန်တော် ဘာမှ မတွေးချင်တော့ဘူး … ဆိုဖာအောက်မှာ ထိုင်ပြီး … ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ဆတ်ကနဲ လင်း တုန်တက်သွားတယ် … ပေါင်တွေ အတင်း ပြန်စိတယ် … မရဘူးလေ … ကျွန်တော် ပေါင်လေးနှစ်ဖက်ကို လက်နဲ့ ဖိထားပြီး … လင်းရဲ့ ပိပိလေးကို ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်တယ် …
အို … ကို ကို … ဟင့် … ဟင့် … ဟာာာ … ဟာာာ … ကိုကို့ …
လင်း … အသံတွေ တုန်နေတယ် … ကျွန်တော့်ခေါင်းကို … အတင်းဖယ်တယ် … အတင်း ဖက်တယ် … ဆောက်တည်ရာမရ … လင်း ဖြစ်နေတယ် … ဆိုဖာကို လက်သည်းနဲ့ ကုတ်တယ် … ကျွန်တော့်ခေါင်းကို သူ တွန်းတယ် … မရဘူး … မွှေးတယ် … သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူမို့ … ပိပိလေးကို … တရှိုက်တမက် နမ်းပစ်လိုက်တယ် … အကွဲကြောင်းအတိုင်း … အောက်ကနေအပေါ်ကို ပင့်ပြီး ယက်ပစ်လိုက်တယ် … လျှာအပြားလိုက်ပေါ့ … လင်း ခြေထောက်တွေ ကုတ်ကွေးပြီး … ဆတ်ကနဲ ကန်တယ် … ကျွန်တော်ကလဲ အတင်းပဲ … ယက်တယ် … ဟင့်ကနဲ ဟင့်ကနဲ .. တုန်တုန်တက်သွားတာရယ် … လင်းရဲ့ အတွင်းကြိတ်ငြီးသံလေးရယ် … အရမ်းကောင်းတာပဲ … ပိပိလေးကို လက်လေးနဲ့ ဖွဖွလေး ဖြဲလိုက်တော့ … တွေ့ပါတယ် … ပန်းနုရောင် အကွဲကြောင်းလေး …
ဖွဖွလေး ယက်ပေးလိုက်တယ် … နှုတ်ခမ်းသားလေးနုနု နှစ်ဖက်ကို … ဝလုံးလေးတွေ ရေးပေးတယ် … လင်း အံလေးကကြိတ်ထားတယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ခဏခဏ ကိုက်တယ် …
“ဟင့် … ဟင့် … အွန် …”
ခေါင်းလေးကို မော့ပြီး ငြီးတယ် … ဗိုက်သားလေးက ဆတ်ကနဲ ဆတ်ကနဲ တွန့်တွန့်သွားတယ် … အရည်တွေက စိုစိုရွှဲနေတယ် … ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ … အပေါက်ဝလေးမှာ တေ့ပြီး … စုပ်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာာ … ဟာာ … ဟာာာာ”
“နာတယ် … နာတယ် … ဟင့် … ကျွတ် …”
အသားနုလေးကို … တအားစုပ်မိသလို ဖြစ်သွားတော့ … လင်း မျက်ရည်လေးတွေ ဝဲသွားတယ် … သနားပါတယ် … ကျွန်တော် ဖွဖွလေးနမ်းပြီး … အပြားလိုက် ယက်ပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာာာာ … ဟင့် … ဟင့်”
“ကိုကို့ … ကိုကို့ … ဟာ … ကွာ … ဟင့်”
အရည်လေးတွေ စိမ့်ပြီးထွက်လာတယ် … လင်း မျက်နှာလေးက နီရဲတွတ်နေတာပဲ … လင်းအရည်လေးတွေက ချိုတယ် … သိပ်ချစ်တဲ့ချစ်သူမို့ … ရနံ့လေးကလဲ မွှေးနေတာပဲ … ချိုအီအီအရည်လေးကို … ကျွန်တော် ယက်ပေးတယ် … မက်မက်မောမော ယက်ပစ်လိုက်တယ် … လင်းရဲ့ ပဲစေ့လေးက ထောင်နေပြီ … ကျွန်တော် လျှာလေးနဲ့ တို့ကြည့်တယ် … တုန်တုန်တက်သွားတယ် … တဟင့်ဟင့်နဲ့ လင်းခမျာလဲ အလူးလူးအလိမ့်လိမ့် … ချစ်လို့ပါ … အသဲလေးရယ် … လျှာထိပ်လေးနဲ့ ပဲစေ့လေးကို … ဖိထားလိုက်တယ် …
“အို … ကိုကို … ကိုကို့ … လင်း လေ … လင်း … ဟင့် …”
အပျိုမလေး … ကျွန်တော့်ရဲ့ အပြုအစုအောက်မှာ … ရမက်တွေထန်ကုန်တယ် … လင်း ခါးလေးကို အတင်းကော့ပြီး … တဇက်ဇက်တုန်တက်သွားတယ် …
“ဟာ … ဟင့် … ဟင့် … ကိုကိုရယ် … ဟင့် …”
လင်း ငြီးသံလေးကလေ … ကျွန်တော့်နားထဲ … အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ … ခပ်တိုးတိုးလေး ငြီးတွားသံက … ကျွန်တော့်ရင်ကို … အဆုံးမဲ့ လှိုင်းထန်စေတယ် … ကျွန်တော် အဝတ်တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဖြောင်းကနဲ ကန်တက်လာတဲ့ … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … လင်း မျက်စိမှိတ်ထားရင်း ခိုးကြည့်တယ် … နဲနဲတော့ ကြောက်သွားတယ် … ကြောက်ပါနဲ့ အသဲလေးရယ် … အဲဒါလေးကို … လင်းပိပိလေးထဲ ထည့်မလို့ပါ … အကြောက်ပြေသွားအောင် … ညီလေးနဲ မိတ်ဆက်ပေးရအုံးမယ် … လင်း လက်ကလေးကို ကိုင်ပြီး … ကျွန်တော့် ညီလေးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တယ် … လင်း မရဲတဲလေး ကိုင်ကြည့်တယ် …
“အကြီးကြီးပဲနော် … ဟွန့် …”
“မကြီးပါဘူး … သေးသေးလေး …”
“မသေးပါဘူး … လင်းလက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိတာကို … ကိုကိုနော် … ဟွန့် … လင်းသိတယ် …”
ခပ်တိုးတိုးလေး … ချွဲတယ် … ငြိုတော့ မငြိုငြင်ပါဘူး … အဲဒါလေးကြောင့် … လင်းကို … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … ဘယ်တော့မှ မငြင်းဆန်ဘူး …. ကျွန်တော့်ညီလေးရဲ့ အလယ်လောက်မှာ … ပဲစေ့တစေ့ကပ်နေတယ် … ဖောင်းဖောင်းလေး … အမှန်က … ပုလဲတလုံးထည့်ထားတာ … ဂေါ်လီခေါ်မှာပေါ့ … လင်းကြောက်မှာစိုးလို့ … မသိချင်ယောင် ဆောင်နေတာ … လင်း အဲဒီအဖုလေးကို … လက်နဲ့ တို့ကြည့်တယ် …
“အဲဒါ ဘာလို့ ဖောင်းနေတာလဲဟင် …”
“မသိဘူး … အသဲရဲ့ … အဲဒါက မွေးရာပါ …”
“အဲဒါကြောင့် ကိုကို တအားဆိုးတာနေမယ်နော်”
စိတ်ထဲ ထင်ရာလျှောက်ပြောနေတာကို … ကျွန်တော် ရီချင်တယ် … ဒါပေမယ့် … လင်း ကြောက်သွားမှာစိုးလို့ … ဘာမှ မပြောဖူး …
“လင်း ပေါင်လေးကားထားနော် … စိတ်ကိုလျှော့ထား …”
“ဟင့် … နာအောင် မလုပ်နဲ့နော် … ကိုကို …”
ဆိုဖာပေါ်မှာ လုပ်ရတာ အဆင်မပြေဘူး … ပုံစံမကျဘူး ဖြစ်နေတယ် … ဒါနဲ့ … ကျွန်တော် … လင်းကို ပွေ့ပြီး … အိပ်ခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ် … မွေ့ယာပေါ်မှာ အသဲလေးကို အသာချပြီး … ကျွန်တော် တက်လိုက်တယ် … လင်း … မျက်လုံးလေးက ကလယ်ကလယ်နဲ့ … ကျွန်တော်လုပ်တာကို လိုက်ကြည့်တယ် … လင်း ပေါင်လေးကိုကားပြီး … ကျွန်တော် နေရာယူလိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ညီလေးကို … လင်းပိပိလေးပေါ်မှာ တင်ပေးလိုက်တယ် … ဖောင်းမို့နီရဲနေတဲ့ လင်းပိပိလေးကို … ဖိထားရတာ … ဘယ်လိုအရသာမှန်းကို မသိဘူး … ဂွမ်းပုံပေါ်တင်ထားရသလိုပဲ အိအိနွေးနွေးလေး … လင်းလဲ ဘယ်လိုခံစားနေရလဲ မသိပါဘူး … မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး … မွေ့ယာခင်းကို … လျှောက်ဆုပ်နေတယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖွဖွလေးကိုက်ထားတယ် … သွေးကြွနေတဲ့ ချစ်သူလေးကို ကြည့်ပြီး … ကျွန်တော် ခရီးဆုံးထိ ခေါ်သွားဖို့ … ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် … ပိပိလေးက … ဟတယ်ဆိုရုံလေး … ကျွန်တော် တေ့လိုက်တယ် … မဝင်ဘူး … ကျွန်တော် သိတယ် … အပျိုကိုး … တေ့တယ် ဆိုရုံလေး တေ့ထားရင်း … ကျွန်တော် ကလိကြည့်တယ် … လင်းတော့ မသိဘူး … ရှိန်းကနဲ ဖိန်းကနဲ အရသာက … အရမ်းကောင်းတယ် … အရည်တွေ စိုရွှဲနေပေမယ့် … တအားကြပ်တာပဲ … လင်းရဲ့ပေါင်လေးတွေကို ပိုကားလိုက်ပြီး … နှုတ်ခမ်းသားထူထူရဲရဲလေး နှစ်ခုကို … ဖွဖွလေး ဖြဲလိုက်တယ် …
“အို … ကိုကို … ကိုကိုနော် …”
လင်း ခေါင်းလေး ထောင်ကြည့်တယ် … လင်းပိပိလေးကို ဆွဲဖြဲထားပြီး သေချာ စိုက်ကြည့်နေတော့ … လင်း ရင်တွေတုန်သွားတယ် … လင်း တအားရှက်သွားတယ် … ကျွန်တော့်ညီလေး ခေါင်းကို … ထိုးထည့်ပြီး ဖိချလိုက်တယ် …
“အို … ဟင့် … နာတယ် … အီး …”
ဝင်မလိုနဲ့ ချော်ထွက်သွားတယ် … ဟုတ်မလိုနဲ့ … လည်ထွက်သွားတယ် … ကျွတ် … လင်း မျက်နှာလေး ငိုမဲ့မဲ့ ဖြစ်သွားတယ် … သနားပါတယ် … နာသွားတယ်နဲ့တူတယ် … လင်းက အသားနာရင် သည်းခံတာမဟုတ်ဘူး … ကျွန်တော့်ကို ချစ်လွန်းလို့သာ … သူ ငြိမ်ခံနေတာ … ကျွန်တော်သိတာပေါ့ … အရမ်းချစ်တာပဲ … အဲဒါတွေကြောင့်ပေါ့ … ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းလေး နမ်းလိုက် … ရင်သားလေးကို နယ်ပေးလိုက်နဲ့ … နဲနဲ ပြန်နှုးလိုက်တယ် … အဆင်ပြေပြီ … လင်းမျက်စိလေး စင်းပြီး … ဖီလင်တက်ပြီဆိုမှ … နောက်တခါကြိုစားကြည့်တယ် …
“အား … ကိုကိုရေ … ဟင့်”
နဲနဲ ဝင်သွားတယ် … ဒါပေမယ့် … ထိပ်ဖျားပဲ … ထိပ်ဖျားပဲ … ဝင်သွားတာ … ကွမ်းသီးခေါင်းလေး မြုပ်ရုံဆိုတော့ … ဝင်တယ်ဆိုရုံလေး … လင်းနာတော့ ရုန်းတယ် … ဖင်လေးကို လှုပ်လိုက်တော့ … ပြွတ်ကနဲ ပြန်ပြုတ်ထွက်သွားပြန်တယ် … ကျွတ် … ဒုက္ခပါပဲ … ဒီတခါ … လင်း လည်တိုင်လေးကို နမ်း … နားရွက်နောက်ကို နမ်းတော့ … လင်း စိတ်တွေ တအားကြွလာတယ် … ဖင်လေးက တအားကြွကြွတက်လာတယ် … နားရွက်လေးကို ခဲပြီး … ပြန်တေ့လိုက်တယ် … လင်း စိတ်ကြွနေတုန်း ပြန်ထည့်ဖို့ ပြင်လိုက်တယ် …
“အာ … ကွာ … ကိုကိုနော် … ဟင့်”
ပြွတ်ကနဲ ပြန်ဝင်သွားပြန်တယ် … လင်း လက်ကလေးက ဆွဲဖယ်ဖို့ … လုပ်သေးတယ် … ကျွန်တော် နမ်းတယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို ပြန်နမ်းတယ် … ငုံထားပြီး ဒီတိုင်းလေး ခဏလေး နေကြည့်တယ် … နဲနဲလေး ဖိထည့်ကြည့်တယ် … မဝင်ဖူး … လေအိတ်လိုပဲ ပြန်ပြန်ကန်တက်လာတယ် … ထည့်လို့မရဘူး … လင်းတအားညှစ်ထားတာလဲ ပါမှာပေါ့ … သူလဲ ကြောက်မှာပေါ့ … နာတာကိုး … လင်းလည်တိုင်လေးကို နမ်းလိုက်တယ် … လင်း ကြွတက်လာတဲ့အချိန် … ကျွန်တော် ဖိချလိုက်တယ် … ဆစ်ကနဲ ဝင်သွားတယ် … နဲနဲပေါ့ …
“တီ … တောင် … တီ … တောင် “
အိပ်ခန်းတံခါးမပိတ်ထားတော့♥ ဘဲလ်သံက တအားလန့်သွားတာပဲ♥ ဘယ်သူများရောက်လာပါလိမ့်♥ လင်း တုန်တက်သွားတယ်♥ ခုနက ချစ်နေတာတောင် ဘယ်ရောက်သွားမှန်းမသိတော့ဘူး♥ ကိုကို့ကို အတင်းဖယ်ပြီး ဂါဝန်ကို ကောက်စွပ်မိတယ်♥ ကိုကိုက အခန်းထဲမှာပဲနေတဲ့♥ သူသွားကြည့်မယ် ထွက်မလာနဲ့တဲ့♥ ရင်တွေတုန်လိုက်တာ♥ လင်း toilet ထဲဝင်ပြီး ပိပိလေးကို ဆေးလိုက်တယ်♥ ချွဲကျိကျိအရည်တွေက ပေါင်ရင်းနားတောင် စိုနေတယ်♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်းပိပိလေးကို သူ့မို့ နမ်းတယ်♥ မရွံဖူးလားမသိပါဘူး♥ လင်းကို ချစ်လို့နမ်းတာနေမှာပေါ့♥ လင်း ကျေနပ်သွားတယ်♥ ကြည်နူးသွားတယ်♥ လင်းနှလုံးသားမှာ ကိုကို့အချစ်တွေ ပျော်ဝင်သွားတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ ကိုကိုရယ်♥ အခန်းထဲကနေ တံခါးကို ကပ်ပြီးနားထောင်ကြည့်တော့ ကိုကို့ရဲ့ အဒေါ်တွေ ရောက်နေတာ♥ သေရော♥ အခန်းထဲဝင်လာရင်တော့ ဘာပြောရမှန်းမသိဘူး♥ ကွိကနဲမိသွားရင် ဒုက္ခ♥ ရင်တွေ တုန်တာ တအားပဲ♥ ရင်တွေလဲ ခုန်တယ်♥ ကိုကို့ကြောင့်♥ သူ့အဒေါ်တွေကလဲ မပြန်နိုင်ဖူး♥ ကိုကို အခန်းထဲ ခဏဝင်လာတယ်♥ ပြန်တော့မယ်တဲ့♥ အောက်ကိုလိုက်ပို့လိုက်အုံးမယ်♥ အသဲ ပြန်နဲ့အုံးတဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကို့အခန်းထဲမှာ ဟိုလျှောက်ကြည့် ဒီလျှောက်ကြည့် စောင့်နေမိယ်♥ ခဏနေတော့ ကိုကို ပြန်ရောက်လာတယ်♥ ရောက်တာနဲ့ လင်းကို ဖက်တော့တာပဲ♥ နမ်းတော့တာပဲ♥ အသဲလေး နာလားတဲ့♥ ဟင့်အင်းလို့♥ သိပ်မနာဖူး♥ ကိုကိုက ဘာလို့ လင်းကို နမ်းတာလဲလို့ မေးတော့♥ ချစ်လို့ပေါ့တဲ့♥ သိပ်ချစ်လို့ပေါ့တဲ့♥ ပြုံးပြုံးလေး ပြန်ဖြေတဲ့ ကိုကို့အကြည့်တွေအောက်မှာ လင်းနှလုံးသားတွေ အရည်ပျော်သွားတယ်♥ ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ♥ အသဲက အရမ်းလှတယ်နော်တဲ့♥ အင်းလို့♥ အားလုံးက ကိုကို့အတွက်ချည်းပဲလို့♥ အိုကေတဲ့♥ ကိုကို လျှောက်မကဲတော့ဖူးတဲ့♥ အင်းလို့♥ ကဲလို့ရပါတယ်♥ လင်းနားလည်ပေးနိုင်တယ်♥ ဒါပေမယ့် လင်းနဲ့ အပြိုင်မဖြစ်စေနဲ့လို့♥ ဘယ်လို အပြိုင်လဲတဲ့♥ လင်းကို ချစ်သလို နောက်တယောက်ကို မချစ်ရဖူးနော်♥ ပြီးတော့ လက်ထပ်ပြီးရင်လဲ ကိုကိုအပြင်မှာသွားကဲလို့ရတယ်လို့♥ ဒါပေမယ့် လင်းနဲ့ မပြိုင်ရဘူးနော်လို့♥ အင်းတဲ့♥ စိတ်ချတဲ့♥ လင်းကို အချစ်ဆုံးပဲတဲ့♥ ကိုကိုနဲ့ လင်း လမ်းခွဲတဲ့နေ့က ဒီတိုက်ပေါ်က လင်းခုန်ချတဲ့နေ့ပဲလို့♥ ချွဲတာမဟုတ်ဘူးနော်♥ အတည်ပြောတာ♥ အင်းပါ ကိုကိုယုံပါတယ်တဲ့♥ မလုပ်ရဘူးနော်♥ ကိုကိုနဲ့ အသဲဘယ်တော့မှ မခွဲဖူးတဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကို့ကို တချက် နမ်းလိုက်မိတယ်♥ ကိုကိုကလဲ ပြန်နမ်းတယ်♥ ကိုကိုလေ တအားကဲတာပဲ♥ ဂါဝန်ပြန်ချွတ်တဲ့♥ လင်း လက်ပြန်မြှောက်ပေးလိုက်တယ်♥ ကိုကို လင်းဂါဝန်လေးကို ချွတ်တယ်♥ လင်း ရင်သားလေးတွေကို ဖွဖွလေး ကိုင်တယ်♥ စို့တယ်♥ တအားယားတာပဲ♥ ကိုကို့နှုတ်ခမ်းတွေက နွေးနေတာပဲ♥ ဆစ်ကနဲ အကိုက်ခံရတာ♥ လင်း တအားကြောက်တယ်♥ တုန်ုတုန်တက်သွားတယ်♥ မခံစားနိုင်ဖူး♥ တမျိုးကြီးပဲ♥ ကြက်သီးလေးတွေ ပြန်ထလာတယ်♥ ကိုကိုရယ် ဘယ်လိုနေတွေ နမ်းနေတာလဲ♥ ကိုကို့လက်က အငြိမ်မနေပါဘူး♥ လင်း ပေါင်လေးကို ပွတ်လိုက်♥ ပေါင်ကြားထဲ လက်ရောက်သွားလိုက်♥ လင်းပိပိလေးကို နှိုက်လိုက်နဲ့♥ အပေါ်ရော အောက်ရော♥ အို လင်းမသိတော့ဘူးကွာ♥ ကိုကို့ကို တအားဖက်ထားမိတယ်♥ လင်း ရှက်တယ်♥ ရင်သားတွေက စုပ်ပြီးနမ်းလေ♥ လင်း ကော့ပေးမိလေပဲ♥ လင်း အရှက်မရှိတာ မဟုတ်ဖူးနော်♥ သက်သက်လုပ်တာ ဟုတ်ဖူး♥ သူ့အလိုလိုဖြစ်နေတာ♥ တိုးတိုးလေး ငြီးမိတယ်♥ ရှက်တယ်♥ လင်း နားလေးကို ကပ်ပြီး ပင်တီလေး ချွတ်တဲ့♥ ကိုကို ချွတ်ပေးလို့♥ သူ ရီပြတယ်♥ လင်း ရှက်လိုက်တာ♥ လင်း မျက်စိလေးမှိတ်ထားလိုက်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ လင်း ပင်တီလေးကို ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ အေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်♥ လင်းပိပိလေးကို သူ နမ်းတယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်း ကြောက်တယ်♥ နာတာမဟုတ်ဖူး♥ ကျင်တာ♥ တအားကျင်တာ♥ မခံစားနိုင်ဖူး♥ ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိတာ♥ ရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ♥ လင်း ကိုကို့ခေါင်းလေးကို တွန်းကြည့်တယ်♥ မရဖူး♥ ကိုကိုလေ လင်းပိပိလေးကို မြတ်မြတ်နိုးနိုး ယက်ပေးနေတယ်♥ အဲဒီခံစားချက်လေးက လင်းလေ လင်း♥ ကိုကို့ကို အရမ်းချစ်သွားမိတယ်♥ ချစ်ပါကိုကိုရယ်♥ စိတ်တိုင်းကျသာချစ်♥ လင်း ပေါင်လေးကို စုလိုက်ကားလိုက် မလုပ်တော့ဖူး♥ အားတင်းပြီး ကားပေးလိုက်တယ်♥ ဖင်လေးက ပိုပြီးကော့ကော့ပေးမိတယ်♥ ချစ်လို့♥ ထိလို့♥ လင်း ပဲစေ့လေးကို သူ့လျှာနဲ့ ထိလိုက်ချိန်မှာ♥ အိုး ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေလင်း ဟိုးကမ္ဘာအပြင်ဘက်ကို ရောက်သွားသလိုပဲ♥ ကျင်ကနဲ စိမ့်တက်သွားတယ်♥ လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေ ထွက်ကျကုန်တယ်♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေလင်း ရင်တွေ အရမ်းခုန်တာပဲ♥ ကိုကိုလေ သူ့ဟာကြီးနဲ့ လင်းပိပိလေးကို လာတေ့တယ်♥ တအားကြီးတာပဲ♥ လင်းလက်ကောက်ဝတ်လောက်ရှိတဲ့ဟာကို♥ မဝင်နိုင်ဖူး♥ လင်းပိပိလေးကို ထောက်ပြီး ကိုကိုကလိတယ်♥ လင်းကော့ကော့ပေးမိတယ်♥ ဝင်စေချင်ပါတယ်♥ တအားပဲ♥ စိတ်ထဲမှာ အော်ဟစ်ပြီး တောင်းဆိုမိတယ်♥ သွင်းလိုက်ပါတော့ ကိုကိုရယ်♥ အပြင်မှာတော့ မပြောရဲဖူး♥ မျက်စိမှိတ်ပြီး အသက်အောင့်ထားမိတယ်♥ ကြောက်လို့♥ ကိုကို့ထိပ်ဖျားက တော်တော်ကြီးတယ်♥ မဝင်ဖူး♥ ဝင်မလို ဖြစ်လိုက်♥ လည်ပြီး ပြန်ထွက်သွားလိုက်♥ လင်းပိပိလေးတောင်နာလာတယ်♥ မပြောပါဘူး♥ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့♥ သူလဲ ကြိုးစားတယ်♥ ဒါပေမယ့် မဝင်တာက မဝင်တာပဲ♥ တေ့လိုက် ထည့်လိုက်♥ လင်းမရုန်းဘူး♥ ငြိမ်ခံကြည့်တယ်♥ မရဖူး♥ ကြီးကိုကြီးလွန်းတာ♥ ဟွန့်♥ အသဲ နာနေပြီလားတဲ့♥ အင်းလို့♥ နာရင် ကိုကို မလုပ်တော့ဖူးတဲ့♥ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားတာလား♥ ဟင့်အင်း♥ ဆိုးပါဘူးတဲ့♥ မနက်ဖြန် လင်း ကျောင်းမတက်နဲ့တဲ့♥ အေးအေးဆေးဆေး ချစ်ကြမယ်လေတဲ့♥ ဟုတ်♥ အဲဒါနဲ့ပဲ ဂါဝန်ပြန်ဝတ်လိုက်တယ်♥ နာရီကြည့်တော့ ၁၀ နာရီ ရှိတော့မယ်♥ အိမ်ကို မြန်မြန်ပြန်♥ တော်သေးတယ်♥ ဖေဖေ ပြန်မရောက်သေးလို့♥ မေမေကတော့ ဘာမှမပြောပါဘူး♥ တကယ်ပြောတာ♥ လမ်းတောင် ကောင်းကောင်းမလျှောက်နိုင်ဖူး♥ ဒူးတွေ ချောင်နေတာ♥ ခေါင်းလဲမူးတယ်♥
ရေတခွက်သောက်ပြီး ခုတင်ပေါ် ခဏလေးအိပ်မိတယ်♥ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကိုကို♥ teddy က လင်းကို လှောင်တယ်♥ Pooh က လင်းကို ရီနေတယ်♥ ဟွန့်♥ နင်တို့တွေ ဘာဖြစ်နေတာလဲ♥ ငါ့ကိုကိုက ငါ့ကို ချစ်တာ ဘာဖြစ်လဲ♥ သိလား♥ ကိုကိုက ငါ့ကို အရမ်းချစ်တယ်♥ ငါ့ပိပိလေး နမ်းတယ်♥ နင်တို့သိကြလား♥ ဟွန့်♥ မျက်စိလေး မှေးနေတုန်း♥ ဖုန်းလာတယ်♥ ကိုကို့ဆီက♥ အသဲလေး နာနေတာလားတဲ့♥ ဟင့်အင်း♥ အားမရှိတော့ဖူးလို့♥ အိပ်တော့မလို့လားတဲ့♥ ဟင့်အင်းလို့♥ ကိုကို့အကြောင်းတွေးနေတာလို့♥ တကယ်လားတဲ့♥ တကယ်ပေါ့♥ လင်းမှာ တွေးစရာဆိုလို့ ကိုကို့အကြောင်းပဲရှိတာပဲဟာကို♥ ကိုကို ရီတယ်♥ ရွှတ်တဲ့♥ သူ နမ်းတယ်♥ စောစောအိပ်လေတဲ့♥ ဟုတ်♥ အိပ်လို့မပျော်ဖူးလို့♥ မနက်ဖြန်ကျရင် တကယ်ချစ်ပစ်လိုက်မှာနော်တဲ့♥ ချစ်လို့♥ အားလုံးက ကိုကို့အတွက်ပဲလို့♥ အိုကေတဲ့♥ အိပ်တော့တဲ့♥ ဟုတ်♥ ကိုကိုဖုန်းချသွားတယ်♥ မနက်ဖြန်♥ ဟုတ်တယ် မနက်ဖြန်♥ ကိုကိုနဲ့ လင်း တအားချစ်ကြတော့မယ်♥ ကိုကိုဘယ်လိုချစ်မှာလဲမသိပါဘူး♥ မဝင်တဲ့ဟာကို အတင်းထည့်မှာလားမသိဖူး♥ တော်တော်နာမှာ♥ လင်း ကြောက်တယ်♥ တွေးရင်း လင်းပိပိလေးကို စမ်းကြည့်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်းပိပိလေးကို သူ့ဟာကြီးနဲ့ ထောက်ပြီး ထိုးထည့်တယ်♥ အတွေးတွေက လင်းရင်ကို ပူစေတယ်♥ လင်းပိပိလေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်မိတယ်♥ အရင်ကထက်ပိုရဲလာတယ်♥ လင်း ပိပိလေးရဲ့ အတွင်းပိုင်းကို ထိမိတယ်♥ ထိပ်ဝလေးကို ထိမိတာနဲ့♥ စပ်ဖျင်းဖျင်းလေး ခံစားရတယ်♥ အိုးအိုးဟင့်ဟင့်အသံလေးထွက်လာတယ်♥ ကိုကို့ရှေ့မှာတုန်းက မထွက်ရဲဖူး♥ အခုလင်းတယောက်ထဲဆိုတော့ ထွက်ရဲတယ်♥ ငြီးပစ်လိုက်တယ်♥ ဟင့်♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်းကို ခရီးဆုံးထိ ချစ်ပစ်လိုက်စမ်းပါ♥ လင်းလေလင်း မနေတတ်တော့ဖူး♥ ကိုကို့ဟာအကြီးကြီးကို ဝင်စေချင်ပါတယ်♥ မနက်ဖြန်ကျရင်လေ ကိုကို့ကို တအားချစ်စေချင်တယ်♥ ပေးချစ်မယ်နော်♥ ဟင့်♥ အရည်တွေ အများကြီးထွက်သွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်♥ လင်း မျက်စိလေးစင်းပြီး ခိုးကြည့်မိတယ်♥ teddy လေ လင်းကို ရီနေတယ်♥ ဟွန့်♥ မနက်ဖြန်ဆို နင့်ကို မလိုတော့ဖူး♥ ငါ့ကိုကိုနဲ့ သွားချစ်တော့မှာ♥ မျက်စောင်းလေးထိုးပြီး♥ လင်း မူးမူးမေ့မေ့နဲ့ အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ အားမှမရှိတော့တာ♥
မနက်စောစောထတယ် … အိပ်ယာထ … သွားမြန်မြန်တိုက်ပြီး … ရေမိုးချိုး … Oriental House ကိုသွားတယ် … လင်းကြိုက်တဲ့ ဒင်းဆမ်းတွေ ဝယ်တယ် … အိမ်ပြန်ရောက်တော့ … လင်းမေမေတို့ နိုးနေပြီ … ဒင်းဆမ်းတွေ ပေးပြီး လင်းအခန်းထဲ … ကျွန်တော် ဝင်လာခဲ့တယ် … မွေ့ယာပေါ်မှာ … အသဲလေး ကွေးကွေးလေး အိပ်နေတယ် … ကြည့်ပါအုံး … teddy ကိုဖက်ပြီး အိပ်နေတာ … တင်သားလုံးလုံးလေးက ဂါဝန်လေးအောက်မှာ မပေါ့်တပေါ် … ပိပိလေးက ဖောင်းနေတယ် … တင်သားနှစ်ခုကြားမှာ … အိအိလေး … ချစ်ဖို့ကောင်းလိုက်တာ … အိပ်နေတာ ကလေးလေးကျနေတာပဲ … အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ ကလေးလေး အိပ်မောကျနေတဲ့ပုံစံ … နှာတံလေးက စင်းနေတာပဲ … နှုတ်ခမ်းလေးက ပါးတယ် … တအားစွာတယ် … အိမ်မှာဆိုရင် … တဦးတည်းသောသမီးမို့လို့ … တော်တော်ဆိုးတယ် … ကျွန်တော့် တယောက်ကိုပဲ ကြောက်တာ … သူ့အဖေအမေများ … သူငယ်ချင်းလိုပေါင်းတာ … လင်းအပေါ်မှာ ကျွန်တော်နဲ့ ရွယ်တူ အကိုတယောက်က ဆုံးသွားတော့ … သူက ဆိုးချင်တိုင်းဆိုးနေတာ … ကျွန်တော် နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖွဖွလေး နမ်းပစ်လိုက်တယ် … ရွှတ် …
“အွန် … ကိုကိုလား …”
အပျင်းမလေး … ပျင်းကြောဆွဲပြီး … မျက်လုံးလေး ကလယ်ကလယ်နဲ့ … ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်တယ် …
“အစောကြီးပဲ … ဟွန့် …”
“အသဲလေး … နိုးပြီလား”
“လာထ … ဒင်းဆမ်းဝယ်လာတယ်”
အိပ်ယာဘေးက ရေခယားထဲက … တခွက်ထည့်ပြီး … လင်းကို တိုက်လိုက်တယ် … လင်း သောက်တယ် … ညဝတ်ဂါဝန်အောက်မှာ … လင်းရဲ့ အလှတရားတွေက ၀ိုးတဝါးနဲ့ … ဖောင်းကြွနေတယ် … ဟင်းနော် … တော်ကြာမှ တွေ့မယ် … အသဲလေးရေ … ဒီတခါတော့ တဆုံးချစ်ပစ်မယ် … စိတ်ကို ထိန်းပြီး … ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်လာတယ် … မစ်ကီမောက် သွားတိုက်တံလေးကို … သွားတိုက်ဆေးထည့်ပြီး … လင်းကို ပေးလိုက်တယ် … လင်း ကျွန်တော့်ကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းတယ် … အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ … အိပ်ယာထခါစ … မျက်နှာလေးကဖောင်းဖောင်းလေး … မို့နေတယ် … နှုတ်ခမ်းပါးလေး နီရဲနေတာပဲ … လင်း သွားတိုက်တာ … ကျွန်တော် ရပ်ကြည့်နေမိတယ် … အရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ … လင်းရယ် … မျက်နှာသုတ်ဖို့ … မျက်နှာသုတ်ပဝါလေး ယူပေးတယ် … လင်းမျက်နှာသုတ်ပဝါလေးက … pooh အဝါရောင်ပုံလေးနဲ့ … လင်း ယူသုတ်တယ် …
“ကိုကို အပြင်ထွက်အုံးလေ …”
“လင်း အကျီ င်္လဲရအုံးမယ်”
“ဟာကွာ … ရှက်စရာကြီး”
“မရှက်ပါနဲ့ … အသဲကလဲ … ချွတ်ကွာ …”
လင်းလက်ကလေး မြှောက်ပေးရှာတယ် … ညဝတ်ဂါဝန်လေးကို … ခေါင်းပေါ်ကနေ ချွတ်လိုက်တော့ … လင်းရဲ့ ရင်သားမို့မို့လေးတွေ … ဝင်းကနဲ ပေါ်လာတယ် … ပြည့်ဖြိုးတဲ့ ရင်သားလေးပေါ်မှာ … ပန်းနုရောင် နို့သီးခေါင်းလေးတွေက … ထောင်နေတယ် … ကျွန်တော် ချစ်တဲ့ ဘယ်ဘက်က ရင်သားလေးက … ပိုလှတယ် … ကျစ်ကျစ်လေးနဲ့ ဘယ်လိုမှန်းကို မသိဘူး … အရမ်းချစ်တာပဲ … ကျွန်တော် တချက်နမ်းလိုက်တယ် …
“အို … ကိုကိုနော် … “
“ဟင့် … အင်း … မေမေ ဝင်လာလိမ့်မယ် …”
“အင်း ဟုတ်ပါရဲ့ … မေ့သွားလို့ …”
“ဘာအကျီ င်္ဝတ်မှာလဲဟင် …”
“အင်း ဒီဟာလား …”
လင်းရဲ့ အဝတ်ဘီဒိုကို ဆွဲဖွင့်ပြီး … ကျွန်တော် ရှာလိုက်တယ် … အဲဒီဂါဝန်ကို ကျွန်တော်သိတယ် … ခါးလည်မှာ အမဲရောင်ဖဲပြားကြီးနဲ့ … လှတယ် …
“ကိုကို … လင်းရေချိုးရအုံးမယ် …”
ကျွန်တော် အခန်းအပြင်ထွက်လာပြီး … ထမင်းစားခန်းထဲမှာ စောင့်နေလိုက်တယ် … လင်းမေမေနဲ့ ဖေဖေက မုန့်စားနေပြီ …
“လာ … သား … ဒီမှာထိုင် … “
ကျွန်တော် ဝင်ထိုင်ပြီး ကော်ဖီတခွက် ထည့်လိုက်တယ် … လင်းမေမေက … ကျွန်တော့်ကို အရမ်းချစ်တယ် … ငယ်ငယ်တည်းက … လင်းမေမေက … ကျွန်တော့်ကို နို့တိုက်တာ … ကျွန်တော်က … လင်းမေမေကို … မေမေလို့ပဲ ခေါ်တယ် … အန်တီလို့ မခေါ်ရဘူး …
“လင်း … နိုးပြီလား …”
“ဟုတ်ကဲ့ မေမေ … ရေချိုးနေတယ် …”
“ဒင်းဆမ်းတွေ စားအုံး … နေ့တိုင်းဝယ်လာရလား …”
“လင်းက ကြိုက်တာကိုး … မေမေရဲ့ …”
“သားက ကြပ်ကြပ်အလိုလိုက် … ဟိုတယောက်က ပြောမရဆိုမရ …”
“လင်းက လိမ္မာပါတယ် …”
“ကျောင်းကလဲ တိုင်စာပို့တယ် … စာမေးပွဲ ဖြေတာ ကျတယ်တဲ့”
“ဟုတ် … စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ပြောတာပဲ”
“မိန်းကလေးက စာရင်းကိုင်သင်တန်း တက်သင့်တာပဲလေ”
ပြောနေတုန်း … လင်း ရောက်လာတယ် … ပန်းရောင် ဂါဝန်လေးနဲ့ … အသဲလေးက သိပ်လှတာပဲ … လင်း … ထမင်းစားခန်းထဲ ဝင်လာတာနဲ့ … သူ့အဖေနဲ့ အမေကို … အရင်နမ်းတယ် … အဲဒါလေးတွေပေါ့ … တအိမ်လုံးက သဲသဲလှုပ်ဖြစ်နေတာ … အလိုလိုက်ထားတော့ … လင်းက ဘယ်ကြောက်တော့မလဲ … သူ့အဖေဆို သူငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းနေတာ … တအိမ်လုံး ပြုံးပြုံး ပြုံးပြုံးနဲ့ … လင်းကလဲ အသံလေးစာစာ စာစာနဲ့ … ချွဲတယ် … လင်းဖေဖေနဲ့ မေမေ စားပြီးတော့ … အပြင်ထွက်သွားကြတယ် … အတော်ပဲ … အသဲလေးကို … ဒင်းဆမ်းခွံ့ကျွေးချင်တာ … ယောက္ခကြီးတွေက အလိုသိပါတယ် …
“အသဲလေး … ပါးစပ်ဟ …”
လင်းကို … ဒင်းဆမ်းတခု ခွံ့ကျွေးလိုက်တယ် … ချစ်ဖို့ ကောင်းလိုက်တာ … ပလုပ်ပလောင်းနဲ့ ၀ါးတယ် …
“ပဲပြားနဲ့ဟာ … စားမလား”
လင်းစားချင်တာ … တခုပြီး တခု ခွံ့ကျွေးတယ် … မိုင်လို တခွက် သောက်ခိုင်းတယ် … လင်းကလဲ ကျွန်တော့်ကို ပြန်ခွံ့ကျွေးတယ် … အရမ်းပျော်တာပဲ … ချစ်သူနဲ့ ကြည်နူးရတဲ့ … မနက်ခင်းလေးက … ကျက်သရေရှိတယ်လို့ … ခံစားရတယ် … အားလုံးပြီးတော့ … ကျောင်းသွားဖို့ … အောက်ဆင်းလာတယ် … သွားတာတော့ ကျောင်းပါပဲ … ကျောင်းကိုကျော်ပြီး … ကျွန်တော် ဝယ်ထားတဲ့ ကွန်ဒိုအခန်းတခုကို ခေါ်သွားတယ် …
အမှန်အတိုင်း ဝန်ခံရရင် … ဒီအိမ်လေးက … လင်းနဲ့ ကျွန်တော် လက်ထက်ပြီးရင် … နေဖို့ စဉ်းစားထားတဲ့ အခန်းလေးပါ … အကျအနတော့ ပြင်ထားတာပဲ … အခန်းထဲရောက်တော့ … လင်းကို ဖက်နမ်းမိတယ် … မွတ်သိပ်တဲ့အနမ်းတွေကို … မထိန်းချုပ်ချင်တော့ဘူး … လင်းကို နမ်းတယ် … နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ် … ပါးလေးကို နမ်းတယ် … နှဖူးလေးကိုနမ်းတယ် … လည်တိုင်လေးကို နမ်းတယ် … အသဲလေးက … အိုအိုဟင်ဟင်နဲ့ … ကြောက်နေတယ် … အသဲလေးကို … မွေ့ယာပေါ်မှာ လှဲချလိုက်ပြီး … ကျွန်တော် ဆက်နမ်းတယ် … လင်းလေ တအားလှတာပဲ … အသားအရေလဲလှတယ် … အသားလေးကလဲ … မာမာကျစ်ကျစ်လေး … နှုတ်ခမ်းလေးကတော့ ပါးရှာတယ် … စွာတာကိုး … နှုတ်ခမ်းပါးလေးကို ဖိနမ်းပစ်လိုက်တော့ … လင်း ကျွန်တော့ကို ဖက်ထားတယ် … ကျစ်ကျစ်လေး … လင်းရဲ့ ခါးလေးကို ပြန်ဖက်ထားရင်း … ကျွန်တော် … မြတ်မြတ်နိုးနိုး နမ်းလိုက်တယ် … ချစ်လိုက်ရတာ … အသဲလေးရယ် …
သိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲ … မငြင်းရှာဘူး … ကျွန်တော်ပြောသမျှ … အလိုလိုက်တယ် … လက်လေးမြှောက်ပေးတော့ … ပန်းရောင် ဂါဝန်လေးကို … ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပန်းရောင်ဘရာလေးပေါ်မှာ … အရုပ်လေးတွေက ချစ်စရာလေး … ဖောင်းကြွနေတဲ့ လင်းရဲ့ ရင်သားလေးကို … ကျွန်တော် မြတ်နိုးစွာနဲ့ တချက်နမ်းလိုက်တယ် … ရွှတ် … ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက် … ရွှတ် … လင်း ရင်သားလေးတွေ ကော့တက်သွားတယ် … နောက်ဖက်က ချိတ်ကလေးကို ဖြုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ဝင်းအိနေတဲ့ … ကျွန်တော်ချစ်တဲ့ ရင်သားဆိုင်လေး … တွေ့ရတယ် … လင်း ရင်သားလေးကို ကျွန်တော်ချစ်တယ် … နို့သီးဖျားလေးတွေကို နမ်းတယ် … စို့တယ် … ဖွဖွလေး … ရွရွလေး … လင်းငြီးတယ် … ကျွန်တော် ချစ်တယ် … လင်း ရမက်သံလေး ဟိုးဟိုးဟင့်ဟင့်က … နားထောင်ချင်စရာ ကောင်းတယ် … ကျွန်တော် ဖီးလ်တက်လာတယ် … လက်က အောက်ရောက်သွားတယ် … ပန်းရောင် ပင်တီလေးကို … ပွတ်ပစ်လိုက်တယ် … မို့မောက်နေတဲ့ တောင်ကုန်းလေး … ခုန်းထလာတယ် … ကော့တက်လာတယ် … အကွဲကြောင်းလေးအတိုင်း မှန်းပြီး … လက်သည်းနဲ့ ခြစ်ပေးလိုက်တယ် … လင်း … ငြီးသံလေး ပိုကျယ်လာတယ် … အကြောဆွဲသလို ဆတ်ကနဲ … တွန့်သွားတယ် … ချစ်တယ် … လင်းရယ် … မနေနိုင်တော့ဘူး … အသဲလေးရယ် … ပင်တီလေးကို … ဆွဲချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … ပန်းရောင်ပင်တီလေးက … ပေါင်တွင်းသားလေးအတိုင်း … လိမ့်ပြီး ကျွတ်သွားတယ် … ဖောင်းမို့နေတဲ့ လင်းပိပိလေးက … နီရဲနေပြီ … အနမ်းတွေက တဖြေးဖြေးအောက်ဆင်းလာတယ် … ချက်တိုင်နက်နက်လေးကို … လျှာနဲ့ ယက်လိုက်တော့ … အို တဲ့ … တွန့်ကနဲ … ဗိုက်သားရှပ်ရှပ်လေး လှိုင်းထသွားတယ် … ပေါင်ရင်းလေးတွေကို … ဖွဖွလေးနမ်းတယ် … လင်း … ကျွန်တော်လုပ်သမျှ ခေါင်းလေးထောင်ပြီး လိုက်ကြည့်တယ် … လင်းပိပိလေးပေါ် ကျွန်တော့်အနမ်းတွေ မိုးလိုက်တော့ … လင်းမျက်လုံးတွေ … အချစ်ရည်ရွှမ်းသွားတယ် … ကြင်နာခြင်း … အားကိုးခြင်း … ချစ်ခြင်းများနဲ့ … ကျွန်တော့်ကို ကြည့်နေတော့ … ကျွန်တော် ပိုနမ်းမိတာပေါ့ … ပေါင်လေးကိုကား … ပဲစေ့လေးကို လျှာနဲ့ တို့လိုက်တော့ … လင်းမျက်နှာလေး ရဲတက်လာတယ် …
“အို … ကိုကို့ … ကိုကို့ … ကျင်တယ် … နော် … ဟွန့် …”
ပဲစေ့လေးအောက်မှာ … ပိပိအတွင်းပိုင်းလေးက … လှိုက်ကနဲ လှိုက်ကနဲ … လှိုင်းထနေတယ် … ကျွန်တော် လျှာလေးနဲ့ ယက်ပစ်လိုက်တယ် …
“အို … အို … ဟင့် … ဟင့် … အင်း … ကွာ … ဟင့်”
ချစ်သူလေးရဲ့ ပိပိလေးကို … နမ်းနေတဲ့အချိန်မှာ … ကျွန်တော့် ရင်ထဲ … မြတ်နိုးခြင်းတွေ ကြီးစိုးနေတယ် … အစွမ်းကုန် ယုယမှုတွေ … ပေးဆပ်လိုက်ချင်တယ် … ပိပိလေးထဲကို … ကျွန်တော့်လျှာ … မြွေလိုလိမ်ပြီး … ဝင်သွားတယ် … တင်းကနဲ … လင်းပိပိလေးကို … ဆွဲညှစ်ပစ်လိုက်တယ် … အသံလေးက တုန်တက်လာတယ် … ပေါင်သားလေးတွေ ဇက်ဇက်တုန်နေတယ် … ကျွန်တော် … အောက်ကနေ အပေါ်ကို … သိမ်းယက်ပစ်လိုက်တယ် … လျှာအပြားလိုက် … အားရပါးရယက်ပစ်လိုက်တယ် … ချိုလိုက်တာ … အသဲလေးရယ် …
“အာာ … ဟာ…”
လင်း ကော့တက်လာတုန်း … ကျွန်တော် လက်ညှိုးလေးကို … အပေါက်ဝမှာ … တေ့ထားလိုက်တယ် … မနေ့ကလို … သွင်းလို့မရပဲ ကြပ်နေမှာစိုးလို့ … လက်ကလေးနဲ့ အရင် လုပ်မလို့ … လင်း တုန်တက်သွားတယ် …
“အို … ကိုကို … ဟင့်အင်းနော် …”
ချစ်သူလေးက … ရမက်ထန်လေ … ကျွန်တော်က ပိုလုပ်ချင်လေ … အရည်စိုနေတဲ့ … လင်းပိပိလေးထဲ … လက်ညှိုးလေးထိုးထည့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အာာ … ဟာာ … ကိုကို့ … ဟင့် …”
လင်း ကော့တက်သွားတယ် … လက်ညှိုးလေးကို ဖိထည့်လိုက်ရင်း … ပဲစေ့လေးကို … သေချာယက်ပေးလိုက်တယ် …
“ဟာာ … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း …”
လင်း ခေါင်းလေးတခါခါနဲ့ … ယမ်းနေတယ် … အသဲလေး ခံရခက်မှာပေါ့ … တခါမှ မကြုံဖူးတဲ့ … အထိအတွေ့တွေ … ကျွန်တော့်လက်ကို … လင်း ညှစ်ထားတယ် … ကြပ်စီးနေအောင် … လင်းညှစ်ထားတယ် … ဘယ်ရမလဲ … ပဲစေ့လေးကို … ဖိပြီး လျှာဖျားလေးနဲ့ ပွတ်ပေးလိုက်တယ် …
“အို … ကိုကို … အရမ်းနာတယ် … ဟာာ … ကွာ …”
ပြွတ်ကနဲ … ကျွံဝင်သွားတယ် … လက်တဆစ်ပါပဲ … လင်း … ပိပိလေး … ကော့တက်လာတယ် … ဝေ့ကနဲ … ယမ်းပစ်လိုက်တယ် … ခါပစ်လိုက်တယ် … မရပါဘူး … ကျွန်တော်က အတင်းဖိပြီး … နမ်းနေတော့ … လင်း မနေနိုင်တော့ဘူး … ပွက်ကနဲ … အရည်တွေ ထွက်ကျလာတယ် … လက်ချောင်းလေးက … ပူကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … ချစ်လိုက်တာ … အသဲလေးရယ် … ကောင်းရဲ့လား … လင်း မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး ငြီးတယ် … တသိမ့်သိမ့်နဲ့ လင်း မောသွားတယ် … ကျွန်တော် … ထပ်ပြီး ထိုးထည့်လိုက်တယ် … ပြီးတော့ ဖွဖွလေး မွှေပေးတယ် … လင်း … ပိပိလေးကို … တအားညှစ်ထားတယ် … ကျွန်တော့်ကို ကယောင်ကတမ်းနဲ့ တွန်းတယ် … ဖယ်တယ် … မရဖူး … ခြေထောက်လေးက ဟိုကန်ဒီကန်နဲ့ … သနားပါတယ် … အကြောတွေ ကွေးသွားအောင် … ခံရခက်ရှာတယ် … လက်ကလေးကို … အသွင်းအထုတ် … ဖြေးဖြေးလေး လုပ်ပေးတယ် … လင်း .. ကော့ပြီး … အော်တယ် … ငြီးတယ် … နာတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး … ခံရခက်တာ … နေမှာပေါ့ … ကျွန်တော်လဲ စိတ်တွေ တအားကြွနေပြီ … လုပ်ချင်တာပေါ့ … အဆုံးထိ ချစ်ချင်တာပေါ့ … တခြားကောင်မလေးဆို … ဒီလောက်ထိ မနှူးတော့ဘူး … သိပ်ချစ်ရတဲ့ ချစ်သူလေးမို့ … ဂရုတစိုက် ယုယနေတာ … ကျွန်တော် … အကျီ င်္တွေ ချွတ်ပစ်လိုက်တယ် … တင်းပြီး ထောင်နေတဲ့ … ကျွန်တော့်ညီလေးကို … လင်းပိပိလေးပေါ် … တင်လိုက်တယ် … လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို … နမ်းတယ် … လင်းကြောက်မှာစိုးလို့ … လင်းပိပိ အဝလေးမှာ တေ့ပြီး … ကျွန်တော် လင်းကို နမ်းတယ် … လင်း ကျွန်တော့်ကို ဖက်ထားပြီး … မျက်စိလေး မှိတ်ထားတယ် … လင်း ကြောက်နေတယ် … ကျွန်တော်သိပါတယ် … အပေါက်ဝလေးမှာ … တေ့ပြီး … ကျွန်တော် ဖိချလိုက်တယ် … မဝင်ဘူး … ပေါင်လေးကို နဲနဲကား … အကွဲကြောင်းဟဟလေး ပေါ်လာတာနဲ့ … ကျွန်တော် ပြန်တေ့ပြီး … ဖိချလိုက်တယ် … လင်း … ခါးလေးကော့ပြီး … မျက်နှာလေး ရှုံ့သွားတယ် … သနားပါတယ် …
“နာသွားလား … ဆောရီး … ရွှတ် …”
“ဟင့် … နာတာပေါ့ … ဟာာာ … ကိုကို့ …”
ကျွန်တော်ထပ်ပြီး ဖိချလိုက်တယ် … ပြွတ် … ညီလေးရဲ့ ခေါင်းလေး နစ်သွားတယ် … လင်း … လည်ပင်းက … အကြောတွေ ထောင်ထလာတယ် …
“ဟင့် … နာတာပေါ့ …”
“အသဲရယ် … ခဏလေးနော် … ခဏလေး …”
“ဟင့် … ကိုကို့ … အား …”
ပြွတ်ကနဲ … ထပ်ပြီး ဖိချလိုက်တယ် … လင်း နာလွန်းလို့ … ခေါင်းလေး … ယမ်းနေတယ် … ကျွန်တော့်ကို … ဖက်တယ် … ကျောကို ကုတ်တယ် … မွေ့ယာခင်းကို ဆွဲတယ် … လုပ်မိလုပ်ရာ လင်း … လျှောက်လုပ်တယ် … ကျွန်တော်ကလဲ … မချွတ်ပေးနိုင်ဘူး … အရမ်းကောင်းနေပြီ … ဂွမ်းပုံထဲ … ညီလေး စိမ်ထားရသလိုပဲ … လင်းပိပိလေးက ညှစ်ထားလေးက … အသဲယားမိတယ် … စိတ်တွေက အရမ်းကြွနေပြီ … ထိုးထည့်ပစ်လိုက်ရင် … လင်း တအားနာသွားမှာ … ဖြေးဖြေးလေး … အသွင်းအထုတ်လုပ်ပေးတယ် … လင်း ပိပိလေးက ညှစ်ထားတာ လုံးဝ မလွှတ်ဘူး … ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ်လဲ … လင်းပိပိလေးက ညှစ်ထားရင်း … ကော့တက်လာတယ် …
“အသဲ … ကိုကို့ကို … ချစ်လားဟင် …”
“ချစ်တာပေါ့ … ကိုကိုရယ် … ဟင့်”
“ဘယ်လောက်ထိ … ချစ်လဲ”
“အများကြီးပေါ့ … ကိုကိုကသာ ဟွန့်”
“ကိုကိုလဲ … အသဲကို အရမ်းချစ်တယ်ကွာ …”
“အင်း … အား … အား … အား … ဟာ … ကိုကို့ ……………….”
ကျွန်တော် ထပ်ပြီး ဖိထည့်လိုက်တယ် … အဝင်အထွက် … သွက်သွက်လေး လုပ်ပေးတယ် … လင်းရဲ့ အပျိုမြှေးလေးကို … ကျွန်တော် ဝင်တိုက်မိတယ် … အရမ်း ကျေနပ်သွားတယ် … အရမ်း ဝမ်းသာသွားတယ် … တချက်ထဲ … ထိုးခွဲပစ်လိုက်ချင်ပေမယ့် … လင်း အရမ်းနာမှာစိုးတယ် … လင်းပိပိလေးက အရမ်းကောင်းတာပဲ … အရည်တွေ စိုရွှဲနေပေမယ့် … တအားကြပ်တယ် … ဝင်ချင်တိုင်းဝင် … ထွက်ချင်တိုင်းထွက် … လုပ်လို့မရဘူး … လင်းအမြှေးပါးလေးကို … ကျွန်တော် ဖိထားရင်း … လင်းကို … တချက်နမ်းမိတယ် …
“အင်း … အားးးးးးးးး”
သိမ့်ကနဲ … ကျွံဝင်သွားမှုနဲ့ အတူ … လင်းရဲ့ အမြှေးပါးလေးကို … ကျွန်တော်ထိုးခွဲသွားတယ် … ဟိုးအတွင်းပိုင်းထိ … အိကနဲ ဝင်ချသွားတယ် … ကြပ်တယ် … ကြပ်တယ် … တအားကြပ်တယ် … လင်းပိပိလေးက … ညှစ်ထားတယ် … ပြုတ်ထွက်မထွက် … ညှစ်ထားတယ် … လင်း … ကျွန်တော့်ကို ဖက်တယ် … ကျောကုန်းကို ကုတ်တယ် … ပြီးတော့ တအားငိုတယ် … မျက်ရည်လေးတွေ စီးကျလာတယယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ထားရင်း … လင်း ငိုနေတာကြည့်ပြီး … ကျွန်တော် အရမ်းသနားသွားတာပဲ …
“အသဲလေး … အရမ်းနာနေလားဟင် …”
“အင်း … ဟင့် … ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ … ဟီး …”
“မငိုနဲ့နော် … အသဲလေး … သနားပါတယ် … လိမ္မာတယ်နော်”
“ဟင့် … အင်း … အရမ်းနာတာပဲ … အို … ကိုကို့ … ကိုကို့ …”
မျက်ရည်လေးတွေကျနေတဲ့ … ချစ်သူလေးကို ကြည့်ပြီး … ကျွန်တော် … ဖြေးဖြေးလေး ဆွဲထုတ်လိုက်တယ် … ဖြေးဖြေးလေး … ပြန်သွင်းလိုက်တယ် … လင်း … ကျွန်တော့်ကို … သိမ်းကြုံးပြီးဖက်ထားတယ် … ကျွန်တော့်ညီလေးကို … ညှစ်ထားတာ … လုံးဝကို မလွှတ်ဘူး … အတင်းဆွဲထုတ်ပြီး … အတင်းပြန်ထည့်ရတယ် … အားတော်တော်ကုန်တယ် … နားရွက်လေးကို … ဖွဖွလေး ကိုက်ရင်း … ကျွန်တော် … ဖြေးဖြေးလေး အသွင်းအထုတ် လုပ်လိုက်တယ် …
“ဟင့် … အင်း … ဟင့် အင်း … ကိုကို … ကိုကို့ … အ …”
ဖြေးဖြေးလေး ဆောင့်ကြည့်တယ် … လင်း ပိပိလေးက ကော့ကော့တက်လာတယ် … ဖွဖွလေး ဖိပြီး … မွှေပေးလိုက်တယ် … ဖြင်းကနဲ ဖြန်းကနဲ … လင်းပိပိလေးက … ချစ်ရည်ပူလေးတွေ … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ကျွန်တော့်ရဲ့ ဂေါ်လီကြောင့် … လင်း တအားပြီးတာမြန်သွားတယ် … လင်းပိပိလေးရဲ့ အတွင်းသားလေးတွေကို … ဖိပြီးနယ်ပေးလေ … လင်းမျက်နှာလေး ပိုရဲလာလေ … လင်းပိပိလေးကို … ချစ်လွန်းလို့ … ဇိုးဇိုးဇက်ဇက် … နှစ်ချက် … ဆော့ပစ်လိုက်မိတယ် …
“အား … အား … ကိုကို့ … ဟင့် … ဟင့် …”
လင်း … ကျွန်တော့်ကို တအားဖက်ထားတယ် … လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိပြီး … သွက်သွက်လေး … ဆောင့်ပေးတယ် … အွန် … အွန်နဲ့ … လင်း ငြီးသံလေးက … အပြင်ထွက်မလာဘူး … ချစ်လိုက်ရတာ … အသဲလေးရယ် … အရမ်းကောင်းတာပဲ … ဇိုးဇိုးဇက်ဇက် … ဆောင့်လိုက် … မွှေလိုက်နဲ့ … ကျွန်တော်ချစ်သမျှကို … လင်း … အလိုလိုက်ရှာတယ် … နီရဲတွတ်နေတဲ့ … မျက်နှာလေးရယ် … အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ထားရင်း … လည်ပင်းအကြောလေးတွေ ထောင်ထလာတာရယ် … အရမ်းချစ်တာပဲ … စိတ်ရှိလက်ရှိတော့ မဆောင့်ရဲဘူး … လင်း တအားနာသွားမှာစိုးလို့ … ခပ်သွက်သွက်လေးဆောင့်ပေးတယ် … ဟူး … ချွေးတွေက ရွှဲနစ်နေတာပဲ … လင်းကတော့ ဘယ်နှချီ ပြီးတယ်မသိဘူး … ကျွန်တော်ကတော့ မပြီးသေးဘူး … အရမ်းချစ်တဲ့ ကောင်မလေးကို … ချစ်နေရလို့လား မသိပါဘူး … မောလဲမမောဘူး … အရမ်းလဲ ကျေနပ်တယ် … ပီတိလဲဖြစ်တယ် … ကျွန်တော် တချက်ဆောင့်လိုက်တိုင်း … လင်း တုန်တက်သွားတာလေးတွေ … အသက်ပြင်းပြင်းလေး ရှုသွားတာလေးတွေ … အောက်နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ထားတာလေးတွေ … အိုဗျာ … ကော့တက်လာတာလေးတွေ … အရမ်းကောင်းတာပဲ …တရိပ်ရိပ်တက်လာတဲ့ … လင်းရဲ့ ညှစ်အားလေးနဲ့အတူ … ကျွန်တော် … စိတ်ကိုလျှော့ချလိုက်တယ် … လင်းပိပိလေးထဲ … တဆုံးထိုးထည့်ပြီး … ပြွတ်ကနဲ … အရည်တွေ … ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … ချစ်တယ် … လင်းရယ် … အရမ်းချစ်တယ် … ကျွန်တော် ချစ်သူလေးပေါ်မှာ … ခဏလေး … မှေးနေလိုက်တယ် … ကြည့်ပါအုံး … အသဲလေး … တအားမောနေရှာတယ် … နဖူးမှာ ချွေးတွေနဲ့ … စို့နေတာပဲ … ကျွန်တော် ဖွဖွလေး သုတ်ပြီး … နမ်းလိုက်မိတယ် … လင်း မျက်စိလေးတောင် မဖွင့်နိုင်ဘူး … ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက်နဲ့ … မှိန်းနေရှာတယ် …
“အရမ်းမောနေလား … အသဲလေး …”
“ချစ်တယ်နော် … အသဲ”
“ချစ်တာပေါ့ … ကိုကိုရယ် … အရမ်းချစ်တယ် …”
“အ … ဖြေးဖြေးကွာ … ဟင့် …”
ကျွန်တော် … ဖြေးဖြေးလေး … ဆွဲချွတ်လိုက်တယ် … ဝေါကနဲ အရည်တွေ အံကျလာခြင်းနဲ့အတူ … လင်းမျက်နှာလေး မဲ့သွားတယ် … ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်သွားတယ် … လင်း မွေ့ယာပေါ်မှာ ပက်လက်ကလေး … မှိန်းနေရှာတယ် … လှုပ်တောင် မလှုပ်နိုင်ဘူး … သနားပါတယ် … တော်တော် အားကုန်သွားတယ်နဲ့ တူတယ် … ရေချိုးခန်းထဲသွားပြီး … ကျွန်တော် သန့်ရှင်းရေးလုပ်လိုက်တယ် … ပြန်ထွက်လာတော့ … ရေတခွက်သောက်ရင်း … ချစ်သူလေးကို … ကြည့်လိုက်တယ် … အိပ်နေတယ် … ပုံ့ပုံ့လေး … လင်းကို … ကျွန်တော် တအားချစ်တယ် … သူ့ရဲ့ အပျိုဘဝလေးကို … ကျွန်တော့်ကို … ကျေကျေနပ်နပ်လေးနဲ့ … ပေးတယ် … ကျွန်တော် ရယူလိုက်တယ် … ကျွန်တော် အရမ်းကျေနပ်တယ် … ကျွန်တော် ချစ်တယ် … မြတ်မြတ်နိုးနိုးလေး ငုံ့နမ်းလိုက်တယ် … နဖူးလေးကို … နမ်းလိုက်တယ် … ဝဲကျနေတဲ့ ဆံပင်လေးကို … သပ်ပေးလိုက်တယ် … လင်း အိပ်ပျော်သွားပြီ …
“အရမ်းချစ်တာပဲ … အသဲရယ် …”
လင်း ကိုကို့ကို တအားချစ်တယ်♥ လင်းရဲ့တဘဝလုံး ကိုကို့ကိုပေးလိုက်ပြီ♥ လင်းကျေနပ်တယ်♥ လင်း အားမရှိတော့ဖူး♥ လှုပ်ကို မလှုပ်နိုင်တာ♥ လှုပ်လဲမလှုပ်ချင်ဖူး♥ လင်းပိပိလေးထဲကို ကိုကို့ဟာ ဝင်လာတာ♥ တအားခံရခက်တာပဲ♥ ရင်ထဲအောင့်တက်လာအောင် ကြီးတယ်♥ ကိုကို့ဟာအရမ်းကြီးတယ်♥ လင်းပိပိလေးထဲ မဝင်ဖူးထင်ထားတာ ဝင်တယ်♥ မဆန့်ဖူးထင်တာ ဆန့်တယ်♥ လင်းပိပိလေး ပေါက်ထွက်သွားမယ်ထင်ထားတာ♥ လင်းအရမ်းကြောက်တာပဲ♥ အရမ်းနာတယ်♥ အသဲခိုက်အောင်နာတယ်♥ ငိုမိတယ်♥ တအားနာတာပဲ♥ ဒါပေမယ့် ခံစားချက်က ဘယ်လိုမှန်းကို မသိတာ♥ ရင်တွေ တအားတုန်တာပဲ♥ တအားလဲမောတယ်♥ ကိုကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး ချစ်တဲ့အချိန်ကဆို လင်းရင်ထဲမှာ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ♥ လင်း တအားဖက်ထားမိတယ်♥ ကြောက်လို့♥ သိမ့်ကနဲ လေပေါ်ရောက်သွားတဲ့အချိန်ဆို♥ လင်း တအားမောတာပဲ♥ တလှပ်လှပ်နဲ့ ရင်တွေ တအားခုန်တယ်♥ ပြီးသွားတော့ လင်း မလှုပ်နိုင်ဖူး♥ အားမှ မရှိတော့တာ♥ လင်း မှိန်းနေလိုက်တယ်♥ မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ ကိုကိုလေ အိမ်မက်ထဲမှာ လာနမ်းတယ်♥ အရမ်းဆိုးတာပဲ♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို လာနမ်းတယ်♥ လင်း မျက်စိလေး ခိုးဖွင့်ကြည့်တယ်♥ အို♥
ကိုကိုလေ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းနေတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်း ကိုကို့လည်ပင်းကို ဖက်လိုက်တယ်♥ ကိုကို လင်းဘေးနားမှာလာအိပ်တယ်♥ အသဲလေး နာသေးလားတဲ့♥ နာတာပေါ့လို့♥ ကောင်းလားတဲ့♥ ဟင့်အင်း သိဖူးလို့♥ ချစ်လားတဲ့♥ ချစ်တာပေါ့လို့♥ အရမ်းချစ်တာပေါ့လို့♥ ရွှတ်ကနဲ ကိုကို နမ်းတယ်♥ လင်းကို ကိုကိုဖက်ထားရင်း♥ အခုဆို လင်းနဲ့ကိုကိုက လင်မယားတွေ ဖြစ်သွားပြီနော်တဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကိုက လင်းကို ထားခဲ့မှာလား♥ မထားပါဘူး♥ တသက်လုံးချစ်မယ်တဲ့♥ လင်း အရမ်းပျော်တာပဲ♥ လင်း ကိုကို့ကို အရမ်းဖက်ထားလိုက်တယ်♥ နွေးတယ်♥ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲမှာ လင်း ဒီလို တသက်လုံးနေရရင် သိပ်ကောင်းမှာပဲ♥ ကိုကိုလေ လင်း တကိုယ်လုံးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးတယ်♥ ကြက်သီးထလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ အချစ်ကြီးချစ်ပြီးသွားပေမယ့် ကိုကို ဒီလိုလေး ပွတ်သပ်တော့♥ လင်း ကြက်သီးတွေ ထလာတယ်♥ ခုနကလို ပြန်ဖြစ်ချင်လာတယ်♥ နာလဲနာတယ်♥ ချစ်လဲချစ်ချင်တယ်♥ ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိပါဘူး♥ လင်းပိပိလေးထဲက အရည်တွေ စိမ့်ထွက်နေတယ်♥ အဲဒါတော့ လင်းသိတယ်♥ ကိုကိုရယ် ထပ်ချစ်မလို့လားဟင်♥အို ကိုကိုရယ်♥ လင်းနှုတ်ခမ်းကို နမ်းပြန်ပြီ♥ ဟင့်♥ အသဲတွေကို စုပ်ယူသွားသလိုပဲ♥ လင်း အားမရှိတော့ဖူး♥ မျက်စိလေး မှေးပြီး ကိုကို နမ်းတာ ခံနေမိတယ်♥ ဟွန့်♥ လင်း ရင်သားလေးတွေ ကော့တက်လာတယ်♥ ကိုကိုဆိုးတယ်♥ လက်ဝါးကြီးနဲ့ အုပ်ပြီး နယ်တယ်♥ လင်းနို့သီးဖျားလေးကို ဖွဖွလေး ချေပေးတယ်♥ အနေရခက်လိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ ကိုကို လည်တိုင်ကို နမ်းတယ်♥ တဖြေးဖြေး အနမ်းတွေက အောက်ကိုဆင်းလာတယ်♥ လင်းမရှက်တော့ပါဖူး♥ လင်း ရင်သားလေးကို နမ်းစေချင်တယ်♥ လင်း ရင်သားတွေကို ကော့ပေးမိတယ်♥ ဟွန့် ကိုကို မနမ်းဖူး♥ ဟာကွာ♥ ချက်တိုင်လေးကို နမ်းတယ်♥ ဗိုက်သားလေးကို နမ်းတယ်♥ ဟင့်♥ ကိုကိုနော်♥ လင်းသိတယ်♥ လင်းပိပိလေးကို နမ်းတော့မယ်♥ တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်းပေါင်လေးကို ကားခိုင်းတယ်♥ လင်း ကားပေးလိုက်ပါတယ်♥ ချစ်တာကိုး♥ မငြင်းမိဖူး♥ ငြင်းစရာလဲ မလိုတော့ဖူးလေ♥ လင်းပိပိလေးမှာ အရည်တွေနဲ့♥ ကိုကို မရွံဖူးလားမသိဖူး♥ လင်းပိပိလေးကို သူ စနမ်းတယ်♥ မက်မက်မောမောနမ်းတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်♥ လင်း ရင်ထဲမှာ ပြောမပြတတ်အောင် ကိုကို့ကို ချစ်မိသွားတယ်♥ ပေကျံနေတဲ့အရည်တွေကို ကိုကို ယက်တယ်♥ အား ဟင့် ဟင့်♥ စပ်ဖျင်းဖျင်း ဝေဒနာလေးကို လင်းခံစားရတယ်♥ စပ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်♥ အသဲလေး နာလို့လားတဲ့♥ စပ်နေတာလို့♥ သနားပါတယ်တဲ့♥ ထပ်ချစ်လို့မရဖူးပေါ့တဲ့♥ ဟင့်အင်း♥ ကိုကိုချစ်ချင်လို့လား♥ အင်းတဲ့♥ ဒါဆို ချစ်လို့♥ တအားချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့♥ ကိုကို့ကို အရမ်းချစ်လို့နော်♥ ဟွန့်♥
လင်းပိပိလေးကို ကိုကို့ဟာကြီးနဲ့ ထောက်တယ်♥ လင်းကြောက်တယ်♥ ဖြေးဖြေးလေး ဝင်လာတယ်♥ အရမ်းနာတာပဲ♥ ငိုတောင် ငိုချင်တယ်♥ မျက်ရည်လေး ဝဲသွားတယ်♥ အရမ်းကြပ်တာပဲ♥ ဟင့်♥ သေတော့မယ်♥ အံလေးကြိတ်ပြီး ကိုကိုချစ်တာကို ခံမိတယ်♥ နာတာပေါ့♥ အရမ်းနာတာပေါ့♥ ကိုကို သွက်သွက်လေးချစ်တယ်♥ လင်း တအားဖက်ပြီး အော်မိတယ်♥ ကိုကို မလျှော့တော့ဖူး♥ ပိုပြီး ကြမ်းလာတယ်♥ လင်းလေ လင်း♥ တကယ်မနေတတ်တာပါ♥ ဖိန်းကနဲ အရည်တွေ ထွက်သွားမိတယ်♥ ကိုကိုစိတ်ဆိုးသွားမလား မသိဖူး♥ လင်း ကြောက်တယ်♥ အရည်တွေပိုများလာတော့ ကိုကို ပိုမြန်လာတယ်♥ လင်းနားရွက်လေးကို ကိုက်ပြီး သူ အရမ်းချစ်တယ်♥ လင်းလေလင်း သေတော့မယ်♥ ယားလဲယားတယ်♥ နာလဲနာတယ်♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဖူး♥ ထပ်ခါထပ်ခါ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်မိတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်း တကိုယ်လုံးမှာ အားမရှိတော့ဖူးလေ♥ ကိုကိုက ချစ်လို့မဝနိုင်ဖူးလားဟင်♥ ဟင့်♥ ကိုကို ပိုကြမ်းလာတယ်♥ ဆက်ခါဆက်ခါ လင်းကို ချစ်တယ်♥ လင်းလေလင်း ဘာမှမသိတော့ဖူး♥ ကိုကို့ကို တအားဖက်ထားရင်း ကိုကိုချစ်သမျှ ငြိမ်ခံနေမိတယ်♥ အံလေးကြိတ်တယ်♥ တအားညှစ်ထားမိတယ်♥ နာလို့♥ နောက်ဆုံးတချက်♥ လင်းပိပိလေးထဲ အတင်းထိုးထည့်ပြီး♥ ကိုကိုလေ ကိုကို ရပ်သွားတယ်♥ တအားနာတာပဲ♥ ကြပ်သိပ်နေအောင် ကိုကို့ဟာကြီးက♥ ဟင့်♥ လင်းပိပိလေးထဲမှာ အတင်းထည့်ထားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ အသဲလေးရယ်တဲ့♥ လင်းလေ တအားနာတာပဲ♥ ဒါပေမယ့် မရုန်းမိဖူး♥ ငြိမ်ငြိမ်လေး နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး နေမိတယ်♥ ကိုကို့ကို ချစ်လို့♥ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့♥ လင်း ငြိမ်နေမိတယ်♥ ကိုကိုလေ လင်းကို တအားနမ်းတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲတဲ့♥ လင်းလဲ ကိုကို့ကို အရမ်းချစ်ပါတယ်နော်♥ ကိုကိုနဲ့ လင်း လှိုင်းစီးရသလိုပဲ တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ဖက်ထားမိတယ်♥ လင်းလေ အဲဒီအချိန်လေးကို သိပ်ကြိုက်တာပဲ♥
သန့်ရှင်းရေး လုပ်မလို့ ထလိုက်တော့♥ ကျွတ် ကျွတ်♥ တအားစပ်တာပဲ♥ အရည်တွေ ပေပွနေတဲ့ မွေ့ယာခင်းကို ကြည့်ပြီး ရှက်မိတယ်♥ ဟာကွာ♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ ကြားထဲမှာ သွေးကွက်လို နီနီရဲရဲလေး♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်မိတယ်♥ ကိုကို မျက်စပစ်ပြတယ်♥ လင်းလေ ရှက်လွန်းလို့♥ ကိုကို့ ရင်ခွင်ထဲ ခေါင်းနဲ့ ဝှေ့မိတယ်♥ ဟုတ်တယ်♥ လင်းရဲ့ ပန်းဦးကြွေ ရေအိုင်လေးပေါ့♥ လင်းလေ စိတ်ထဲမှာ တသိမ့်သိမ့်နဲ့ ကျေနပ်နေမိတယ်♥ ရှက်လဲရှက်တယ်♥ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ကိုကို့ကို လင်းပိုင်ဆိုင်သမျှ ပေးလိုက်နိုင်ပြီပေါ့♥ ကိုကိုလေ လင်းကို ပွေ့ထားရင်း လင်းပါးလေးကို နမ်းတယ်♥ အသဲလေးက တအားချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတဲ့♥ ကြည့်ပါအုံး ရဲရဲတွတ်နေတာပဲ♥ ပန်းဦးကြွေ ရေအိုင်လေးကို လက်ညှိုးထိုးပြတော့ လင်းရှက်လိုက်တာ♥ လင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ရေချိုးခန်းထဲ ပြေးထွက်လာခဲ့တယ်♥ မိုက်ကနဲ လင်းလေ ယိုင်ဆင်းသွားတယ်♥ တကယ်အားမရှိတာ♥ စိတ်ကသာ ပြေးချင်နေတာ♥ အားမရှိတော့ ပုံကနဲ လဲကျသွားတယ်♥ ကိုကိုလေ လင်းကို လာပွေ့တယ်♥ အတင်းမပြေးနဲ့တဲ့♥ ဘယ်နားနာသွားလဲတဲ့♥ ဟင့်အင်းလို့♥ ကိုကို့ လည်တိုင်ကို ခိုရင်း ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ်♥ ရေချိုးဇလားထဲမှာ ထိုင်တဲ့♥ ပေါင်လေးကားတဲ့♥ လင်းပိပိလေးကို ရေနွေးလေး လောင်းချပေးတယ်♥ စပ်လိုက်တာ♥ စပ်လိုက်တာ♥ ဟင့်♥ ဆပ်ပြာလေးနဲ့ ဆေးပေးတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ ကိုကိုရယ်♥ လင်းကို အဲဒီလိုမျိုး ကြင်နာတော့ အရမ်းပျော်တာပဲ♥ ဖုန်းမြည်သံကြားရတော့ ကိုကို သွားကိုင်တယ်♥ လင်း အရမ်းပျော်တာပဲ♥ ဇလားထဲမှာ တဗွမ်းဗွမ်း ကူးနေတယ်♥ နဲနဲကြာတော့ ချမ်းလာတယ်♥ မျက်နှာသုတ်ပဝါနဲ့ ရေတွေသုတ်ပြီး♥ ရေချိုးခန်းထဲက ချောင်းကြည့်တယ်♥ ကိုကို ဘာလုပ်နေလဲပေါ့♥ ကိုကိုလေ အိပ်ယာခင်းကို ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်နေတယ်♥ ဘာလုပ်တာလဲမသိဖူး♥ သွားကြည့်တော့မှ လင်းရဲ့ လင်းရဲ့♥ ဟာကွာ♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ အနီရောင်အကွက်လေးကို ကပ်ကြေးနဲ့ ညှပ်ပြီး သိမ်းထားမလို့တဲ့♥ လင်း လိုက်လုသေးတယ်♥ မရဖူး♥ ရှက်ဖို့ တအားကောင်းတာပဲ♥ ဘာလုပ်မလို့လဲ မေးတော့♥ မှန်ဘောင်သွင်းထားမယ်တဲ့♥ သေရော♥ မျက်နှာဘယ်နားထားရမလဲတောင် မသိဖူး♥ တအားဆိုးတာပဲ♥ တအားလဲ ပျော်မိတယ်♥ အချိန်ကုန်တာ တအားမြန်တာပဲ♥ အိမ်ပြန်ရတော့မယ်♥ ဟွန့်♥
အိမ်ရောက်တော့ မေမေ့ကို မကြည့်ရဲဖူး♥ လင်း မဟုတ်တာ လုပ်မိထားသလိုပဲ ကြောက်တယ်♥ အခန်းထဲ မြန်မြန်ဝင်ပြီး မွေ့ယာပေါ် လှဲချလိုက်တယ်♥ အဝတ်အစားတွေ မလဲနိုင်ဖူး♥ အားတွေလဲ ကုန်နေပြီ♥ teddy ကို ဖက်ထားပြီး အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ တရေးနိုးတော့ ကိုကို ရောက်နေတယ်♥ ကောင်းလားတဲ့♥ ကောင်းဖူးလို့♥ တအားနာနေတယ်လို့♥ ဆေးတိုက်တယ်♥ ဟင့်အင်း♥ မသောက်ချင်ဖူး♥ လင်း ဆေးမသောက်ချင်ဖူး♥ သောက်ရမယ်♥ လိမ္မာတယ်နော်တဲ့♥ မျက်စိမှိတ်ပြီး သောက်ချမိတယ်♥ အိမ်မှာ လင်းကို ဘယ်သူမှ ဆေးမတိုက်ရဲဖူး♥ ဆေးလာတိုက်ရင် ခွက်ကို ဆွဲလှန်ပစ်လိုက်တာ♥ ကောက်ပေါက်ပစ်လိုက်တာ♥ ကိုကို တိုက်လို့သာ သောက်ရတယ်♥ လုံးဝမသောက်ချင်ဖူး♥ တအားခါးတာပဲ♥ ကိုယ်နဲနဲ ပူနေတယ်တဲ့♥ ပြန်အိပ်တဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကို လင်းနှဖူးလေးကို နမ်းတယ်♥ အိပ်လိုက်တော့တဲ့♥ ညကျမှ ပြန်တွေ့မယ်တဲ့♥ ကိုကို ပြန်ထွက်သွားတယ်♥ လင်း အိပ်မလို့ပါပဲ♥ အိပ်လို့ပျော်ဖူး♥ ဒိုင်ယာရီလေးထဲမှာ ချရေးမိတယ်♥
အိမ်မက်ထဲမှာ ကိုကိုလေ လင်းကို နမ်းတယ်♥ ကိုကို့အနမ်းတွေက တအားမွတ်သိပ်နေတယ်♥ လင်း တကိုယ်လုံးကို နမ်းတယ်♥ လင်း ရင်သားတွေကို နမ်းတယ်♥ လင်း ပိပိလေးကို နမ်းတယ်♥ တအားပဲ♥ လင်း ရင်တွေတုန်လိုက်တာ♥ ခံရခက်လွန်းလို့ ပါးစပ်လေး ဟလိုက်မိတယ်♥ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို တယောက်ယောက် လာနမ်းတယ်♥ ကိုကိုလား♥ လင်း မျက်စိမှိတ်ထားရင်း ဖက်လိုက်မိတယ်♥ ဟုတ်တယ် ကိုကို♥ လင်းသိတယ်♥ ကိုကို့ ကိုယ်နံ့လေးကို လင်းသိတယ်♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို စုပ်ပြီး နမ်းတယ်♥ အိမ်မက်က တကယ် ဖြစ်လာပြီပေါ့♥ အင် အခုမှ သတိရတယ်♥ လင်း သွားမတိုက်ရသေးဖူး♥ ကိုကိုက နမ်းနေပြီ♥ မရွံဖူးလား ကိုကိုရယ်♥ အို ကိုကို့လက်ကြီးကလဲ♥ လင်းပိပိလေးကို ဖွဖွလေး ပွတ်ပေးတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ စောစောစီးစီးချစ်မလို့လားဟင်♥ အင်းတဲ့♥ ကိုကိုချစ်ချင်လဲသဘောလေ♥ လင်း ပေါင်လေး ကားပေးလိုက်တယ်♥ ဘာမှမသိတော့ဖူး ကိုကိုရယ်♥ ချစ်ချင်သလိုသာချစ်လိုက်ပါတော့♥ အရည်တွေ ရွဲနေပြီ♥ ကိုကိုပွတ်ပေးတော့ စပ်ဖျင်းဖျင်းလေး ဖြစ်သွားသည်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်း မနာပါဖူး♥ နာလဲ အံကြိတ်ပြီး ခံမယ်နော်♥ ကိုကို့ကို ချစ်လို့♥ လင်း မသိတော့ဖူးကွာ♥ ချစ်လိုက်ပါတော့♥ အပြင်မှာ မေမေတို့ မရှိဖူး♥ ဈေးသွားကြတယ်ထင်တယ်♥ ဒါ့ကြောင့် ကိုကို ရဲနေတာ♥ နမ်းပေးရအုံးမလားတဲ့♥ ဟင့်အင်းလို့♥ ပြောပြီး လင်းရှက်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ လင်းပိပိလေးထဲကို ဖြေးဖြေးလေး ထိုးထည့်လိုက်တယ်♥ ကျွတ် ကျွတ်♥ နာလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ မနေ့က ဒဏ်ရာတွေ အကုန်ပြန်ကြွလာတယ်♥ စုပ်တသပ်သပ်နဲ့ လင်း ငြီးတော့♥ ကိုကိုရပ်သွားတယ်♥ အို မရပ်ပါနဲ့♥ လင်း ကိုကို့ခါးလေးကို အတင်းဖက်ပြီး ဖိလိုက်မိတယ်♥ ကိုကို့ကို ချစ်လို့♥ တော်ကြာ မချစ်လိုက်ရလို့ လင်းကို စိတ်ဆိုးသွားအုံးမယ်♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်တယ်♥ ခါးလေးကို ကော့ပေးလိုက်မိတယ်♥ ဝင်လာတယ်♥ ကိုကို့ဟာကြီး ဝင်လာတယ်♥ နဲတာကြီးမဟုတ်ဖူး♥ ကြပ်သိပ်နေအောင် လင်း ခံရခက်တယ်♥ လင်းလေ နာလွန်းလို့ ကိုကို့ကို အတင်းဖက်ထားမိတယ်♥ ကိုကို လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ်♥ လည်တိုင်လေးကိုနမ်းတယ်♥ နားရွက်လေးကို နမ်းတော့♥ လင်း ယားတာပေါ့♥ ကိုကိုလေ ပြန်ထုတ်ပြီး ပြန်ထည့်တယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ အသဲရယ်တဲ့♥ ဒီလိုလေး ပြောရင်လေ♥ လင်း နာကျင်သမှုတွေ ပျောက်သွားတယ်♥ ကိုကို ဖြေးဖြေးလေးချစ်တယ်♥ အို ကျွတ် ကျွတ်♥ အထဲမှာလေ သိလား♥ ဟိုအဖုလေးက တအားဆိုးတာပဲ♥ တုန်တုန်တက်သွားအောင် တနေရာရာကို ဖိထားတယ်♥ ချေသွားတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေ လင်း ဟင့်♥ ပြောမပြတတ်ဖူးကွာ♥ တအားငိုချင်တာပဲ♥ အရမ်းထိတယ်♥ လင်းပိပိလေးထဲမှာ အရည်တွေ စိမ့်ထွက်လာတယ်♥ အို ကိုကို♥ အဲဒီလို မလုပ်ပါနဲ့♥ လင်းမခံနိုင်ဖူးကွာ♥ ပြောပြချင်ပါတယ်♥ ကိုကို စိတ်ဆိုးသွားမှာစိုးလို့♥ စိတ်ကူးထဲမှာ ပျောက်သွားတယ်♥ ကိုကိုကစိတ်ကြီးနေပြီ♥ မျက်နှာကြီးနီပြီး လင်းကိုလေ တအားချစ်တယ်♥ လင်း ကျစ်ကျစ်အောင်ပါအောင် ဖက်ထားမိတယ်♥ ကိုကို ချစ်တာ ပိုမြန်လာတယ်♥ လင်းလေလင်း♥ ရင်တွေ တအားတုန်တာပဲ♥ မောလဲအရမ်းမောတယ်♥ အရမ်းဆိုးတယ်ကွာ♥ အဲဒီနေရာလေးကို ပွတ်ပွတ်ပြီးချေမိသွားရင်♥ လင်း မခံနိုင်ဖူး♥ ဘယ်လိုများချစ်နေတာလဲမသိဘူးကွာ♥ လင်း ရင်သားလေးတွေကို နယ်ပြီး♥ ကိုကို အရမ်းချစ်တယ်♥ တအားချစ်တယ်♥ လင်း မခံနိုင်ဖူး♥ လင်း မခံနိုင်ဖူး♥ ဟီး♥ လင်း တိတ်တိတ်လေး မျက်ရည်ဝဲသွားမတတ်♥ နာလိုက်တာ♥ ဟင့်♥ ကိုကိုကတော့ တအားသဘောကျနေတယ်♥ အရမ်းကောင်းတာပဲ အသဲရယ်တဲ့♥ ဟူး♥ တသိမ့်သိမ့် လှိုင်းတွေကြားမှာ ဖုတ်လိုက်ဖုတ်လိုက်နဲ့ လင်း မျက်စိလေးမှိတ်ထားမိတယ်♥
အသဲရယ်♥ အရမ်းနာလို့လားဟင်♥ မနာပါဘူး ကိုကိုရယ်♥ မညာပါနဲ့ မျက်ရည်တွေ ဘာလို့ ကျတာလဲတဲ့♥ ဟင့်အင်းလို့♥ ဘာမှမဖြစ်ဖူးလို့♥ ပြောနေတုန်း ကိုကို့ဟာကြီးကို ဆွဲထုတ်သွားတယ်♥ ကျွတ် ကျွတ်♥ လင်း ငြီးမိတယ်♥ နာလိုက်တာ♥ တွေ့လား နာတာကို မပြောဖူး♥ ဘာမှမဖြစ်ဖူးလို့♥ ဖြစ်ပါတယ် နာနေပြီမှတ်လား♥ အင်း♥ သနားပါတယ်♥ ကိုကို့ကို အရမ်းချစ်လားတဲ့♥ ချစ်တာပေါ့ ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တာပေါ့♥ လင်းကို ပွေ့ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ခေါ်သွားတယ်♥ ရေပူခလုတ်ကို ဖွင့်ပြီး ဆေးပေးတယ်♥ စပ်လိုက်တာ♥ အရမ်းစပ်တယ်♥ လင်း မျက်ရည်ကျမိတယ်♥ အရမ်းစပ်တာပဲ♥ လင်း ငိုမိတယ်♥ ကိုကို လင်းကို ဖက်တယ်♥ နမ်းတယ်♥ တတွတ်တွတ်နဲ့ ချော့တယ်♥ ကိုကိုချော့တော့ လင်း အငိုတိတ်သွားတယ်♥ သွားတိုက်မယ်တဲ့♥ ပါးစပ်ဟတဲ့♥ လင်းကို ကိုကိုသွားတိုက်ပေးတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ ကိုကိုရယ်♥ ကြည်နူးမှုတွေက နာကျင်မှုကို ဖျောက်ပစ်လိုက်နိုင်တယ်နော်♥ နာကျင်မှုတွေက ဟိုးအဝေးကို ထွက်ပြေးသွားတယ်♥ လင်း ပျော်တယ်♥ အရမ်းပျော်တယ်♥ လန်းသွားအောင် ရေချိုးတဲ့♥ ဟုတ်♥ လင်း ရေချိုးတယ်♥ ပြန်ထွက်လာတော့ ကိုကို ရေသုတ်ပေးတယ်♥ လင်း တကိုယ်လုံးကို သုတ်ပေးတယ်♥ လိုးရှင်းလိမ်းအုံးမှာလာတဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကို လင်းကို လိုးရှင်းလိမ်းပေးတယ်♥ တအားလည်တာပဲ♥ လင်း ရင်သားတွေကို လိမ်းပေးသလိုနဲ့ ကလိတယ်♥ ဟွန့်♥ တင်သားတွေကိုလဲ အဲဒီလိုပဲ♥ ကိုကို ညစ်ပတ်တယ်♥ ဟွန့်♥ အသဲက တအားလှတယ်နော်တဲ့♥ ကိုကို ကြိုက်လားလို့ မေးတော့♥ အင်းတဲ့♥ ကိုကိုကြိုက်ရင် ပြီးတာပဲလို့♥ ဘာဂါဝန်ဝတ်ချင်လဲတဲ့♥ ကိုကို ရွေးပေးလို့♥ အဖြူရောင် ဂါဝန်လေး ထုတ်ပေးတယ်♥ အတွင်းခံတွေကိုလဲ ကိုကိုဝတ်ပေးတယ်♥ အရမ်းကြင်နာတာပဲ♥ တကယ်ပါ လင်း အရမ်းချစ်တယ် ကိုကို့ကို♥ မုန့်စားမယ်နော်တဲ့♥ အင်း♥ ဒင်းဆမ်းတွေ ဝယ်ထားတယ်♥ လင်း ကြိုက်တယ်♥ ရော့ မိုင်လိုသောက်♥ လင်း တခွက်ကုန်အောင် သောက်တယ်♥ မနက်စာကို အများကြီးပဲ စားပစ်လိုက်တယ်♥ ဟွန့်♥
မုန့်စားပြီးတော့♥ ကိုကိုက သူ့အခန်းထဲ လိုက်ခဲ့တဲ့♥ ဟုတ်♥ လက်တော့ယူလာခဲ့တယ်♥ ကိုကို့အိမ်ကို လိုက်သွားတယ်♥ အခန်းထဲရောက်တော့ ကိုကိုလေ♥ လင်းကို ဖက်နမ်းတယ်♥ အို ဖြေးဖြေးပေါ့♥ လင်းလဲ ကိုကို့ကို ပြန်နမ်းတယ်♥ ကိုကို လင်းကို ပွေ့ခေါ်သွားတယ်♥ ဟင့်♥ မွေ့ယာလေးပေါ်မှာ ချထားလိုက်တယ်♥ လင်း ကိုကို့ကိုမော့ကြည့်မိတယ်♥ ကိုကို့မျက်ဝန်းမှာ အချစ်ရိပ်တွေ လွှမ်းနေတယ်♥ ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်း ကိုကို့ လည်တိုင်ကို ဖက်လိုက်တယ်♥ နှုတ်ခမ်းချင်း ထိကပ်သွားတယ်♥ အနမ်းတွေ ဖြေးဖြေးလေး♥ လင်းလေလင်း မျက်စိမှိတ်ပြီး♥ ကိုကိုချစ်တာကို အလိုလိုက်မိတယ်♥ ဟင်း♥ ဂါဝန်ချွတ်ပေးတဲ့♥ လင်း ထိုင်လိုက်ပြီး လက်လေး မြှောက်ပေးလိုက်တယ်♥ ကိုကို လင်း ဂါဝန်လေးကို ချွတ်လိုက်တယ်♥ ဘရာလေးကိုလဲ ကိုကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ အို ပင်တီရောပဲ♥ တအားဆိုးတာပဲ ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းလှတာပဲတဲ့♥ အင်းလို့♥ လင်းရဲ့ ရင်သားလေးတွေကို နမ်းတယ်♥ ဟင့်♥ ခုနကလေးတင် ချစ်ထားတာ မဝသေးဖူးလားဟင်♥ အမှန်ပြောရင် ကျိန်းနေပြီ♥ ကိုကို့ကို ချစ်လို့သာ အလိုလိုက်တာ♥ နာတယ်♥ ကိုကို ဖွဖွလေး ခဲတယ်♥ နမ်းတယ်♥ စို့တယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်းကို ရူးအောင်လုပ်နေတာလားဟင်♥ ကိုကို့လက်တဖက်က လင်းပိပိလေးကို ကိုင်တယ်♥ တွန့်ကနဲ တုန်တက်သွားရင်း ♥ ကိုကို့ကို တအားဖက်ထားမိတယ်♥ လင်းပိပိလေးကို ကိုကို ဘယ်လို ကိုင်နေလဲမသိပါဖူး♥ လင်း ကြက်သီးတွေ ထလာတယ်♥ ပေါင်လေးကားပေးကွာတဲ့♥ လင်း ကားပေးလိုက်မိတယ်♥ ဟွန့်♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိပါဖူး♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ထားမိတယ်♥ ကိုကို လင်း ချက်လေးကို နမ်းတယ်♥ ဟာကွာ♥ ယားလိုက်တာ♥ ဟင့်♥ လင်းပိပိလေးကို အစုန်အဆန် ကိုကိုနမ်းတယ်♥ ဟင့်♥ ထိပ်နားလေးကို ကိုကို နမ်းလေ လင်းမနေတတ်လေပဲ♥ တအားဆိုးတာပဲကိုကိုရယ်♥ လင်း အသက်အောင့်ပြီး ခေါင်းခါမိတယ်♥ အသက်ရှုမဝတော့ လင်း အသံလေးထွက်သွားမိတယ်♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ ကိုကို့အနမ်းတွေက ပိုမြန်လာတယ်♥ လက်ဖျားလေးက ပိပိလေးထဲကို ဖြေးဖြေးလေးဝင်တော့♥ အားး♥ ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဖူးကွာ♥ လင်း မနေတတ်ဖူး♥ မနေတတ်ဖူး♥ ဟင့်♥ လင်းပဲစေ့လေးကို ကိုကို စုပ်တယ်♥ လျှာနဲ့တို့တယ်♥ လက်ချောင်းလေး အဝင်အထွက်ကလေ♥ လင်းကိုလေ♥ အသက်ရှူမဝအောင်ပဲ♥ အို မသိတော့ဖူးကွယ်♥ မျက်စိမှိတ်ပြီး ပေါင်လေးကို အတင်းကားထားပေးလိုက်မိတယ်♥ ကော့လဲကော့ပစ်လိုက်တော့♥ ကိုကို ပိုနမ်းတာပေါ့♥ လင်းနေကိုမနေတတ်တာ♥ ပြီးခါနီးအချိန်လေးတွေဆို လင်း အလူးအလဲပဲ♥ မခံစားတတ်ဖူး♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိတာ♥ တရိပ်ရိပ်မောတယ်♥ လင်း အတင်းညှစ်ထားမိတယ်♥ ကိုကိုက ကြိုက်တယ်တဲ့♥ လင်း မောသွားတယ်♥ ကိုကိုလေ သူ့ဟာကြီးကို လင်းပိပိလေးရှေ့မှာတေ့တယ်♥ အိုး♥ နာလိုက်တာ♥ ဟင့်♥ ကိုကို့ဟာကအရမ်းကြီးတယ်♥ လင်း မခံနိုင်ဖူး♥ အဲဒီဝင်တဲ့အချိန်လေးကို လင်း ကြောက်တယ်♥ အသဲခိုက်အောင် ကြောက်တာပဲ♥ ကြပ်ပါတယ်ဆိုမှ ကိုကိုက အတင်းထိုးထည့်တယ်♥ လင်းမျက်နှာလေး မဲ့ထားမိတော့♥ ကိုကို ဖြေးဖြေးလေး ထည့်တယ်♥ တအိအိနဲ့ သွင်းတော့လဲ ချစ်တာပေါ့ ကိုကိုရယ်♥ လင်းကို သနားလို့ထင်ပါရဲ့♥ ဖြေးဖြေးလေး သွင်းတယ်♥ အာ ဟာာ♥ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ♥ လင်းပိပိလေး ကွဲထွက်မတတ်ပဲ♥ ကိုကိုရယ် ကြီးလိုက်တာ♥ ဟွန့်♥ လင်း ကိုကို့ကို တအားဖက်ထားမိတယ်♥ မနေတတ်ဖူး ကိုကိုရယ်♥ နာလဲနာတယ်♥ အသက်ရှုလဲမဝ♥ ပြည့်ကြပ်နေတဲ့ကြားက ကိုကိုဖြေးဖြေးပြန်ထုတ်တယ်♥ ထည့်တယ်♥ ဟင့်♥ လင်း ကြောက်လွန်းလို့ ညှစ်ထားပစ်လိုက်တယ်♥ ဟွန့်♥ ကိုကို ထုတ်နေတာ ရပ်သွားတယ်♥ လင်း မလျှော့ပေးရဲဖူး♥ ဟင့်♥ ကိုကို ညစ်တယ်♥ ပြန်ထည့်တယ်♥ ပြည့်ကြပ်နေအောင် ပြန်ဝင်လာတယ်♥ အို အို အို♥ ကိုကိုလေ လင်း နားရွက်လေးကိုနမ်းတယ်♥ ယားလွန်းလို့ တွန့်သွးတော့♥ ကိုကို အားနဲ့ ဖိချလိုက်တယ်♥ ပြန်ထုတ်တယ်♥ ထင်သလိုချစ်ပါတော့ ကိုကိုရယ်♥ ဖြေးဖြေးလေးက သွက်သွက်လေး ကိုကိုချစ်တယ်♥ လင်းလေလင်း♥ ဟင့်♥ ဖြန်းကနဲ ပိပိလေးထဲက အရည်တွေထွက်သွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ ကိုကိုကတော့ ဆက်ချစ်တယ်♥ မရပ်ဖူး♥ ပိုမြန်လာတယ်♥ လင်း နားရွက်လေးကို ခဲထားပြီး ကိုကိုဆောင့်တယ်♥ လင်းလေလင်း ဘယ်လိုနေရမှန်းကို မသိဖူး♥ တိုးတိုးလေး အော်မိတယ်♥ အကျယ်ကြီး အော်ရင်ကိုကို မကြိုက်မှာစိုးလို့♥ နှုတ်ခမ်းလေး ကိုက်ထားမိတယ်♥ မရပါဖူး♥ ငြီးသံကတော့ ထွက်တာပဲ♥ ကိုကိုကလဲ ကြမ်းတာပဲ♥ လင်း တကိုယ်လုံး သွေးတွေ အရမ်းမြန်လာတယ်♥ တကိုယ်လုံးပူထူနေအောင် ကိုကို ဆက်တိုက်ချစ်တယ်♥ ချစ်နေရင်း ရပ်လိုက်တယ်♥ ဟွန့်♥ ခံစားချက်က ကောင်းနေပြီကို ရပ်ပစ်လိုက်ရလားလို့♥ ဟွန့်♥ လင်း မျက်စိလေးခိုးဖွင့်ကြည့်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ လင်းပေါင်လေးကို ကွေးပြီး ရင်ဘတ်ပေါ်မှာ ကပ်လိုက်တယ်♥ လင်းပုံစံလေးက ပုဇွန်တုပ်လေးလို ကွေးကွေးလေး♥ ကိုကို ပြန်ချစ်တယ်♥ အာဟာ♥ ထိတယ်♥ ထိတယ်♥ ကိုကို့ဟာကြီးက ဟိုးအဆုံးထိ ဝင်ချလာတယ်♥ ကျွတ် ကျွတ်♥ နာလိုက်တာ♥ အရည်တွေရွှဲနေလို့ တော်သေးတယ်♥ ကိုကို အရမ်းမြန်မြန်ချစ်တယ်♥ လင်းလေလင်း အသက်ရှူမရဖူး♥ မခံစားနိုင်ဖူး♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းကိုမသိတာပါ♥ အတင်းထိုးထည့်ပြီးလဲ မွှေသေးတယ်♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်း ကိုကို့လက်မောင်းကို အတင်းကိုင်ထားမိတယ်♥ ရုန်းလို့လဲမရဖူး♥ အပေါ်ကနေဖိထားပြီး♥ တအားချစ်တော့ လင်းရူးပြီပေါ့♥ လင်း အတင်းကော့ပစ်လိုက်မိတယ်♥ ဖြစ်ချင်တာဖြစ်♥ အံကြိတ်ပြီးခံမယ့်အစား လင်း တအားကော့ထားပေးမိတယ်♥ နာလဲနာတယ်♥ ကောင်းလဲကောင်းတယ်♥ ကိုကို့ဟာကို တတ်နိုင်သမျှ ဖမ်းဖမ်းညှစ်ထားတယ်♥ ကိုကိုလူဆိုး♥ ဒီလောက်ချစ်တာကို မမောဖူးလားမသိဖူး♥ လင်းရင်တွေဆို တလှပ်လှပ်တုန်နေပြီ♥ ချစ်နေရင်း ကိုကို့မျက်နှာက နီရဲတက်လာတယ်♥ ကိုကို့ဟာကြီးကလဲ ပိုကြီးလာသလိုပဲ♥ ပြည့်ကြပ်နေတာပဲ♥ ချစ်လိုက်တော့ ကိုကိုရယ်♥ စိတ်ထင်သလိုသာ ချစ်လိုက်တော့♥ ကိုကိုကလဲ အားကုန်ချစ်တယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ တဇတ်ဇတ်တုန်ပြီး ကိုကိုရပ်သွားတယ်♥ နောက်ဆုံးတချက် အားကုန်ဆောင့်ထည့်လိုက်တာ♥ ကိုကိုရယ် ဟင့်♥ ရက်စက်လိုက်တာ♥ မီးပွင့်သွားလားမသိပါဖူး♥ လင်း ကြယ်တွေလတွေတောင် မြင်ရတယ်♥ နာလိုက်တာ တအားပဲ♥ အရမ်းနာပေမယ့်လဲ တအားကျေနပ်မိတယ်♥ ချစ်တယ်နော် ကိုကို♥ လင်းဘေးမှာ ကိုကိုလာအိပ်တယ်♥ လင်းလေ ကိုကို့ကို တအားဖက်ထားပြီး မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ မှိန်းနေတုန်း ကိုကို လင်းနှဖူးလေးကို နမ်းတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေလှုပ်တောင် မလှုပ်နိုင်တော့ဖူး♥ ကိုကို ထသွားတယ်♥ ရေသောက်တဲ့အသံတော့ ကြားမိတယ်♥ လင်း မျက်စိဖွင့်ဖို့အားမရှိဖူး♥ အသဲလေး ရေသောက်မလားတဲ့♥ အင်းလို့♥
ကိုကို လင်းကို ပွေ့ပြီး ထူပေးတယ်♥ တကယ်ပါအားကိုမရှိတော့တာ♥ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို ဖန်ခွက်နဲ့ တေ့ပြီး ရေတိုက်တယ်♥ လင်း သောက်လိုက်မိတယ်♥ ကိုကိုက တအားကြင်နာတာပဲလို့♥ တွေးမိသေးတယ်♥ အရမ်းမောနေလားတဲ့♥ အင်းလို့ ♥ ထပ်ချစ်ချင်သေးတယ်တဲ့♥ အို တအားဆိုးတာပဲ♥ လင်း မျက်လုံးပြူးပြီး ကိုကို့ကို လှမ်းကြည့်မိတယ်♥ နော်တဲ့♥ လိမ္မာပါတယ် အသဲလေးရယ်တဲ့♥ ကိုကို့ဟာကြီးကလဲ ထောင်နေတာပဲ♥ မုန်းဖို့ကောင်းလိုက်တာ♥ လင်း ကြောက်လို့မှောက်လိုက်တယ်♥ ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မျက်နှာအုပ်ပြီး ဝှက်ထားမိတယ်♥ လင်းကိုယ်လင်း လုံပြီထင်နေတာ♥ ကိုကိုလေ လင်းခါးလေးကို ဆွဲမလိုက်တယ်♥ လင်း ဘေးဘက်ထောက်ပြီး ဖင်လေးထောင်သလို ဖြစ်သွားတယ်♥ အဲ♥ ဟိုကားထဲကလို ကိုကိုချစ်တော့မယ်♥ နောက်ကနေပြီးတော့♥ လင်း ကြောက်လိုက်တာ မပြောနဲ့♥ လိမ္မာတယ်နော်♥ ပေါင်လေး နဲနဲကားတဲ့♥ လင်း ရှက်ရှက်နဲ့ ကားပေးလိုက်တယ်♥ ချစ်လွန်းလို့နော် ဟွန့်♥
ကိုကိုလေ လင်းပိပိလေးကို သေချာကြည့်နေတယ်♥ တအားရှက်တာပဲ♥ ကိုကိုလေ လင်းပိပိလေးကို ဖြဲကြည့်တယ်♥ ဟာကွာ♥ လင်း ခေါင်းလေးစောင်းပြီး ခိုးကြည့်တော့♥ ကိုကို တအားသဘောကျနေတယ်♥ ဟွန့်♥ ကိုကို့ဟာကြီး လင်းပိပိလေးကို တေ့လိုက်ပြီး ဖြေးဖြေးလေး ဖိချလိုက်တယ်♥ အိုး နာလိုက်တာ♥ လင်းရုန်းမိတယ်♥ မရပါဖူး♥ ကိုကို လင်းခါးကို ကိုင်ပြီး ထပ်ထည့်တယ်♥ အားး♥ နာတယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်းက ရုန်းလေ ကိုကို ဖိချလေပဲ♥ ကိုကို တအားရက်စက်တာပဲ♥ အို နာတယ် နာတယ်♥ လင်း မျက်ရည်လေးတောင် ဝဲသွားတယ်♥ ကိုကိုမသိဖူး♥ လင်း မှောက်နေတော့ ကိုကို မမြင်လို့လား မသိဖူး♥ အဆုံးထိ ထိုးထည့်လိုက်တယ်♥ နာတယ်♥ နာတယ်ကွာ♥ လင်း ခေါင်းလေးထောင်ပြီး အော်မိတယ်♥ မခံမှ မခံနိုင်တာ♥ လင်း မျက်ရည်ဝဲနေတာ ကိုကိုတွေ့သွားတယ်♥ အသဲလေး အရမ်းနာသွားလားတဲ့♥ နာတာပေါ့လို့♥ အသဲလေး အိုးက အရမ်းမိုက်လို့ပါကွာတဲ့♥ သေရော♥ ဒီမှာသေတော့မယ်♥ မခံနိုင်ဖူး♥ ပြန်ထုတ်လိုက်ရမလားတဲ့♥ အင်းလို့♥ ကိုကို ပြန်ထုတ်လိုက်တယ်♥ ဒီလိုထုတ်တော့လဲ လင်း စိတ်ထဲမှာ တမျိုးချည်းပဲ♥ မထုတ်စေချင်ဖူး♥ ညှစ်ထားမိတယ်♥ အသဲလေး ညှစ်မထားနဲ့လေတဲ့♥ ဟင့်အင်း♥ ညှစ်ထားမှာပဲလို့♥ လင်းလေ နာလဲနာတယ်♥ ကြပ်လဲကြပ်တယ်♥ ကောင်းလဲကောင်းတယ်♥ ကိုကို လင်းတင်သားတွေကို ညှစ်တယ်♥ ပြီးတော့ ပြ န်ထည့်လိုက်တယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ ဖြေးဖြေးကွာ♥ ကိုကို့ဟာကြီး ပြန်ဝင်လာတော့ လင်းမျက်စိလေး မှေးသွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ♥ ဟင့်♥ နာလားဟင် အသဲလေး♥ မနာပါဖူး ကိုကို♥ လင်း ခေါင်းခါပြမိတယ်♥ ကိုကို ပြန်ထုတ်တယ်♥ ပြန်ထည့်တယ်♥ အို ကိုကို♥ အို ကိုကို♥ လင်း ကိုကို့ နာမည်ကို ခေါ်ရင်း အံကြိတ်ထားမိတယ်♥ တင်သားတွေကို ကော့ပေးထားတယ်♥ ချစ်ပါ ကိုကိုရယ်♥ အားရပါးရချစ်♥ နာကျင်တဲ့ ခံစားမှုက♥ လင်းရင်တွေကို ပူစေတယ်♥ အဝင်အထွက် မြန်လာလေ♥ လင်း ခံရခက်လေပဲ♥ ကိုကို့ဂေါ်လီလုံးလေးက ပွတ်ပွတ်ဆွဲသွားများ♥ ထွန့်ထွန့်ကိုလူးနေတာပဲ♥ အရည်တွေယိုကျနေတယ်♥ လင်းပေါင်မှာ စီးကျလာတယ်♥ ကိုကို့ အဝင်အထွက်တွေ မြန်လာတယ်♥ လင်း ခေါင်းအုံးပေါ်မှာ မျက်နှာကို အပ်ပြီး♥ ခေါင်းအုံးကို အတင်းဆုပ်ထားမိတယ်♥ ကိုကို ပစ်ပစ်ဆောင့်လေ♥ လင်း နာလေပဲ♥ ဒါပေမယ့်လေ စိတ်ထဲမှာကျေနပ်တယ်♥ ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိဖူး♥ အားရတယ်♥ နောက်ကနေ ချစ်တာ ပိုနာပေမယ့်♥ လင်း အားရမိတယ်♥ ကိုကိုလဲ အားရတဲ့ပုံစံပါပဲ♥ လင်း ခါးကို ကိုင်ထားတဲ့ လက်တွေက♥ တအားညှစ်ထားတယ်♥ ဆောင့်နေရင်း ကိုကိုလေ အရှေ့ကို ငိုက်ပြီး♥ လင်း ရင်သားတွေကို လာကိုင်တယ်♥ အားး♥ ကိုကို♥ ဟင့်♥ ဘယ်လိုကြီးလဲမသိဖူးကွာ♥ လင်းလေလင်း♥ ဟင့်♥ လင်း ခေါင်းငုံ့ထားလို့မရတော့ဖူး♥ အထဲမှာ အရမ်းနာတယ်♥ လင်း ခါးလေးကို ကော့ထားရမလို♥ ကောက်ထားရမလို♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ လင်း မခံနိုင်ဖူးနော်♥ အား♥ အား♥ အား♥ ကိုကို အဆက်မပြတ် ဆောင့်တယ်♥ ချစ်တယ်♥ မွှေတယ်♥ နယ်တယ်♥ လင်း နာလွန်းလို့ မျက်ရည်တောင်ကျမိတယ်♥ ကောင်းလဲအရမ်းကောင်းတယ်♥ မခံစားနိုင်လောက်အောင် ကောင်းလွန်းတော့လဲ♥ အော်မိတာပေါ့♥ လင်းပိပိလေးထဲကို ကိုကိုထင်သလို ဝင်ထွက်နေတယ်♥ မြန်လဲမြန်တယ်♥ အားလဲပါတယ်♥ နှုတ်ခမ်းလေးကိုက်ပြီး လင်း ကြိုက်မိတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ ဝုန်းဒိုင်းကျဲ ချစ်ခြင်းတွေ အောက်မှာ♥ လင်းရဲ့ ဆည်လေး အကြိမ်ကြိမ်လျှံကျသွားခဲ့တယ်♥ ရင်ထဲမှာ အားမရှိတော့ပေမယ့် ကိုကိုရဲ့ ချစ်ခြင်းတွေက လျှံထွက်နေတယ်လေ♥ လင်း ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ ကိုကို့ စိတ်တိုင်းကျ ချစ်ပြီးတော့ ခွေခွေလေးလဲနေတဲ့ လင်းကိုကြည့်ပြီး ကိုကိုသနားသွားတယ်♥ ခဏလေးတဲ့♥ ကိုကို ရေချိုးခန်းထဲဝင်သွားတယ်♥ ခဏနေတော့ လင်းကို ပွေ့ပြီး ရေချိုးခန်းထဲ ပြန်ခေါ်သွားတယ်♥ ရေချိုးဇလားထဲမှာ ရေနွေးငွေ့တွေ တထောင်းထောင်းထနေတယ်♥ လင်းကို ဖြေးဖြေးလေး စိမ်ပေးလိုက်တယ်♥ လင်းတကိုယ်လုံး နွေးသွားတယ်♥ အရမ်းတော့ မပူပါဖူး♥ ပြီးတော့လေ လင်းကို ပေါင်လေး ကားခိုင်းတယ်♥အချစ်ရည်တွေပြည့်နေတဲ့ လင်းပိပိလေးကို♥ ကိုကို ရေပူစိမ်ထားတဲ့ အဝတ်လေးနဲ့ သုတ်ပေးတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲကွယ်♥ လင်းပိပိလေးကို ရွရွလေး သုတ်ပေးတယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ♥ နာကျင်ခဲ့တဲ့ ဝေဒနာတွေက ယုယမှုကြောင့်ပျောက်သွားတယ်♥ လျော့သွားတယ်♥ ဒီလိုယုယမှုမျိုးသာ ပေးမယ်ဆိုရင်လေ♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်းကို အသဲခိုက်မတတ်နာကျင်အောင်လုပ်လဲ လင်းကျေနပ်တယ်♥ ရေနွေးပူပူလေးကြောင့် လင်း ပိပိလေး သန့်ရှင်းသွားတော့♥ ကိုကို ဇလားထဲကို ဝင်ထိုင်တယ်♥ ပြန်ချစ်ကြမယ်လေတဲ့♥ ဟင်♥ မပြီးသေးဖူးပေါ့♥ သေရော♥ လင်းပိပိလေးကို အဝတ်လေးနဲ့ နှိုက်ပြီးဆေးတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်း မနေတတ်ဖူးကွာ♥ လင်းလေလင်း ကိုကို့ကို ဖက်ထားမိတယ်♥ ကိုကိုက လင်းကိုယ်လုံးလေးကို ကြွပြီး သူ့အပေါ်မှာ ထိုင်ခိုင်းတယ်♥ လင်း ကိုကို့ကို ခွပြီး ထိုင်လိုက်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ သူ့ဟာကြီးနဲ့ လင်းပိပိလေးကို ပြန်ထောက်တယ်♥ လင်း ကြောက်လို့ ဖင်လေးကို ယမ်းခါမိတယ်♥ မရဖူး♥ ကိုကိုလေ လင်း ခါးကိုကိုင်ပြီး တင်သားတွေကို ဖိချလိုက်တယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ အို ကိုကို♥ ကိုကိုကလဲ ကိုကိုပဲ♥ လင်းကလဲ လင်းပဲ♥ ဒီလိုမျိုး ချစ်တော့လဲ♥ လင်း အလိုလိုက်မိတယ်♥ နာကျင်ပေမယ့် အချစ်ခံချင်နေတယ်♥ စိတ်ထဲမှာ မရိုးမရွနဲ့ ကိုကို့ကို ဖက်ထားရင်း♥ ဖင်လေးကို တကြွကြွနဲ့ ချစ်နေမိတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ ဘယ်လိုကြီးလဲ မသိဖူးကွာ♥ ကိုကိုလေ လင်း ရင်သားတွေကိုလဲ နမ်းတယ်♥ မလွှတ်တမ်းနမ်းတယ်♥ ခံစားချက်က ပြင်းထန်လွန်းတော့♥ လင်း ဖင်လေးကော့ပြီး ခပ်သွက်သွက်လေး ချစ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ကိုကိုလေ မျက်စိလေး စင်းပြီးတော့ လင်းခါးကို တအားကိုင်ထားတယ်♥ လင်းချစ်တာ နှေးသွားရင် ကိုကိုလေ ခါးကို အတင်းဆွဲမပြီး ပစ်ပစ်ချတယ်♥ ဖိလဲချတယ်♥ အား♥ အား♥ လင်း ကိုကို့ နားရွက်ကို အတင်းခဲထားပစ်လိုက်တယ်♥ ကိုက်တာတော့ဟုတ်ဖူး♥ နှုတ်ခမ်းလေးနဲ့ ဖိပြီး ခဲထားတာ♥ လင်း မထင်ထားပါဖူး♥ ကိုကိုလေ အသက်ရှုသံတွေ မြန်လာပြီး ကြမ်းလာတယ်♥ လင်း ကိုက်မိတာ မှားသွားပြီ ထင်တယ်♥ လင်း ပိပိလေးထဲကို စက်သေနတ်ပစ်သလို♥ တဒုန်းဒုန်းနဲ့ အမြန်ချစ်တာ♥ အို ကိုကို♥ ကိုကို့♥ လင်း အသက်ရှူလို့မရတော့ဖူး♥ မရတော့ဖူး♥ အို ကိုကိုရယ်♥ နောက်ဆုံး တချက်တအားဆောင့်ထည့်ပစ်ပြီး လင်းတကိုယ်လုံးကို ကိုကိုဖက်ထားတယ်♥ တကိုယ်လုံး ကြွေမွသွားမတတ် လင်းကို ဖက်ထားတယ်♥ ကိုကိုလေ အရမ်းမောသွားတယ်ထင်တယ်♥ မျက်စိလေးမှိတ်ထားတယ်♥ လင်းလဲ မောတာပဲ♥ ရေချိုးခန်းထဲမှာ ကိုကို့ကိုဖက်ထားရင်း လင်း မှေးနေမိတယ်♥ ရေနွေးနွေးလေးရယ်♥ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲမှာရယ်♥ ဒီအချိန်လေးကို လင်း တအားပျော်မိတယ်♥ ကျေနပ်မိတယ်♥ ခဏနေတော့ နဲနဲအေးလာတယ်♥ လင်းကို ကိုကိုလေ ရေတွေ သုတ်ပေးတယ်♥ တကိုယ်လုံးမှာ ရေတစက် မကျန်အောင် ကိုကိုသုတ်ပေးတယ်♥ တအားကြင်နာတဲ့ ယောက်ျားကို လင်းချစ်မိတာ မှန်တယ်ထင်တာပဲ♥ လက်မြှောက်တဲ့♥ လင်းဂါဝန်လေးကို ခေါင်းကနေစွပ်ပြီး♥ ကိုကို ဝတ်ပေးတယ်♥ ဝတ်နေရင်း ကိုကို နမ်းသေးတယ်♥ ဟွန့်♥ တအားဆိုးပဲ♥ ကိုကိုနော် ဟွန့်♥
ဘယ်လိုအိပ်ပျော်သွားမှန်းမသိဖူး♥ ကိုကို လာနှိုးမှ လင်း နိုးလာတယ်♥ နာရီကြည့်တော့ ၄ နာရီ ကျော်နေပြီ♥ လင်း ဗိုက်ဆာတယ်♥ အပြင်မှာ တခုခုသွားစားမယ်တဲ့♥ ရဟူး♥ လင်း ပျော်မိတယ်♥ မေမေ့ကို ဖုန်းဆက်ပြီး ကိုကိုနဲ့ မုန့်သွားစားမှာ လိုက်သွားမယ်လို့♥ လင်းနဲ့ ကိုကို မုန့်သွားစားကြတယ်♥ ဆူရှီပေါ့♥ လင်း သိပ်ကြိုက်တော့ အများကြီး စားပစ်လိုက်တယ်♥ အစားပုပ်မလေးတဲ့♥ ဗိုက်ဆာနေတာရယ်♥ ကိုကို ခွံ့ကျွေးတာရယ်♥ စားလို့ကောင်းမှကောင်း♥ လင်း ပျော်တယ်♥ ကိုကိုနဲ့ ကားလျှောက်မောင်းတယ်♥ ကန်ဘောင်မှာ ထိုင်မလားတဲ့♥ အင်း♥ ထိုင်မယ်လို့♥ ညနေခင်းလေးမှာ ကိုကို့လက်ကို♥ တွဲပြီး လျှောက်ရတာလေ♥ လင်း အရမ်းပျော်တာပဲ♥ တခြားကောင်လေးတွေ ဝိုင်းကြည့်ပေမယ့်♥ လင်း ဂရုမစိုက်ပါဖူး♥ အနားမှာ သိပ်ချစ်ရတဲ့ ကိုကိုရှိနေတော့♥ ပြီးပြီလေ♥ အဲဒီအပျော်တွေက♥ ယွန်းဆိုတဲ့ ကိုကို့ရီးစားကြောင့် ပျောက်ဆုံးသွားတယ်♥ လင်း စိတ်ညစ်တယ်♥ လင်းတို့တွေ လျှောက်လာတုန်း♥ ကောင်မလေးတယောက်က ကိုကို့ကို စိုက်ကြည့်နေတယ်♥ လင်း မြင်ဖူးသလိုတော့ ရှိပါတယ်ထင်တာ♥ လင်းတို့ကို ကြည့်နေရင်း♥ ကောင်မလေး မျက်ရည် တစက်♥ တောက်ကနဲ♥ ကျသွားတယ်♥ ဟာ♥ ဘာတွေလဲ♥ ကိုကို့ကို မော့ကြည့်လိုက်တော့♥ ကိုကိုလဲ စိတ်မကောင်းတဲ့ ပုံစံပဲ♥ တကယ်ပါ လင်းရင်ထဲမှာ မကောင်းဖူး♥ ကိုကို့ရင်ထဲမှာ လင်းတယောက်မှ ရှိရဲ့လား♥ လင်း မသိတော့ဖူး♥ လင်း ချာကနဲ လှည့်ထွက်လာမိတယ်♥ ကိုကိုလင်းကို အတင်းလိုက်ခေါ်တယ်♥ လင်း စကားမပြောချင်တော့ဖူး♥ တကယ်ပါ♥ လင်း စိတ်ထဲမှာ ဘယ်လိုမှန်းမသိဖူး♥ ဝမ်းနည်းမိတယ်♥ ကားပေါ်မှာ လင်းကို ကိုကို စကားတွေ အများကြီးပြောတယ်♥ ဒါပေမယ့် လေ♥ လင်း မပျော်တော့ဖူး♥ ဝမ်းနည်းတယ်♥ ကားက မောင်းရင်း ဘယ်နားရောက်သွားမှန်းမသိပါဖူး♥ ကိုကိုကားကိုရပ်လိုက်တယ်♥ မှောင်နေပြီ♥ ကားမီးတွေအကုန်ပိတ်ပြီး♥ လင်းကို ဖက်တယ်♥ လင်း စိတ်မကောင်းဖူး♥ ကိုကို့ပခုံးပေါ်မှာ မှီပြီး လင်း ငိုမိတယ်♥ ကိုကို လင်းကို ချော့ပါတယ်♥ ချော့လေ ငိုလေ♥ ဝမ်းနည်းလေပဲ♥ ကိုကိုလေ လင်းကို ခေါင်းမော့ခိုင်းတယ်♥ ကိုကို လင်းကိုနမ်းတယ်♥ ငိုနေရင်း အနမ်းခံရတော့လေ♥ ကိုကို့ကို လင်းဖက်ထားမိတယ်♥ ဖွဖွလေး ဖိနမ်းတယ်♥ ကိုကို မကောင်းဖူး♥ လင်း အငိုတိတ်အောင် ကိုကိုနမ်းတတ်တယ်♥ ချစ်တယ်ကိုကိုရယ်♥ ဆုံးရှူံးသွားမှာ လင်း ကြောက်တယ်♥ လက်လွှတ်လဲမခံချင်ဖူး♥ လင်းဘာလုပ်ရမလဲဟင်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်းလည်တိုင်ကို နမ်းနဲ့လေ♥ ယားတယ်♥ ဟင့်♥ ကြက်သီးတဖြန်းဖြန်းထတယ်♥ ယားလဲယားတယ်♥ ရင်သားတွေက ကော့တက်လာတယ်♥ အို ကိုကို့♥ ကိုကို တအားဆိုးတာပဲ♥ လက်ကြီးက လင်းရင်သားတွေကို ဖွဖွလေးနယ်တယ်♥ အုပ်ကိုင်ပြီး ပွတ်ပေးတော့♥ ဟင့်အင်းကွာ♥ အားမရသေးဖူးလား မသိဖူး♥ လင်း လည်တိုင်လေးကို နှုတ်ခမ်းနဲ့ ခဲတယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေ လက်ကလေး ယောက်ပြီး♥ ကိုကို့ဟာကို ဆုပ်မိတယ်♥ မာတင်းနေတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကို♥ လင်း ထိမိတာနဲ့♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်း ရင်ထဲမှာ သွေးတွေဆူကြွလာတယ်♥ နေ့လည်က ချစ်ခဲ့တာတွေ လင်း ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်း အချစ်ခံချင်လိုက်တာ ဟင့်♥ ကိုကိုကလဲ ကဲကိုကဲတယ်♥ လင်း ပေါင်လေးကို ပွတ်ရင်း ဂါဝန်အောက်ထဲလက်လျှိုလိုက်တော့♥ အို ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်♥ လင်း ပိပိလေးကို ကိုကိုလာနှိုက်တယ်♥ အရည်တွေက စိုနေပြီ♥ ပင်တီလေးက စိုထိုင်းထိုင်းနဲ့♥ ဟိုပွတ် ဒီပွတ် လင်းပိပိလေးကို ပွတ်တယ်♥ လင်းလေ ကိုကို့အနမ်းတွေကို♥ မွတ်သိပ်စွာ ပြန်နမ်းမိတယ်♥ ချစ်တယ်ကိုကိုရယ်♥ ကိုကို့ဇစ်ကို လင်း ဖြုတ်လိုက်တယ်♥ ထောင်မတ်နေတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကို လင်း လက်ကလေးနဲ့ တင်းတင်းလေး ဆုပ်ပြီး ကစားပေးမိတယ်♥ ကောင်းရဲ့လား ကိုကိုရယ်♥ တခြားတယောက်နဲ့ မချစ်ပါနဲ့နော်♥ လင်း မခံစားနိုင်လွန်းလို့ပါ♥ ကိုကို့ကို တိုးတိုးလေး ချွဲနေမိတယ်♥ အင်းတဲ့♥ လင်းလေ ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ကိုကို့ဟာကြီးကို♥ ပါးစပ်နဲ့ငုံလိုက်မိတယ်♥ စိတ်ကြွနေတာရယ်♥ စိတ်ထနေတာရယ်♥ ချစ်ခြင်းတွေရယ်ပေါင်းပြီး♥ လင်းနမ်းလိုက်မိတယ်♥ ဖွဖွလေး ငုံထားပြီး စုပ်လိုက်တယ်♥ ကိုကို ကြွတက်လာတယ်♥ လင်း ခေါင်းကို ပွတ်တယ်♥ ဆွဲမိဆွဲရာ လင်းရင်သားတွေကို ကိုကို နှိုက်တယ်♥ အို နာတယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်း အတင်းပဲ စုပ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ပါးစပ်ထဲက လေတွေကုန်တဲ့အထိ အားနဲ့ စုပ်ပစ်လိုက်တယ်♥ တခြားကောင်မလေးနဲ့ သွားမချစ်ရဖူးကွာ♥ လင်း စိတ်ဆိုးတယ်♥ ဟွန့်♥ ဒေါသစိတ်လေးနဲ့ လင်း အတင်း စုပ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ကိုကို မနေနိုင်တော့ဖူး♥ အသဲလေး တော်တော့ကွာတဲ့♥ ဟင့်အင်း♥ တော်ဖူးကွာ♥ လင်း လျှာလေးနဲ့ ကိုကို့ထိပ်နားလေးကို ဖိပြီး နမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ ရုပ်ရှင်တွေထဲကလိုပဲ လင်း နမ်းမိတယ်♥ ငံကျိကျိနဲ့ ကိုကို့အရည်တွေက နဲနဲတော့ ညှီတယ်♥ ဒါပေမယ့် ချစ်တာကိုး♥ ဟွန့်♥ လင်း မျိုချလိုက်မိတယ်♥ ကိုကိုလေ♥ လင်း ရင်သားကို အတင်းဆုပ်ပြီး♥ အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ လင်း ရှက်တာပေါ့♥ ဒါပေမယ့်လဲ ချစ်တဲ့စိတ်ကြောင့်♥ ကိုကို့အရည်တွေကို လင်း မျိုချလိုက်မိတယ်♥ ကိုကို့ကို မော့ကြည့်တော့လေ♥ လင်းကိုတအားချစ်တဲ့ မျက်လုံးတွေနဲ့ လင်းနှုတ်ခမ်းလေးကို နမ်းတယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ အသဲလေး ပင်တီချွတ်လိုက်ကွာတဲ့♥ လင်း ချွတ်လိုက်မိပါတယ်♥ ကိုကို့ပေါင်ကို လာခွထိုင်တဲ့♥ လင်း မထိုင်တတ်ထိုင်တတ်နဲ့ ကိုကို့ကို ခွထိုင်လိုက်တယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ တင်းပြီး မာထောင်နေတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးက♥ လင်းပိပိလေးကို တေ့လိုက်တယ်♥ ထိုင်ချလိုက်ကွာ အသဲလေးတဲ့♥ လင်း ကြောက်တယ် ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ နာကျင်သွားမယ်ဆိုတာ သိနေတော့ မထိုင်ချရဲဖူး♥ ကိုကို လင်းခါးလေးကို ဖက်ပြီး ဖိချလိုက်တယ်♥ အားး♥ ကိုကို မကောင်းဖူးကွာ♥ ဟင့်♥ နာတယ်♥ နာတယ်♥ တထစ်ထစ်နဲ့ လင်း ပိပိလေးထဲကို ကိုကို့ဟာ ဝင်သွားတယ်♥ တမျိုးချည်းပဲ♥ လင်းမနေတတ်ဖူး♥ ကိုကို့ကို အတင်းဖက်ထားမိတယ်♥ ဖင်လေးကို နောက်ပစ်လိုက်တဲ့♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ လှုပ်ကိုမလှုပ်ချင်ဖူး♥ နာလဲနာတယ်♥ ကောင်းလဲကောင်းတယ်♥ ကိုကို့ကို လင်းအတင်းနမ်းလိုက်မိတယ်♥ ကြောက်လို့♥ ကိုကိုလေ ခါးလေးကို ကိုင်ပြီးဖြေးဖြေးလေး ဆောင့်ခိုင်းတယ်♥ ကြွတယ်♥ ပြန်ချတယ်♥ ဟင့်♥ အထိအတွေ့တွေက မူးမေ့မတတ်ပဲ♥ ကိုကို့ကိုဖက်ထားရင်း♥ လင်း ခါးလေးလှုပ်ပေးမိတယ်♥ အရည်တွေက ခဏခဏပဲ ထွက်ကျတယ်♥ လင်းလေလင်း♥ အော်ဟစ်ပစ်လိုက်ချင်တယ်♥ လမ်းပေါ်မှာဆိုတဲ့ အသိကလဲ♥ တော်တော်လေး စိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်♥ တအားအော်ချင်တိုင်း ကိုကို့ကို အတင်းပဲနမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ ပြီးခါနီးလေ တအားအမြန်လုပ်မိလေပဲ♥ လင်း တင်သားတွေကို ကစားတတ်သွားတယ်♥ ကိုကို့ဟာကြီးကို နှဲ့ပြီး ယမ်းလိုက်ရင်♥ ကိုကို အရမ်းကြိုက်တာ လင်း သိသွားတယ်♥ ညှစ်ထားရင်း ခဏခဏ ယမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ အရမ်းချစ်တာပဲ ကိုကိုရယ်♥ အားလုံးပြီးသွားတော့လေ လင်း လှုပ်တောင်မလှုပ်နိုင်ဖူး♥ ဒီအတိုင်းလေး ၅ မိနစ်လောက် မှိန်းနေမိတယ်♥ ကိုကို လင်း ဆံပင်တွေကို သပ်ပေးရင်း ဖက်ထားတယ်♥ ချစ်တယ်ကိုကိုရယ်♥ လင်း ထလိုက်တော့ အရည်တွေ ထွက်ကျလာတယ်♥ အို♥ ဆိုဖာတွေ ပေကုန်ပြီ♥ ကိုကို့ဘောင်းဘီမှာလဲ အရည်တွေ ပေကုန်တယ်♥ ဒုက္ခပါပဲ♥ သန့်ရှင်းရေး မြန်မြန်လုပ်မိတယ်♥ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လေ♥ ကိုကို့ကို ရွှတ်ကနဲ နမ်းပြီး အခန်းထဲ ပြေးဝင်သွားမိတယ်♥ ရှက်စရာကြီးကွာ♥ လမ်းလယ်ကောင်မှာ ချစ်မိတာလေ♥ တွေးမိတိုင်း ရင်တွေ တုန်မိတယ်♥ အဲ မေ့လို့♥ လင်း ပင်တီလေး ကားထဲမှာ ကျန်ခဲ့ပြီ♥ ကိုကို မကောင်းဖူးကွာ♥ ဟွန့်♥
အခန်းထဲရောက်တော့♥ ကိုကို ဖုန်းဆက်တယ်♥ ပင်တီလေး ကျန်ခဲ့တယ်တဲ့♥ ဟာကွာ♥ ဟွန့်♥ ရှက်ပါတယ်ဆိုမှ♥ ကိုကို တအားစတယ်♥ အသဲလေး စုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်တဲ့♥ နောက်လဲ စုပ်ပေးနော်တဲ့♥ အင်း စုပ်ပေးမှာပေါ့လို့♥ ကိုကို့ကို ချစ်တာပဲ♥ လုပ်ပေးရမှာပေါ့♥ မနက် အိပ်ယာလာနှိုးမယ်တဲ့♥ စောစောအိပ်တော့တဲ့♥ ဟုတ်♥ ဖုန်းချခါနီး ပြောသွားသေးတယ်♥ ပင်တီလေးက အရည်တွေ စိုနေတယ်နော်တဲ့♥ ဟာကွာ♥ ဟာကွာ♥ တအားရှက်ဖို့ကောင်းတာပဲ♥ ကိုကို တအားဆိုးတယ်♥ လင်းကို တအားစတယ်♥ အနားမှာရှိရင် ပြေးပြီး လက်သီးဆုပ်လေးနဲ့ ♥ ထုပစ်လိုက်ချင်တယ်♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ ကားပေါ်မှာ ကိုကိုချစ်ခဲ့တာ♥ လင်း အရမ်းကြိုက်တယ်♥ အပေါ်ကနေ ကိုကို့ကို ချစ်ခွင့်ရတာ♥ လင်း အရမ်းကျေနပ်တယ်♥ ကိုကိုလဲ သဘောကျမှာပါ♥ ကိုကို့အကြောင်းတွေးတော့♥ လင်း ပိပိလေးက စိုရွှဲလာတယ်♥ အို♥ ဟင့်♥ ကျိန်းနေပြီ ကိုကိုရယ်♥ ညဖက်တွေ အိပ်မရအောင်♥ ကိုကိုအချစ်ကြမ်းကြမ်းတွေ ပေးသွားတော့♥ လင်းရူးပြီပေါ့♥ ပိပိလေးကို ရေသွားဆေးလိုက်တယ်♥ အို♥ စပ်လိုက်တာ♥ စပ်လိုက်တာ♥ ရေနွေးလေးနဲ့ ဖွဖွလေး ပွတ်ဆေးလိုက်တယ်♥ ကိုကို တအားဆိုးတယ်♥ ဟွန့်♥ မွေ့ယာပေါ် လှဲချလိုက်တော့♥ လင်း အိပ်ချင်လာတယ်♥ တနေ့လုံး ပင်ပန်းလာတော့ teddy ကို ဖက်ပြီး♥ လင်း အိပ်ပျော်သွားတယ်♥ ဂွတ်နိုက် ကိုကိုရေ♥
အိမ်မက်ထဲမှာလေ♥ ကိုကိုက လင်းကို နတ်ပြည်ခေါ်သွားတယ်♥ အတောင်ပံတွေနဲ့ လင်း ပျံလို့ရတယ်♥ ကောင်းကင်ပေါ်မှာ လင်းတို့တွေ ပျံကြတယ်♥ အရမ်းပျော်တာပဲ♥ ဟိုးအမြင့်ကြီး ပျံပြီး♥ အောက်ကို ဆင်းတော့♥ အေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်း ကြောက်တယ်♥ လင်း တကိုယ်လုံး အေးသွားတယ်လို့ ခံစားရတော့♥ လန့်နိုးလာတာပေါ့♥ ဟာ ကိုကိုကလဲ♥ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ မျက်စိဖွင့်ကြည့်တော့♥ ကိုကိုလေ♥ ကိုကိုပေါ့♥ ဟွန့်♥ စောင်ကို လှပ်ပြီး လင်း တင်ပါးလေးကို ထိုင်ကြည့်နေတယ်♥ ကိုကို မကောင်းဖူးကွာ♥ လင်း ကိုကို့ကို ဖက်ပြီး ဆွဲလှဲပစ်လိုက်တယ်♥ ဘာလို့ကြည့်တာလဲလို့♥ ဟွန့်♥ အသဲလေး ပိပိက ဖောင်းကားနေတာပဲတဲ့♥ ကိုကိုနမ်းချင်တယ်ကွာတဲ့♥ အို ကိုကိုရယ်♥ လင်း သန့်ရှင်းရေးမလုပ်ရသေးဖူးလေ♥ တားလို့လဲ မရဖူး♥ လင်း ဖင်လေးကို ထောင်ခိုင်းပြီး♥ ကိုကို နမ်းတယ်♥ အို ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်ကွာ♥ ထိတယ်♥ ထိတယ်♥ ကျင်တက်သွားတာပဲ♥ လင်း မျက်စိလေး မှိတ်ပြီး♥ ကိုကို နမ်းသမျှ ခံနေမိတယ်♥ မျက်စိလဲ မဖွင့်ချင်တော့ဖူး♥ ကိုကိုရယ်♥ ကိုကို့လျှာကြီးက အဝေ့အဝိုက်တွေနဲ့♥ အို အို♥ လင်းရူးပြီ♥ ကိုကိုရယ်♥ ပြွတ်ကနဲ အရည်တွေ ထွက်သွားတယ်♥ လင်း မနေနိုင်တော့ဘူးကွာ♥ ဟင့်♥ ထည့်လိုက်ပါတော့♥ စိတ်ထဲက တိုးတိုးလေး တောင်းဆိုနေမိတယ်♥ ကိုကို မထည့်ဖူး♥ လင်း တင်သားလေးကို ဖြဲပြီး♥ ထပ်နမ်းတယ်♥ စအိုဝလေးကို ဝလုံးလေးတွေ ၀ိုင်းပေးတယ်♥ ဟာ♥ ဟာ♥ လင်း မနေတတ်ဖူးနော်♥ ကြောက်တယ်♥ ကိုကို♥ လင်း မွေ့ယာခင်းကို အတင်းပဲ ဆုပ်ထားမိတယ်♥ ဖင်လေးကို အတင်းပဲ ကော့ပေးထားမိတယ်♥ စိတ်တွေ ဆူနေပြီ♥ ကိုကိုရယ်♥ အားရပါးရ ချစ်ပစ်လိုက်ပါတော့♥ လင်း စအိုဝလေးထဲကို♥ လက်လေး ဝင်လာတယ်♥ လျှာလေးက ပဲစေ့လေးကို တို့ပေးတယ်♥ အားးးး♥
လင်း မခံနိုင်ဖူး♥ မခံနိုင်ဖူး♥ ဟင့် ဟင့်♥ ဖြင်းကနဲ ဖြန်းကနဲ♥ လင်း အရည်တွေ ထွက်သွားပြန်တယ်♥ လှိုင်းလုံးတွေ တလုံးပြီး တလုံးတက်လာသလိုပဲ♥ လင်းကိုယ်လင်း ထိန်းချုပ်လို့မရတော့ဖူး♥ လင်း အတင်းပဲ♥ ကိုကို့ အဝတ်တွေကို ချွတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ကိုကို့ကို အိပ်ခိုင်းပြီး♥ လင်း တက်ခွလိုက်မိတယ်♥ ထောင်ပြီး တင်းနေတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကို♥ လင်းကိုင်ပြီး အပေါက်ဝလေးမှာ တေ့ပြီး ထိုင်ချပစ်လိုက်တယ်♥ အိုကိုကိုရယ်♥ ကောင်းလိုက်တာနော်♥ ဟင့်♥ အထဲက ယားနေတာလေးတွေကို♥ ကိုကို့ဂေါ်လီလုံးလေးက ပွတ်တိုက်သွားတယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ အကြီးကြီးပဲ♥ ကြပ်သိပ်နေပေမယ့်♥ လင်း သွက်သွက်လေး လှုပ်ရှားမိတယ်♥ ကိုကို့မျက်စိတွေ မှေးသွားတယ်♥ အကောင်းဆုံး ချစ်တတ်အောင်♥ လင်း ကြိုးစားမယ်နော်♥ ဖင်လေးကို အနောက်ကို ပစ်ပြီး♥ စကောဝိုင်းလို မွှေ့ပေးလိုက်တယ်♥ လင်း ပိပိလေးထဲမှာ♥ ကိုကို့ဟာကြီးက တင်းနေတာပဲ♥ အို ကောင်းလိုက်တာ♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်း မြန်လာလေ♥ ကိုကို ငြီးလာလေ♥ ကောင်းရဲ့လားဟင်♥ လင်း ကိုကို့ နှုတ်ခမ်းလေးကို ဖိနမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ ဖင်လေးကို နောက်ပစ်ပြီး♥ ကိုကို့ကို အကောင်းဆုံး ချစ်ပစ်လိုက်တယ်♥ အရမ်းကောင်းတယ် အသဲရယ်တဲ့♥ အင်း လင်းလဲ အရမ်းကောင်းတယ်♥ နာကျင်မှုတွေနဲ့ အချစ်တွေ ပေးဆပ်လိုက်တော့♥ ကိုကို့ရဲ့ အကြင်နာတွေ လင်းရတာပေါ့♥ ကိုကို့ ရင်ခွင်မှာ♥ မျက်နှာလေး အပ်ပြီး♥ ကိုကို့ကို ချစ်ပေးနေမိတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်းတင်သားတွေကို ဆုပ်ပြီး♥ အတင်းပဲ လုပ်တယ်♥ အို နာတယ် နာတယ်♥ ကိုကိုရယ်♥ လင်း မခံစားနိုင်ဖူး♥ မခံစားတတ်ဖူး♥ အရမ်းမြန်အောင် ချစ်တော့♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းလဲ မသိဖူး♥ ရူးတောင်ရူးချင်တယ်♥ နှုတ်ခမ်းလေးကို တအားကိုက်ပြီး♥ အသက်အောင့်ထားမိတယ်♥ အဝင်အထွက်က တအားမြန်လာတယ်♥ ဝုန်းဆို ကိုကို လင်းကို ဆွဲလှဲလိုက်တယ်♥ လုံးရင်းထွေးရင်း♥ ကိုကိုက အပေါ်က♥ လင်းက အောက်က♥ ကိုကိုလေ လင်းတကိုယ်လုံးကို သိမ်းကျုံးဖက်ပြီး တအားဆောင့်ထည့်ပစ်တယ်♥ အို အို♥ နင့်ကနဲ နင့်ကနဲ ဖြစ်သွားတာပဲ♥ သားအိမ်ကို အဆောင့်ခံရတာ♥ အီစိမ့်နေတာပဲ♥ အရည်တွေလဲ တဖြန်းဖြန်းထွက်တာ♥ လူက မျော့နေပြီ♥ ကိုကိုကလဲ တအားချစ်နေတုန်းပဲ♥ မမောဖူးလား ကိုကိုရယ်♥ လင်း ကိုကို့ဟာကြီးကို အတင်းပဲ ညှစ်ထားပေးမိတယ်♥ လင်းလဲ အရမ်းကောင်းတာပဲ♥ နှေးလိုက်♥ တအားမြန်သွားလိုက်နဲ့♥ ကိုကို ချစ်သမျှ လင်း လိုက်လျောနေမိတယ်♥ ကိုကို့နားကို ကပ်ပြီး♥ လင်း ငြီးတွားမိတယ်♥ ကောင်းလွန်းလို့ပါ ကိုကိုရယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်ကွာ♥ လင်း အတင်းပဲ ကော့ပေးမိတယ်♥ ရှက်တော့ ရှက်တာပေါ့♥ ဒါပေမယ့် တအားချစ်နေတဲ့ ကိုကို့ကို လင်း သနားတယ်♥ လင်းခါးလေးကို ကိုင်ပြီး♥ ကိုကို အဆက်မပြတ် ဆောင့်တာ♥ အားး♥ လင်း သေပြီ♥ ဟူး♥ ဟင့် ဟင့် ဟင့်♥ လုံးဝမရပ်မနားပဲ ချစ်တော့♥ လင်း ရင်တွေတောင် တုန်တယ်♥ လှိုက်လှိုက်ပြီး တအားမောတယ်♥ လူလဲ မလှုပ်နိုင်တော့ဖူး♥ အရည်တွေ ထွက်ရလွန်းလို့လား မသိဖူး♥ ကျင်တောင် ကျင်လာတယ်♥ အောင့်လဲ အောင့်လာတယ်♥ တော်သေးတယ် ကိုကို ပြီးသွားလို့ပေါ့♥ လင်းပိပိလေးထဲကို အတင်းထိုးထည့်ပြီး♥ အရည်တွေ အများကြီး ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ်♥ ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်♥ နွေးကနဲ ဖြစ်သွားတယ်♥ ဟင့်♥ လင်း တိုးတိုးလေး ချွဲလိုက်မိတယ်♥ မချွတ်လိုက်နဲ့ကွာ♥ ကိုကို့ကို အတင်းဖက်ထားရင်း♥ အရမ်းချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ ကိုကို့ကို ဖက်ထားရင်း♥ လင်း မှေးကနဲ အိပ်ပျော်သွားတယ်♥
အချစ်ကြီးချစ်မိတော့လဲ♥ ခက်ပါတယ်နော်♥ နေ့နေ့ညည သဲသဲမဲမဲ♥ ကိုကို ချစ်သမျှ♥ လင်း အလိုလိုက်မိတယ်♥ ချစ်တာလဲ အရမ်းချစ်တယ်♥ လက်လွတ်သွားမှာလဲ ကြောက်မိတယ်♥ ကိုကိုနဲ့ ဝေးသွားရင်♥ ဟင့်အင်း♥ ဟင့်အင်း♥ လင်း ဘယ်တော့မှ မတွေးချင်ဘူး♥ ဖြစ်လဲမဖြစ်ချင်ပါဖူး♥ ညနေခင်းလေး ကားလျှောက်စီးမယ်ဆိုပြီး♥ အိမ်ကနေ ထွက်လာခဲ့တယ်♥ ကိုကို ဆိုးတယ်♥ ကိုကို နမ်းတော့ လင်း မနေတတ်တော့ဘူးလေ♥ လိုက်ခဲ့တာပေါ့♥ တီတီတာတာလျှောက်ပြောရင်း ကွန်ဒိုကို ရောက်သွားတယ်♥ ဓါတ်လှေခါးထဲမှာလေ♥ လင်းခါးကို ဖက်ထားတယ်♥ ပြီးတော့ တင်ပါးလေးကို ပွတ်တယ်♥ ကိုကိုနော်♥ ဟွန့်♥ တအားကဲတာပဲ♥ ပိုဆိုးတာက လင်း တင်သားနှစ်ခုကြားကို ပွတ်တယ်♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး♥ ကွန်ဒိုအခန်းလေးထဲ ရောက်တော့♥ လင်းနဲ့ကိုကို တအားဖက်နမ်းကြတယ်♥ ကိုကို့ရဲ့ အနမ်းတွေက တအားကြမ်းတာပဲ♥ လင်း နှုတ်ခမ်းလေးတောင် နာတယ်♥ ဆွဲဆွဲစုပ်တာ♥ ဟင့်♥ လက်တွေကလဲ ဗြောင်းဆန်နေတာပဲ♥ ထိန်းမနိုင် သိမ်းမရအောင်♥ လင်း အချစ်ခံချင်မိပါတယ်♥ မွေ့ယာကြီးကို မြင်တော့လေ♥ ကိုကို လင်းကို ပထမဆုံး ချစ်တာ♥ မေ့လို့မရဘူးကွာ♥ မျက်လုံးထဲပေါ်လာတယ်♥ အရမ်းရှက်တာပဲ♥ မျက်စိမှိတ်ပြီး လက်မြှောက်ပေးမိတယ်♥ အလိုက်တသိပေါ့♥ ခိခိ♥ ကိုကို လင်း ရင်သားလေးကို စို့တယ်♥ နမ်းတယ်♥ ဆစ်ကနဲ စူးသွားအောင် အရမ်းစို့တာပဲ♥ ဘယ်လိုကြီးမှန်းမသိဘူး♥ တကိုယ်လုံး ထူပူသွားတာပဲ♥ ဒီဘက်ပြီးတော့ ဟိုဘက်♥ ရုန်းလို့လဲမရဘူး♥ အတင်းပဲစို့တယ်♥ အကြာကြီးပဲလေ♥ ကိုကို့ ခေါင်းကို လင်း အတင်းဖက်ထားမိတယ်♥ ကလေးဆိုးလေးလို အတင်းစို့တော့♥ လင်း ကော့ကော့ပေးမိတယ်♥ ချစ်တယ်ကိုကိုရယ်♥ တော်ပြီကွာ♥ ကျိန်းနေပြီိဆိုမှ အနမ်းတွေက အောက်ဘက်ကို ရွေ့လာတယ်♥ အို ကိုကို့♥ လင်း ပိပိလေးကို ကိုကိုကြည့်တယ်♥ လင်း ပေါင်လေး ကားပေးလိုက်ပါတယ်♥ ရှက်လဲရှက်တာပေါ့♥ ဒါပေမယ့်လဲ အနမ်းတွေ လိုချင်တယ်♥ ကိုကို နမ်းပေးတဲ့ ဖီလင်ကို♥ လင်းကြိုက်တယ်♥ အဲဒီအနမ်းကြောင့်ပဲ လင်း ရူးသွားပြီလားမသိပါဘူး♥ ပိပိလေးက မို့ပြီး နီရဲနေတာပဲ♥ ကိုကို ရွှတ်ကနဲ တချက်နမ်းတယ်♥ ပြီးတော့♥ ပြီးတော့လေ♥ ပဲစေ့လေးကို လှပ်ကနဲ ယက်လိုက်တယ်♥ ဟင့်♥ လင်း ပေါင်တွေကို အတင်းကားပေးလိုက်မိတယ်♥ ကိုကို့ကို လင်းချစ်တယ်♥ အရမ်းချစ်တယ်♥ မနေနိုင်ဘူး ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်♥ ထောင်လာတဲ့ ပဲစေ့လေးကို အတင်းပဲ ဖိပြီး နမ်းတော့ လင်းရူးပြီပေါ့♥ မွေ့ယာခင်းကို အတင်းဆွဲထားရင်း♥ ကော့ကော့ပေးမိတယ်♥ ရှက်လိုက်တာ♥ ကလီစာတွေ ဗြောင်းဆန်ကုန်အောင်♥ ကိုကိုနမ်းတယ်♥ ပြီးတော့လေ♥ ပြီးတော့♥ လင်း ပဲစေ့လေးကို ကိုကို စုပ်တယ်♥ အားး♥ မခံနိုင်ဘူး ကိုကိုရယ်♥ ဟင့်အင်းကွယ်♥ မရပါဘူး♥ စုပ်တာပါပဲ♥ တောင်းပန်လေ ပိုစုပ်လေပဲ♥ တကိုယ်လုံးထူပူနေတာပဲ♥ ကျင်ကနဲ ဖြစ်ဖြစ်သွားတယ်♥ လင်းလေလင်း ဖင်လေးကို အတင်းကော့ပစ်လိုက်ရင်း♥ အရည်တွေက ဒလဟော♥ ထွက်ကျလာတယ်♥ ကိုကိုလေ မက်မက်မောမော♥ လျှာနဲ့ယက်တယ်♥ လင်း အရမ်းချစ်တာပဲ♥ လင်းကို ကိုကိုအရမ်းချစ်တာ♥ လင်း သိသွားပြီ♥ လင်းလေလင်း♥ ကိုကို့ကို အရမ်းချစ်တယ်♥ အတင်းပဲ ကိုကို့ကို ဖက်နမ်းမိတယ်♥ လက်ကလဲ ကိုကို့ဟာကြီးကို ကိုင်လိုက်မိတယ်♥ ချစ်တယ် ကိုကိုရယ်♥ လင်းလေ♥ စိတ်ထဲမှာ လိုလိုချင်ချင်နဲ့♥ ကိုကို့ဟာကို နမ်းပစ်လိုက်ချင်တယ်♥ အသဲလေး စုပ်ပေးမလို့လားတဲ့♥ အင်း စုပ်ပေးမှာပေါ့လို့♥
ဖောင်းကားနေတဲ့ ကိုကို့ဟာကြီးကို အတင်းစုပ်ထားရင်း လင်း ငုံ့နမ်းပစ်လိုက်တယ်♥ ကိုကို အတင်းပဲ ကော့တက်လာတယ်♥ လင်း အာခေါင်ထဲထိတောင် ဝင်တော့မယ် ကိုကိုရယ်♥ ဖြေးဖြေးပေါ့♥
+40 Vote Up
Re: (၁၈+) ရင်ခုန်သံပန်းနုနု ချစ်ပါရစေလားရှင်
« Reply #24 on: February 15, 2012, 09:13:01 PM »
“အား … ကောင်းလိုက်တာ … အသဲလေးရယ် …”
ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … ငုံပြီး စုပ်လိုက် … ကျွန်တော့်ကို မော့ကြည့်လိုက်နဲ့ … အသဲလေးကို … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … ဒီနေ့ကျမှ ဘယ်လိုဖြစ်မှန်းကို
မသိတာပါ … ဖီလင်တွေ အရမ်းတက်တယ် … အသဲလေး စုပ်စုပ်ပေးတာလဲ … အရမ်းကောင်းတယ် … ကျွန်တော် အတင်းပဲ ကော့ပေးမိတယ် …
“အသဲလေး … ကိုကို တအားချစ်ချင်နေပြီကွာ …”
“အွန် … ဖြေးဖြေးနော် …”
“အသဲလေး … စုပ်ပေးတာ အရမ်းကောင်းတယ်ကွာ …”
“အပိုတွေ … ဟုတ်လို့လား … ဟွန့် …”
“အင်း … တကယ်ပြောတာ”
“တော်ပါ … အတင်းပဲ”
“တင်းအောင်လုပ်တာကိုး … ကြည့်ပါအုံး … ဒီမှာ အရမ်းထောင်နေပြီ”
“အွန် … ကိုကိုနော်”
ကျွန်တော် … လင်း ပေါင်လေးကို … ကားလိုက်တော့ … အလယ်မှာ … ပန်းပွင့်လေးက ဖောင်းကားနေပြီ … ခုနက … အားရပါးရ နမ်းခဲ့တော့ … ပန်းလေးက
အရမ်းလှတယ်ဗျာ … မို့မောက်နေပြီး … နီရဲနေတာပဲ … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တအားကြွတက်လာတယ် … ခပ်သေးသေး အကွဲကြောင်းလေးက … လာပါ
ထည့်ပါတော့ ကိုကိုရယ်လို့ … ဖိတ်ခေါ်နေသလိုပဲ … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … ကိုင်ပြီး အပေါက်ဝမှာ တေ့လိုက်တော့ … လင်း … မျက်စိလေး … စင်းသွားတယ် …
နှုတ်ခမ်းလေး တွန့်သွားတယ် … ထိပ်ဖျားလေးနဲ့ … အပေါက်ဝလေးကို … ကလိလိုက်တော့ … လင်း အသံလေးထွက်လာတယ် …
“အို … ကိုကိုနော် … ဟင့် …”
“ယားတယ်ကွာ … မနေတတ်ဖူး …”
“အို … လင်း မနေတတ်ဘူးကွာ … ကိုကို့ … ဟင့် … ဟင့် … ဟင့်”
အသဲလေးရဲ့ ပန်းဝလေးကို … ကျွန်တော်ကလိရင်း … အသဲလေးရဲ့ … ငြီးသံလေးကို … ကျွန်တော် နားထောင်မိတယ် … အရမ်းချစ်တယ် … လင်းရယ် …
ချစ်တဲ့စိတ်တွေ … ဟုန်းဟုန်းတောက်လာတော့ … ကျွန်တော့် ခါးကို ဖိချလိုက်မိတယ် … ကျွန်တော့်ထိပ်ဖျား … အိကနဲ ဝင်သွားပေမယ့် … ကြပ်စီးနေအောင် …
အသဲလေးက … ဆွဲညှစ်ထားတယ် … ချစ်တယ် … အသဲလေးရယ် …
ဆိုပြီး … သက်အောင့်သံကြိတ်လေး … ထွက်လာပြီး … ကျွန်တော့်ကို … အတင်းဖက်ထားတယ် … စီးကနဲ … ဆွဲညှစ်ခံထားရတဲ့ … အရသာက … ဘာနဲ့မှ
မတူဘူးဗျ … ကျွန်တော် လှုပ်လို့မရအောင်ကို … အသဲလေးက … အတွင်းရော … အပြင်ရော ညှစ်ထားတယ် … ဒီအတိုင်းလေးပဲ စိမ်ထားရင်း … အသဲလေး
နားကို … ဖွဖွလေး နမ်းလိုက်တယ် …
“အို … ကိုကို့ …”
ယားတော့ … ထွန့်ထွန့်လူးသွားတယ် … ယားလေ … ပိုနမ်းလေပဲ … ပန်းလေးထဲကလေ … ဆွဲဆွဲညှစ်ပေးတယ် … ဘယ်လိုမှန်းကိုမသိဘူး … အရမ်းကို
အရသာရှိတာပဲ … တွန့်လိမ်နေတဲ့ကြားက … လင်းရဲ့ နားရွက်လေးကို … လျှာလေးနဲ့ ယက်ပေးမိတယ် … ရုန်းလေ ပိုယက်လေ … ပိုယက်လေ … ပိုယားလေပဲ …
ပိုယားတော့ … အထဲက တအားညှစ်တာပေါ့ … အဲဒါကို ကျွန်တော် ဘယ်လိုကြိုက်မှန်းမသိပါဘူး … ထပ်ခါ ထပ်ခါ လုပ်မိတယ် … အသဲလေးကတော့ …
အောက်မှာ ကော့လိုက်တွန့်လိုက်နဲ့ … တအားခံရခက်ရှာမှာပဲ … မနေနိုင်လွန်းအားကြီးလို့ထင်ပါရဲ့ …
“ကိုကို … လင်းကိုနှိပ်စက်နေတာလားဟင် … ဟင့်”
“ဟင့်အင်း … လင်း သေလိမ့်မယ် … တော်ပါတော့ … အားး”
ဗြန်းကနဲ … ပိပိလေးရဲ့ အတွင်းမှာ … ပူကနဲ ဖြစ်သွားတယ် … အသဲလေး … ကျွန်တော့်ကို … ကျစ်ကျစ်ပါအောင် … ဖက်ထားရင်း … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို …
ပြတ်ထွက်မတတ် ကိုက်ထားရှာတယ် … ပြီးသွားတယ် … ထင်တယ် … အထဲကလဲ … ပွစိပွစိနဲ့ … တဇတ်ဇတ် ညှစ်နေတယ် … စွတ်စို ပူနွေးနေတဲ့ … ပန်းလေးကို
… ကျွန်တော် တချက်မွှေပြီး … ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်လိုက်တယ် …
“အာ … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … ရှီးးး”
“အရမ်း … အရမ်း … မကြမ်းနဲ့ကွာ … ဟင့် …”
ကျွန်တော် ကြမ်းလို့ကို မရဘူး … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို … အထဲမှာ ဆွဲညှစ်ထားတာ … အတင်းပဲ … မရမက … ဖြေးဖြေးချင်း ဆောင့်ရင်း …
တဖြေးဖြေးကောင်းလာတယ် … အသဲလေးလဲ … တအားကောင်းနေတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ … မျက်နှာလေးက နီရဲတွတ်ပြီး … ပန်းသွေးရောင် ထနေတယ် …
အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတာပဲ … ချစ်လွန်းလို့ … ခပ်ကြမ်းကြမ်းလေး … ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် …
“အာ … ကိုကို့ … ဟင့် … အရမ်းပဲ … ဟင့် … ဟင့် …”
“ကောင်းတယ် … ကောင်းတယ် … ကိုကို … ဟင့်”
“အို အရမ်းကြီးမလုပ်နဲ့ … လင်း အရမ်း … အရမ်း … ဟာာ …”
ရမက်လှိုင်းလေးထန်နေတဲ့ အသဲလေးကို ကြည့်ပြီး … ကျွန်တော် ခပ်သွက်သွက်လေး ချစ်ပေးမိတယ် … အသဲလေးကလဲ … အောက်ကနေ မသိမသာလေး ကော့ကော့ပေးတယ် … အပေးအယူ မျှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ အခန်းခန်းလေးက … တရိပ်ရိပ်နဲ့ … နတ်ပြည်ကို ရောက်မှန်းမသိ ရောက်သွားပါတယ် … ကြပ်စီးနေတဲ့ အသဲလေးရဲ့ … အဖုတ်လေးက … ညှစ်ညှစ်ပေးမှုက … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ တဟုန်းဟုန်းထန်စေပါတယ် … ဟူး … မဖြစ်သေးဖူး … အားမရတော့ဘူး … ချစ်နေတာကို ခဏလေး ရပ်လိုက်တော့ … အသဲလေးက ခေါင်းထောင်ကြည့်တယ် … ကျွန်တော့်ကို အတင်းပဲ ဖက်ထားတယ် … သူလဲ အရမ်းစိတ်ကြွနေပြီလေ …
“ဟင့် … ဘာလို့ရပ်လိုက်တာလဲဟင် …”
“အသဲလေး ဒူးခေါင်းကွေးလိုက်ကွာ …”
“အင်း … အင်း”
အသဲလေးကို … ဒူးခေါင်းကို ရင်ဘတ်ထိအောင် … ကွေးခိုင်းပြီး … ကော့တက်လာတဲ့ … အဖုတ်လေးကို … ငုံ့ကြည့်မိတယ် … နီရဲနေတဲ့ ပွင့်ဖတ်နှစ်လွှာကြားက … ရဲရဲနီ တောင်ကြားလေးမှာ … အရည်တွေ စိုစွတ်နေတာပဲ … ရမက်တွေက ထန်လွန်းတော့ … ဘာမှမစဉ်းစားတော့ဘူး … အပေါက်ဝမှာတေ့ပြီး … တရှိန်ထိုး ဆောင့်ချပစ်လိုက်တယ် …
“ဟာာာာာာာာ … ကိုကို့ … အီးး”
အသဲလေး နာကျင်သွားမယ်ဆိုတာ သိပေမယ့် … စိတ်တွေက ထိန်းမရတော့ဘူးဗျာ … တဒုန်းဒုန်းနဲ့ နွားရိုင်းလိုပဲ … တဒုန်းဒုန်း ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … အောက်မှာနေတဲ့ အသဲလေးကတော့ … ကော့ပြန်နေတာပဲ … လည်ပင်းက အကြောလေးတွေ ထောင်ထလာအောင် … ကျွန်တော့် ဆန္ဒကို ဖြည့်ဆီးပေးရှာတယ် …
“အားး … ကိုကို … ဖြေးဖြေးကွာ … ဟင့်”
“အို … အို … အို … ဟင့်အင်း … ဟင့်အင်း … ဖြေးဖြေးဆို …”
“ဟင့် … ဟင့် … လင်း မခံနိုင်ဖူးနော် … အီးး …”
အရမ်းချစ်ဖို့ ကောင်းတဲ့ အသဲလေးကို … အားရပါးရ ဆက်တိုက်ဆောင့်ရင်း … ခေါင်းတယမ်းယမ်းဖြစ်နေတဲ့ … အသဲလေးကို … ကျွန်တော် မကြည့်ရက်တော့ဘူး … မျက်စိမှိတ်ပြီး … အားကုန်သာ ဆောင့်ပစ်လိုက်တယ် … အချစ်ရဲ့ အဆုံးသတ်ကို … ကျွန်တော် ရောက်ဖို့ … ကျွန်တော် အားကုန် ကြိုးပမ်းမိတယ် … အဖုတ်လေးထဲက … အရည်တွေ တပွက်ပွက် … ထွက်တော့ … အော်ဖို့တောင် အားမရှိတော့ဖူး ထင်ပါရဲ့ … မျက်စိလေးကို စင်းပြီး … အောက်နှုတ်ခမ်းလေးကို ကိုက်ရင်း … တဟင့်ဟင့်နဲ့ … ကျွန်တော်ဆောင့်သမျှကို ခံရှာတယ် … ချစ်တယ် … အသဲရယ် … အရမ်းချစ်တာပဲ …
“အားး ပြီးပြီ … ပြီးပြီ …”
“အွန် … အားး ကိုကို့ …”
အားကုန်ဆောင့်ထည့်ရင်း … ကျွန်တော့်ဒုတ်ထဲက … အရည်တွေ ပန်းထုတ်ပစ်လိုက်တယ် … အသဲလေး … ဇတ်ဇတ်ခါ နာရှာလွန်းလို့ … ရုန်းဖို့ ကြိုးစားသေးတယ် … မရဖူး … ကျွန်တော် အပေါ်ကနေ အတင်းဖက်ထားရင်း … နားရွက်လေးကို ခဲထားရင်း … အရည်တွေကို ပန်းထုတ်လိုက်တယ် …
တသိမ့်သိမ့်တုန်တဲ့ … အချစ်မုန်တိုင်းလေးက … ဖြေးဖြေးချင်းစဲသွားတယ် … ရင်ခုန်သံ ဖုတ်လိုက် ဖုတ်လိုက်နဲ့ … အချစ်ရဲ့ အရသာကို ခံစားရင်း … ကျွန်တော် … အသဲလေး ကိုယ်ပေါ်မှာ မှိန်းနေမိတယ် … ချစ်တယ် … အသဲလေးရယ် … အသဲလေးကတော့ မလှုပ်နိုင်တော့ဘူး … မျက်စိလေးမှိတ်ပြီး … အမောဖြေနေတယ … ချွေးတွေလဲ ရွှဲရွှဲစိုလို့ … မျက်နှာလေးက … သွေးရောင်ဖြန်းထားသလိုပဲ … အချစ်ခံပြီးချိန်မှာ … မိန်းကလေးတယောက်က အလှဆုံးလို့ … ကျွန်တော် ထင်တာပဲလေ … ဆန္ဒတွေ ပြည့်ဝသွားချိန်မှာ … မပြုံးတပြုံး မျက်နှာနီနီလေးကို … ကျွန်တော် အရမ်းချစ်တယ် … ကျွန်တော့်ဒုတ်ကို အပြင်မထုတ်သေးဘူး … အဖုတ်လေးထဲမှာ … စိမ်ထားရင်း … ချစ်သူလေးကို ဖက်ထားမိတယ် … တငြိမ့်ငြိမ့်နဲ့ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ငြိမ်သွားချိန်မှာ … ကျွန်တော် မှေးကနဲ … အိပ်ပျော်သွားတယ် …
“ကလင် … ကလင် …”
မဖွင့်ချင်ဖွင့်ချင်နဲ့ … ဖုန်းကို ကြည့်လိုက်တော့ … သူငယ်ချင်း တယောက်ရဲ့ဖုန်း … သူက ဆရာဝန် … ကျွန်တော်နဲ့ ကျောင်းနေဖက် … ကဲဖော်ကဲဖက် … ဟာကွာ … ရှုပ်လိုက်တာ … ကျွန်တော် ဖုန်းပိတ်လိုက်မယ် … စိတ်ကူးပြီးမှ … သတိရတယ် … ဟိုတပတ်ကျော်က … သွေးစစ်ထားတာ … သူ လှမ်းပြောတယ်ထင်တာပဲ … မကောင်းပါဘူးလေ … ဖုန်းကိုင်လိုက်တယ် …
“ဟေ့ … သူငယ်ချင်း …”
“အေး … ပြော …”
“မင်း သွေးစစ်ထားတာ … ရပြီကွ”
“အင်း … ဘာရောဂါ ရှိလဲဟ”
“သူငယ်ချင်း … စိတ်တော့ မကောင်းဘူးကွာ”
“ဘာရောဂါရှိလဲလို့ … အေကိုက်နေလို့လား”
“ဟာကွာ … မနောက်စမ်းပါနဲ့”
“သူငယ်ချင်း … ငါ မနောက်ဘူး … အတည်ပြောနေတာ”
“ငါ့ဆီလာခဲ့ပါလား … အေးအေးဆွေးနွေးကြတာပေါ့ကွာ”
“ကျွတ် … လာမနောက်စမ်းပါနဲ့ကွာ”
“ရော် … ငါမနောက်ပါဘူးကွာ … ငါလဲ စိတ်မကောင်းပါဘူး … အားရင်ထွက်လာခဲ့လေ … ဆေးခန်းမှာ ငါ ၅ နာရီလောက်ထိတော့ ရှိမယ် … သေချာဆွေးနွေးကြတာပေါ့”
“အေး … လာခဲ့မယ်ကွာ … ဒါပဲ”
ဟာကွာ … ဘာကောင်လဲမသိဘူး … သူများကို စိတ်ဒုက္ခရောက်အောင် … တအားလုပ်တယ် … ကျွန်တော့်စိတ်တွေ … တော်တော် တုန်လှုပ်သွားတယ် … ကျွန်တော့်မှာ … တကယ်ပဲ HIV/AIDS ရှိနေပြီလား … ကျွန်တော် နဲနဲလေး ဇဝေဇဝါလေးတော့ ဖြစ်မိတယ် … ကျွန်တော့်မှာ တကယ်ရှိနေပြီလား … တကယ်ဖြစ်နေပြီလား … ကျွန်တော့် စိတ်တွေ ထူပူလာတယ် … ကျွန်တော့်မှာ တကယ်ရှိနေရင် … လင်းရော … ကျွန်တော် လှည့်ကြည့်မိတယ် … မွေ့ယာပေါ်မှာ … ပုံ့ပုံ့လေး အိပ်နေတဲ့ … ချစ်ရသူလေးကို … ကျွန်တော် ခုနလေးမှ … ချစ်ခဲ့တာလေ … ဒါဆို … ဒါဆို … သူရော … ကူးစက်သွားပြီလား … ဟာ … သွားပါပြီဗျာ … ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ … တော်တော် ဝမ်းနည်းသွားတယ် … ကျွန်တော်နဲ့ လင်း လက်ထပ်မယ့် အစီအစဉ်တွေ … နှစ်ယောက်အတူတူ ဘဝတခုကို ထူထောင်ကြမယ့် အစီအစဉ်တွေ … ဘာမှအပြစ်မရှိတဲ့ … လင်း … ဟာဗျာ … ဟာဗျာ … သွားပါပြီ … ကျွန်တော် ဇောချွေးတွေ ပြန်လာတယ် … ကျွန်တော် ဘာလုပ်ရမလဲ … ကျွန်တော် ဘာဆက်လုပ်ရမလဲဗျာ …
ကျွန်တော်သာ … ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ် သစ္စာရှိခဲ့မယ်ဆိုရင် …
ကျွန်တော်သာ … အကာအကွယ်သုံးပြီး လိင်ဆက်ဆံခဲ့ရင် … နောင်တရတဲ့ အတွေးပေါင်းများစွာဖြင့် …